Myanmar 18 Plus: သင်းသင်းမွှေးမွှေး နှင်းဖွေးဖွေး - (၅)
သင်းသင်းမွှေးမွှေး နှင်းဖွေးဖွေး - (၅)
တီ.. တီ.. တီ..အောက်ထပ်မှ တယ်လီဖုန်း မြည်သံကြောင့် အိပ်ပျော်နေရာမှ နိုးလာခဲ့၏။ စူးရှ ပြန်ထွက်သွားပြီးကတည်းက ဖုန်း ပိတ်ပြီး အိပ်နေခဲ့သည်။ အချိန်ကို ကြည့်တော့ ည (၇)နာရီ ထိုးလုပြီ။ ဖွေး တအားကြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်ပဲ။ ပထမဆုံး သတိထားလိုက်မိသည်က စောင်ခြုံအောက်မှ အ၀တ်မဲ့ ကိုယ်လုံးလေး။ နောက်တော့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဝေဒနာနှင့် အေးစက်စက် ခြောက်ကပ်ကပ် ဖြစ်နေသည့် ကိုယ်အောက်ပိုင်း တစ်နေရာ။ ဒါ အိပ်မက် မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဖွေး အတွေး စ တို့ မရပ်တန့်နိုင်ခင် ဖုန်းမြည်သံ ထပ် ပေါ်လာ၏။
ကုတင်ပေါ်မှ ကြိုးစား ဆင်းပြီး အနားတွင် ပုံလျက်ကျနေသည့် ဂါဝန်လေးကို ကောက်စွပ်လိုက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း တစ်နေရာမှ ကိုက်ခဲ နာကျင်မှုကြောင့် လမ်းလျှောက်ရသည်မှာ သိပ် အဆင်မပြေချင်။ အောက်ထပ်အရောက်၊ တယ်လီဖုန်းလေးကို ကိုင်လိုက်တော့မှ ထင်သည့်အတိုင်း မေမေ..“ဟလို..”“ဖွေး.. သမီးရယ် မေမေ ခေါ်နေတာ ကြာလှပြီ.. ဟန်းဖုန်းကိုလည်း ပိတ်ထား.. ဒီက ခေါ်တော့လည်း တော်တော်နဲ့မကိုင်..”“ဖွေး အိပ်ပျော်နေလို့ မေမေ..”“အွန်.. ညနေစောင်းကြီး အိပ်ရလား သမီးရယ်.. နေကောင်းရဲ့လား မာလာဆွေ ရောက်နေပြီလား..”“ဟုတ်..” တကယ်တော့
မာ့ကို လှမ်းခေါ်ဘို့ လုံးဝကို သတိမရမိသေး။ မေမေ စိတ်ပူမှာ စိုးရိမ်၍သာ ဟုတ် လိုက်ရသော်လည်း သည်ညအဘို့ မိမိ တစ်ယောက်တည်းပါလား ဆိုသည့် အသိက ခုမှ ၀င်လာသည်။ အို.. ဘာဖြစ်လဲ.. မွေးကတည်းက နေလာတဲ့အိမ်မှာ ကြောက်စရာ ဘာရှိတာမှတ်လို့.. တံခါးတွေ လုံအောင်ပိတ်ပြီး အိပ်ရင် ရသားပဲမဟုတ်ပါလား။ မိမိစိတ်ကို ပြန်အားပေးမိတော့ နင်လိုအပ်ရင် ငါ့ကို အချိန်မရွေး လှမ်းခေါ် ဟူသော စကားလေးကို သတိ ရသွားမိပြန်သည်။ “ဒေါ်ခင်ခင်ထား မေမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်တယ် ဖွေး.. မောင်စိုးဝဏ္ဏက သမီးနဲ့ တွေ့ချင်လို့တဲ့.. မေမေ့ကို ခွင့်တောင်းနေတယ်..”“ရှင်..”“ဘာ ဖြစ်လို့လဲ ဖွေး.. သမီး မတွေ့ချင်လို့လား..”“မေမေ ပြန်လာမှ ဆိုလို့လေ..”“အင်းးးးး.. ဒါဆိုလည်း မေမေ အဲ့လိုပဲ ပြန်ပြောလိုက်ရမလား..”“ခဏ မေမေ.. ”“……..”“ဘယ်တော့ တွေ့ရမှာလဲ.. သူ့မိဘတွေကောပါမှာလား မေမေ.. လူကြီးတွေ ပါမယ် ဆိုရင်တော့ မေမေလည်း ရှိနေမှ အဆင်ပြေမှာပေါ့..”“မဟုတ်ဘူး သမီး.. မောင်စိုးဝဏ္ဏ တစ်ယောက်တည်း သမီးကို လာတွေ့ဘို့ ခွင့်တောင်းတာ.. သမီး လက်ခံမယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန် တွေ့ချင်လို့တဲ့..”သည်လောက်
လောဘို့ လိုသတဲ့လား.. အင်းလေ ကောင်းတာပါပဲ.. ခု မတွေ့လည်း နောက် တွေ့ရမယ့်
တူတူ.. လူကြီးတွေ မပါခင် နှစ်ယောက်တည်း တွေ့ရတာ ဆိုတော့ ပို ကောင်းတာပေါ့..။ “ဟုတ် မေမေ.. ဖွေး တွေ့လိုက်ပါ့မယ်.. ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန် မေမေပဲ ကြည့်စီစဉ်ပြီး ဖွေးဆီ ဖုန်း ပြန်ဆက်ပေးမလားဟင်..”“မေမေ စီစဉ် ဆိုတော့.. သမီး စိတ်ကော ပါရဲ့လား ဖွေးရယ်.. သမီး ဆန္ဒ မရှိရင် မေမေ ဇွတ် မလုပ်ဘူးနော်..”“သိပါတယ်မေမေ..
ခုလည်း သူ့ကို လက်ခံတွေ့တယ်ဆိုတာ လက်ထပ်ဘို့ ကတိပေးတာမှ မဟုတ်ဘဲလေ.. လွယ်လွယ် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စ မဟုတ်မှန်း သမီး နားလည်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မေမေ့ကို မျက်နှာပျက်ရအောင်တော့ ဖွေး မလုပ်ပါဘူး.. စိတ်ချနော် မေ့..”“အင်းပါကွယ်..
မေမေကလည်း သမီးလေး တစ်ဘ၀လုံး အတွက် ဆိုတော့.. ကဲပါ မေမေ ဟိုဘက်ကို ပြန်ပြောပြီး သမီးဆီ ပြန်ဆက်ပေးမယ်.. တစ်ခုပဲ မှာချင်တာ ဘာကိုမှ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်စရာ မလိုဘူးနော် သမီးငယ်..”“ဟုတ်..”မျက်စိ
စုံမှိတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်စရာ မလိုဘူးတဲ့လား မေမေရယ်.. မေမေ့သမီး ဒီမနက်ပဲ ကိစ္စ တစ်ခုကို.. အို.. တော်ပြီ.. မတွေးတော့ဘူး..။ မေမေ ဖုန်းချသွားသည်နှင့်
ရေချိုးခန်း ၀င်ကာ ခပ်သွက်သွက်ပဲ ရေမိုးချိုး သန့်စင်လိုက်သည်။ ရေပန်းမှ ကျလာသည့် ရေ နွေးနွေး လေးကြောင့် လူက အတန်ငယ် လန်းဆန်းသွား၏။ ခဏနေတော့ မေမေ
ဖုန်းပြန်ဆက်သည်။ သတို့သားလောင်းနှင့် တွေ့ရမည့် အရေးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိ၏။ အရေးထဲ မေမေက မာလာနှင့် ပြောမည် ဆိုပြန်သဖြင့် ရေချိုးနေကြောင်း ညာရပြန်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ခေါ်နေမည်စိုး၍ လှည့်ပတ် ပြောရပြန်သေးသည်။ မေမေ ဖုန်းချသွားပြီးမှ ခေါက်ဆွဲခြောက်တစ်ထုပ် ကို ကြက်ဥတစ်လုံး ထည့်၍ ပြုတ်လိုက်ပြီး ကော်ဖီ တစ်ခွက် ဖျော်လိုက်၏။ သည်နေ့အဘို့ မိမိ ဗိုက်ထဲတွင် ဘီယာမှ လွဲ၍ ဘာမျှ မရှိဘူး မဟုတ်ပါလား။ စဉ်းစားမိမှပင် အစာအိမ်ထဲမှ နာသလိုလို အောင့်သလိုလို ဖြစ်လာသေးသည်။အိပ်ခန်းဆီ
ပြန်ရောက်တော့ ည ကိုးနာရီ ထိုးလုပြီ။ တနေကုန် အိပ်ထားသည်မို့ လူက အိပ်ချင်စိတ်မရှိ။ သွေးစက်လေးများ စွန်းထင်းနေသည့် အိပ်ယာခင်း ကို ကြည့်ရင်း မနက်ဖြန်အတွက် စကားလုံး ရွေးမိသည်။ မိမိအား လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခွင့် ရရန် ဂုဏ်သရေရှိရှိ ချဉ်းကပ်လာသည့် သတို့သားလောင်းအတွက် မိမိ၏ အပျိုစင်ဘ၀ကို ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့တာ သေချာသွားပြီ။ သည်ကိစ္စက လူငယ်ချင်းကြားတွင် အရေးမပါသော ကိစ္စ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း မိမိ မလိမ္မာမှုကြောင့် မုဆိုးမ မိခင်ကိုတော့ မျက်နှာ မငယ်စေချင်။ သည်လိုတွေးလိုက်တော့ ကိုစိုးဝဏ္ဏနှင့် နှစ်ယောက်တည်း အရင် တွေ့ခွင့်ရခြင်းက ကောင်းပင်ကောင်းသေးသည်ဟု တွေးမိ၏။ မိမိ ဖြစ်ခဲ့သမျှကို အပွင့်လင်းဆုံး ပြောပြဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ မိမိ ရုပ်ရည်နှင့် ပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သူတို့ သိပြီး၊ လက်ခံပြီးသား။ ဒါတွေကို နှစ်သက်လို့သာ မိမိကို ဇနီးလောင်းအဖြစ် ကမ်းလှမ်းခြင်း မဟုတ်ပါလား။ သည့်ထက်ပို၍ ဖော်ပြစရာက မိမိ စိတ်နေစရိုက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သွားပြီ။ ရဲရင့် ပွင့်လင်းသော
စရိုက်နှင့် အပျိုစင်ကညှာမှေး.. ကြိုက်တာကို ရွေးပေတော့ သတို့သားရေ။သည်
အသက်ရွယ် ရောက်သည့်တိုင် အိပ်ရခက်သော ညများစွာ ရှိခဲ့ဖူးသည့်အနက် သည်တစ်ညက
အရှည်လျှားဆုံး ဖြစ်ခဲ့၏။ သက်ပြင်းများ ချရင်း၊ မွေ့ယာ ထက်တွင် လူးရင်းလှိမ့်ရင်း နာရီ စက္ကန့်များကို ပင်ပန်းစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ မနက်မိုးလင်းတော့ လူက ငိုက်ချင်ချင် ဖြစ်နေ၏။ ခေါင်းထဲက ထိုးကိုက်နေ၍ မွှေး အခန်းဘက် ကူးပြီး ဆေးတစ်လုံး ယူသောက်လိုက်ရသည်။ အကိုက်ခဲ ပျောက်ဆေးအပြင် မနေ့က ကိစ္စအတွက် စူးရှနှင့် မိမိအကြား ဘာအမှတ်တရမျှ မကျန်စေရန် ကိုယ်ဝန် ကာကွယ်သည့် ဆေးပါ တွဲသောက်လိုက်သည်။ မိမိ အဖြစ်ကို ပြန်တွေးမိတော့ မျက်ရည် လည်လျှက်မှ ပြုံးမိရသေး၏။ ခေါင်းထဲသို့ ဖြတ်ကနဲ ၀င်လာမိသည်က မြတ် ဆိုသော နံမည်လေး ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ နင့်မှာက ဒီလို အမှတ်တရမျိုး ရှိဖူးတယ် မဟုတ်လား စူးရှ.. ငါ့ကိုယ်ငါ အချိန်မီမကာကွယ်ရင် နင့်ကို အသားလွတ် အနိုင်ကျင့်မိတဲ့ ငါ ၀ဋ်လည်သွားနိုင်တာပေါ့.. နင်က ဘာမှသာ မဟုတ်တာ.. အင်မတန် အောင်မြင်တဲ့ကောင်ပဲ..။သည်လိုနှင့် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ ပြင်ဆင်ပြီး ချိန်းဆိုသည့်နေရာသို့ ရောက်လာခဲ့၏။ စိတ်ထဲမှ စီစဉ်လာသော စကားလုံးများက ခုချိန်ထိတော့ အစီအရီ ဖြစ်နေသေးသည်။ တက်စီကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး အကျီလေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်သည်ထက် ဖြစ်အောင် ဆွဲဆန့်လိုက်၏။ လက်ကိုင်အိတ်လေးထဲမှ မှန်ထုတ်ကြည့်ရန် စိတ်ကူးမိသေးသည်။ သည်လောက်လည်း မလိုပါဘူးလေ.. ငါ တွေ့ရမယ့်လူက တစ်သက်လုံး ပေါင်းရမယ့်သူ ဖြစ်နိုင်သလို ဒီတစ်ရက်တည်း တွေ့ပြီး ပြီးသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တကူးတက ဟန်လုပ်နေစရာ လိုမှ မလိုတာ နော်။ (…) ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမက မကြာခဏ ရောက်ဖူးနှင့်ပြီးသား နေရာဖြစ်သော်လည်း သည်နေ့အဖို့ ထူးပြီး ကျယ်လွန်းနေသည်။ ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးလေးကို မေးလိုက်တော့ မိမိ အတွက်စီစဉ်ထားသည့် သီးသန့်ခန်းကို ညွှန်ပြ၏။ ကြွေပြားလှလှများ ခင်းထားသည့် ကြမ်းပြင်ကြောင့်ပဲလား.. စီးလာမိသည့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သံက တဆိတ်
ကျယ်လွန်းနေသယောင်ယောင်။အခန်းပေါက်ဝရောက်တော့ တံခါး ပိတ်မထား။ စားပွဲ၏ ဟိုဘက်တွင် ပြတင်းပေါက်ကို မျက်နှာမူကာ အပြင်သို့ ငေးကြည့်နေပုံရသည့် မိမိ၏ သတို့သားလောင်း ကိုစိုးဝဏ္ဏ။ ဆင်စွယ်ရောင် ရှပ်အကျီနှင့် ရှားရောင် ဘောင်းဘီကို သပ်ရပ်စွာ ၀တ်ဆင်ထားသည်။ ၀င်ပေါက်ကို ကျောခိုင်းထားသည်မို့ နောက်ကျောကိုသာ မြင်ရခြင်းဖြစ်သော်လည်း သူ့ပုံစံက စိမ်းသက်သက် ဖြစ်မနေ။ အရပ်အမောင်းနှင့် ဆံပင် ပုံစံတို့ကအစ မိမိနှင့် ရင်းနှီးလွန်းနေသည်။ ဖွေး အာရုံတို့ အနည်းငယ် နောက်ကျိကျိ ဖြစ်လာ၏။ မနေ့ညက အိပ်ပျက် ထားသောကြောင့်ပဲ ဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။ ဖွင့်ထားသည့် တံခါးကိုပဲ အသာ ခေါက်ပြီး အခန်းထဲ ၀င်ရန် ပြင်လိုက်၏။ တံခါး ခေါက်သံ၏ အဆုံးတွင် အပြင်ကို ငေးကြည့်နေသည့် ကိုစိုးဝဏ္ဏ မိမိဘက် လှည့်လာသည်။ ဦးခေါင်းကို အရင်ဆုံး စောင်းငဲ့လိုက်ပြီးမှ ကိုယ်ခန္ဓာက တဖြည်းဖြည်းချင်း။ မိမိနှင့် မျက်နှာချင်း
တည့်တည့် ဆိုင်မိသည့် ခဏ..။
မိမိ မျက်လုံးများ တဒင်္ဂ မူးနောက်ပြာဝေသွားရခြင်းမှာ သူ့နောက်မှ ပြတင်းပေါက်၏ အလင်းရောင်ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သည်သို့ဆိုလျှင် စိုးဝဏ္ဏ၏ ငေးကြောင်ကြောင် မျက်ဝန်းများကရော.. အပြစ်တစ်ခု ကျူးလွန်ဖူးသူတစ်ဦး၏ အားတုန့်အားနာ အပြုံးကရော.. သည်နှစ်ခုလုံးက ဘာကြောင့်များ။ မိမိတစ်ကိုယ်လုံးရှိ အနွေးဓာတ်အားလုံး ရုတ်ချဉ်း လျော့ပါးသွားရ၏။ အ၀တ်အစားပုံစံနှင့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြီးသင်ထားသည့် ဆံပင်မှလွဲ၍ သည်မျက်နှာ၊ သည်ခန္ဓာကိုယ်၊ သည် အရပ်အမောင်း အားလုံးက..။ ဒါ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခု မဟုတ်မှန်း ကောင်းစွာ သိသော်လည်း လူက ကြက်သေ သေသွားမိသည်။ စိုးဝဏ္ဏဟု မိမိ သိထားသည့် ထိုသူက စားပွဲကို ကွေ့ပတ်လျှောက်လာပြီး မိမိနှင့် လက်တစ်ကမ်း အကွာထိ ရောက်လာ၏။“ဖွေး..”“…….”“လာ ထိုင်လေ...”“……….”ကြားဖူးနေကျ
ချိုသြသြ အသံက ပို၍ နူးညံ့ ညင်သာနေသည်။ မိမိထံ ကမ်းလိုက်သည့် သူ့လက်များကို ရှောင်ရင်း ခြေတစ်လှမ်း နောက်ဆုတ်လိုက်မိ၏။ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ။ သူက ဘာလို့ သည်နေရာကို ရောက်နေရတာလဲ.. ကိုစိုးဝဏ္ဏ နဲ့ သူနဲ့ တစ်ခုခု ပတ်သက် နေတာလား..။ သီးသန့်စားသောက်ခန်း၏ အနီးဝန်ကျင်တွင် မည်သူမျှ ရှိမနေ။ သည်အချိန်မှာ သည်နေရာကို သူ ရောက်နေခြင်းက ဘာအတွက်လဲ..။ တကယ်လို့များ သူနှင့် ကိုစိုးဝဏ္ဏ တစ်ခုခု ပတ်သက်နေပြီး မနေ့က ကိစ္စ မိမိနှင့် ဟိုတစ်ယောက်ကြားတွင် အနှောက်ယှက် တစ်စုံတစ်ရာ ပေးဘို့..။ ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်။ မိမိ သိထားသည့် စူးရှ ဆိုသော ကောင်ကလေးက သည်လိုလူမျိုး မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် မိမိအပေါ် သည်လို စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စေသည့် အပြုမူမျိုး လုပ်မည့်သူ မဟုတ်။ နောက်တစ်ခု၊ သည်နေ့ သူ့ပုံစံက ခါတိုင်းလို အရောင်မှိန်မှိန် ခပ်ကုပ်ကုပ် ဖြစ်မနေ။ ဒါကတော့ သိပ်မဆန်းပါချေ။ ရောက်နေသည့် နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ၀တ်စားလာခြင်းဟု တွေးလို့ ရသည်။ လူပုံစံက မည်မျှပင် တောက်ပြောင် သစ်လွင်နေဦးတော့ မိမိကို ငေးနေသည့် မျက်လုံးများကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရီဝေ ငေးကြောင်နေသည်ပဲ။ သို့သော် မိမိကို ကြိုဆိုနေသည့် သူ့ပုံစံက အိမ်ရှင် ဆန်လွန်းနေသည်။ အတွေးပေါင်းစုံနှင့် ဖွေး
ရုတ်တရက် စကား မပြောနိုင်။“ဖွေး.. ငါ စူးရှ လေ..” မိမိကို
ပြူးကြောင်ကြောင် ကြည့်ပြီး အံ့သြနေသည့် သူမကို စူးရှ ခေါ် စိုးဝဏ္ဏ ပြောလိုက်သည်။ ဖွေး အရမ်း အံ့သြ သွားမှာပဲ.. စိတ်ဆိုးသွားမလား.. ၀မ်းသာသွားမလား မသိပေမယ့် မိမိတွင် သူမကို ပြောစရာ စကားများစွာ ရှိနေသည်။ သည်ပုံစံနှင့် ပြောရန် ရည်ရွယ်ရိုး မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်း မနေ့က ကိစ္စပြီးကတည်းက တစ်နေကုန် ဖုန်းခေါ်လို့လည်း မရ။ မိခင်ဖြစ်သူထံမှတဆင့် အိမ်လိုင်းဖုန်း နံပါတ်သိခဲ့ရသည်။ သိသိချင်း လှမ်း ဆက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသေးသော်လည်း သူ လက်မရဲခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ မိမိရင်ထဲက စကားများကို ပြောရန် မေမေ့ အကူအညီကို ယူခဲ့မိသည်။ ဒေါ်မိမိခိုင် ခရီးက ပြန်ရောက်လျှင် လူကြီးစုံရာနှင့် တရားဝင်ကမ်းလှမ်းစကား ပြောကြရန် စီစဉ်ပြီးသား။ သူ့ဘက်မှ ချက်ချင်းကြီး တွေ့ခွင့်တောင်းသဖြင့် လူကြီးများပင်
မျက်စိ လည်ကုန်ကြရသည်။ မတတ်နိုင်။ ရက်တစ်ရက်၏ (၂၄) နာရီတွင် စက္ကန့်ပေါင်းက
များစွာ မဟုတ်ပါလား။ “သိသားပဲ..”“…….”“နင့်ဘာနင် ဘာပုံစံ ဖြစ်နေနေ နင့်ကိုငါ ခွေး ချီသွားတာတောင် မှတ်မိတယ်..”ဟူးးး…
တော်ပါသေးရဲ့။ မှင်တက်မိနေသော သူမ ထံမှ ခပ်စွာစွာ စကားလေး ကြားလိုက်မှပင် သူ ရင်အေး သွားရ၏။ ဖွေး တစ်ယောက် စိတ်ထဲတွင် ဇဝေဇ၀ါ အတွေးများစွာ ဖြစ်နေသော်လည်း ခပ်တည်တည်ပဲ ပြောချလိုက်သည်။ အားလုံးကို အပွင့်လင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ရောက်လာခဲ့တာ မဟုတ်လား။ လုံးဝ ထင်မှတ်မထားသည့်သူကို သည်အချိန်သည်နေရာမှာ သည်ပုံစံနှင့် တွေ့ရရုံမျှဖြင့် မိမိဘက်က ပြောင်းလဲစရာ ဘာမှ အကြောင်းမရှိ။ “နင် သည်ကို ဘာလာလုပ်တာလဲ စူးရှ..”“အရင်ဆုံး ၀င် ထိုင်လိုက်ပါဦး ဖွေးရယ်.. ငါ အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းပြမယ်လေ နော်..”“ငါ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို တွေ့ဘို့ ချိန်းထားလို့ လာတာ.. နင်နဲ့ စကားလက်ဆုံ ပြောဘို့ မဟုတ်ဘူး..”“အင်းပါ.. ငါ သိပါတယ်.. နင် ချိန်းထားတာ စိုးဝဏ္ဏ မဟုတ်လား..”“………..”“………..”“နင်က ဘယ်သူမို့လို့ သည်ကိစ္စ သိနေရတာလဲ စူးရှ..”ဟုတ်များ
ဟုတ်နေမလား ဟူသော အတွေးနှင့် မေးလိုက်မိသည်။ စူးရှ နဲ့ စိုးဝဏ္ဏ တစ်ယောက်တည်းများ ဖြစ်နေမလားဟု တွေးလိုက်မိခြင်းက မိမိ လောဘစိတ်များ ဖြစ်နေလေမလား။ ဖွေး၏ အမေးကို မဖြေမီ သူ တံတွေး မြိုချမိသည်။ မျက်နှာကို လက်ဝါး နှင့် ပွတ်မိသည်။ ဟူးး ကနဲ လေပူတစ်ချက် မှုတ်ထုတ်ပြီးမှ..“စိုးဝဏ္ဏ ဆိုတာ ငါ့ မှတ်ပုံတင် နံမည်ပါဖွေး.. သည်နေ့ နင် တွေ့ရမယ့် စိုးဝဏ္ဏ ဆိုတာ ငါပါပဲ..”“……..”“……..”လူတစ်ကိုယ်လုံး
လေထဲ မြောက်တက်သွားသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ကြည်နူး ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ အညာမိသွားသူတစ်ယောက်မို့ အထူးပင် ရှက်မိခြင်း၊ အေးစိမ့်နေသည့် အဆောက်ဦးထဲတွင် မွန်းတည့်နေပူပူက မိမိ မျက်နှာတစ်ကွက်တည်းကို ထိုးကျနေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ လူ့ဘ၀တွင် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် တိုက်ဆိုင်မှုများ သည်လိုပဲ ရှိတတ်ပါသလား။ ငွေကြေး ချမ်းသာသော မေမေ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ သား ဆိုတာထက်ပို၍ ဘာမှ မသိရသေးသော လူတစ်ယောက်က မိမိ ထံပါးတွင် ကျွန်တစ်ယောက်လို ခစား ခဲ့သူတဲ့လား။ မိမိဘ၀ တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေနိုင်မည်ဟု မှန်းဆ မျှော်လင့်ခဲ့သူက မိမိကို မယုံနိုင်လောက်သည့် ရင်ခုန် ခံစားမှုတွေ ပေးခဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲတဲ့လား။ ပုံမှန်အားဖြင့်
ဆိုပါလျှင် ပြောမပြတတ်အောင် ကြည်နူး ပျော်ရွှင်မိသော်လည်း စူးရှ ဆိုသည့် ကလေကချေကောင်ကို နှင်ထုတ်ပြီး သူဌေးသား စိုးဝဏ္ဏကို လာတွေ့မိသည့် မိမိ အဖြစ်ကိုတော့ အနည်းငယ်မက တစ်မျိုး ဖြစ်မိသည် အမှန်ပင်။ သူ့မျက်နှာကို စာအုပ်တစ်အုပ်လို ဖတ်ရှုမိသည်။ မိမိ အပေါ် ဘယ်လိုသဘောထား ရှိနေနိုင်မလဲ။ သေချာတာတော့ မိမိအပေါ် အနိုင်ပိုင်းလိုသည့်အတွေး လုံးဝ မတွေ့ရ။ စိတ်ကို အတည်ငြိမ်ဆုံး ထား၍ စကားပြောနိုင်ရန် ကြိုးစားမိသည်။ ငါက နှင်းဖွေးဖွေး.. ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်စီစဉ်ဘို့ လမ်းရွေးတဲ့နေရာမှာ သူတောင်းစားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူဌေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒါ ငါ့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ရမယ်.. နှုတ်ခမ်းများကို
တင်းတင်းစေ့ပြီး သူမျက်လုံး တည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်လိုက်၏။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် မြိုချလိုက်သော သူ့ သက်ပြင်းတစ်ချက်က မိမိအတွက် ခွန်အားဖြစ်သွားသည်။ မဲ့ပြုံးတစ်ချက် ပြုံးလိုက်ပြီး ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း နောက် ဆုတ်လိုက်၏။ ထို့နောက် ခပ်မှန်မှန် လှုပ်ရှားမှု အတိုင်း လှည့်ထွက်ခဲ့သည်။ စူးရှ ခေါ် စိုးဝဏ္ဏ မိမိရှေ့ ဖြတ်ကနဲ လာပိတ်ရပ်၏။ အေးစက်စက် ကြည့်နေသည့် မိမိ မျက်ဝန်းများကို ပြာပြာသလဲ ရင်ဆိုင်ပြန်ကြည့်သည်။“ဖွေး… ငါ တောင်းပန်ပါတယ် ဖွေးရယ်.. ငါ့ကို အချိန်ခဏပေးပါ.. ငါ ရှင်းပြပါရစေဟာ နော်..”“………….”“ဖွေး…”“နင် ငါ နဲ့ ပတ်သက်ဘို့.. ကျွတ်.. မဟုတ်သေးဘူး.. ခု လောလောဆယ်မှာ ငါနဲ့ စကားပြောဘို့ တကယ် မျှော်လင့်လား စိုးဝဏ္ဏ..”တည်ငြိမ်အေးစက်လွန်းသော မိမိစကားကို ဘယ်နှကြိမ်မှန်း မသိနိုင်လောက်အောင် ကပျာကယာ ခေါင်းငြိမ့်ရင်း ပြန်ဖြေသည်။“အင်းလေ.. ငါ ဒီအတွက် တစ်ညလုံးကို မအိပ်ရသေးတာပါဖွေးရယ်.. ခဏပဲ.. ငါပြောတာတွေ ခဏလေးပဲ နားထောင်ပေးပါ.. နော်..”“ဒါဆို နင် စောစောက ပြောတဲ့စကားကို ပြန်ပြင်လိုက်..”“အွန်..”“နင်
တွေ့ရမယ့် စိုးဝဏ္ဏ ဆိုတာ ငါပါပဲ ဆိုတဲ့ စကားလေ.. နင့်စကား မှားနေတာ နင် မသိဘူးလား.. ခု ချက်ချင်း ပြန်ပြင်ပြောလိုက် စိုးဝဏ္ဏ.. နှင်းဖွေးဖွေးကို တွေ့ခွင့်တောင်းတဲ့ စိုးဝဏ္ဏ ဆိုတာ ကျွန်တော်ပါပဲ လို့.. ပြင် ပြော လိုက်…”
မိမိ မျက်လုံးများကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း တစ်ခွန်းချင်း ပြောလိုက်သည့် စကားကြောင့် ထီပေါက်သွားသူ တစ်ယောက်လို ပျော်သွားမိသည်။ ဖွေးကို စ တွေ့ဖူးခဲ့သည့် အချိန်ကတည်းက သူ တိတ်တခိုး မြတ်နိုးခဲ့မိသည်။ ကိုယ့်အကြောင်းနှင့် ကိုယ် စိတ်လေနေသည့် အချိန်များမို့ သူမအနားကို ရဲရဲတင်းတင်း မချဉ်းကပ်ဝံ့ခဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ သူမက မိမိ အတိတ်ကို သိသွားပြီး
မိမိ အနားသို့ မျှော်လင့်မထားသော ပုံစံဖြင့် ရောက်လာခဲ့သည်။ စိတ်ပျက်ခြင်းတစ်ဝက် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတစ်ဝက်နှင့် သူမ အနိုင်ကျင့်သမျှ ခံယူခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး ၀တ်လက်စ ပင်တီလေး ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ရခဲ့သည့်နေ့က သူ လုံးဝ အရူးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရ၏။ သို့သော် တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ထိုနေ့က သူမ အိမ်မှ အပြန်လမ်းတွင် မိခင်ဖြစ်သူ ထံမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။ လူပေလူတေ တစ်ယောက်လို နေနေသည့် အချိန်များကို ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလာ၏။ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့လာပြီဖြစ်သော ဖခင်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ရန် တာဝန်က မိမိ ပုခုံးပေါ် အလိုလို ကျရောက်လာခဲ့သည်။ သည်ကြားထဲ မေမေကိုယ်တိုင်က မင်းအဖေ အသက် မှီချင်ရင် ချက်ချင်း ပြန်လာ ဟု ပြောခဲ့သည်ဖြစ်ရာ..။ပင်ကိုယ်အားဖြင့် စိတ်ထား ပျော့ပြောင်းသူမို့ ဖခင်၏ ကျန်းမာရေး အခြေနေကို ကြားကြားချင်း သူ အလွန်ပင် တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ သုံးဦးတည်းသော မိသားစုလေးအပေါ် တာဝန်မဲ့သည့် သားတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်ချင်။ ညတွင်းချင်း ရရာ ကားနှင့် ပြင်ဦးလွင် သို့ သူ ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တကယ်လည်း ဖေဖေ့ အခြေအနေက မှန်းဆရ ခက်လောက်အောင် ဆိုးရွားနေခဲ့သည်။ ဖွေး ထံသို့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားရန် စိတ်ကူး မိပါသော်လည်း ရန်ကုန်ရှိ ဆရာနှင့် အန်တီ အပါအ၀င် အားလုံး၏ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်သားထားသည့် ဖုန်းက အပြန်လမ်းတွင် ဘယ်နား ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားခဲ့သေး၏။ ဆေးရုံပေါ်တွင် ဖခင်ကို အနီးကပ်ပြုစုရင်း၊ အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်နေသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဖေဖေ့ကိုယ်စား ထိန်းကျောင်း စီမံရင်း၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် သောက များနေရသည့် မိခင်ကို ဖေးမရင်း အိပ်ချိန်ပင် ကောင်းကောင်းမရခဲ့။ ပင်တီ နွမ်းနွမ်းလေး ပိုင်ရှင် သခင်မကိုလည်း လွမ်းရုံသာ သူ တတ်နိုင်ခဲ့သည်။ဖေဖေ
နလန်ထလာတော့ တစ်ခါ ညီအကို ၀မ်းကွဲဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ကောင်းမြတ်၏ မင်္ဂလာ ကိစ္စအတွက် ကူညီပေးရပြန်သည်။ ကောင်းမြတ် လက်ထပ်မည့် ဇနီးလောင်း ဓာတ်ပုံ မြင်လိုက်ရသည့် နေ့က သူ့ခေါင်းကို မိုးကြိုး ပစ်သလို ခံစားလိုက်ရ၏။ သည်တော့မှ သူ သိထားသော ဖွေး၏ အစ်မ ဆိုတာ ရုပ်ချင်း ခွဲမရအောင် တူသည့် အမြွှာမှန်း သိလိုက်ရသည်။ အံသြစရာ တိုက်ဆိုင်မှုများကိုလည်း အိပ်မက်လားပင် ထင်မှတ်မှားခဲ့ရ၏။ မိဘများက သူ့အား အိမ်ထောင်ရက်သား ချပေးရန် စီစဉ် လာသောအခါ မိမိ အိမ်ထောင်ဘက်ကို မိမိ သဘောဖြင့် ရွေးချယ်ခွင့်ပြုပါရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကောင်းမြတ်၏ ခယ်မ ဖြစ်သူ နှင်းဖွေးဖွေးကို သူ မြတ်နိုးမိကြောင်း မေမေ့အား ပြောပြခဲ့သည်။ လူကြီးချင်း ရင်းနှီးရင်းစွဲမို့
အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ ရွှေလမ်း ငွေလမ်း ပွင့်ခဲ့၏။ နှလုံးသားချင်း ပြောခဲ့သော စကားများအရ သူ့အပေါ် ထားရှိသည့် ဖွေး၏ ခံစားချက်ကိုလည်း မြင်မိသည်။ သည်ကိစ္စ အားလုံးကို စူးရှ အနေနှင့်ပဲ ဖွင့်ပြောရန် သူ ကြိုးစားခဲ့၏။ ဒေါ်မိမိခိုင်၏ လက်ရှိ စီးပွားရေး အခြေအနေကလည်း မိမိတို့ မိသားစုအပေါ် မှီခိုရမှုများ ရှိနေသည် မဟုတ်ပါလား။ သည်လို အခြေအနေမျိုးတွင် ငွေရှင်ကြေးရှင် တစ်ဦးအနေနှင့် ဖွေး အနားသို့ ချဉ်းကပ်ရန် သူ မရဲခဲ့။ ဒေါ်မိမိခိုင်၏ ကျန်းမာရေး သတင်းပါ ကြားလိုက်ရတော့ ပို ဆိုးသွားသည်။ မြတ်နိုးရပါသော
မိန်းကလေး ပင်ပန်းနေချိန်များတွင် အနား၌ သူ မရှိနိုင်ခဲ့။ နှင်းဖွေးဖွေးကို သတို့သမီးအဖြစ် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း ခွင့်တောင်းခဲ့သော်လည်း မိမိတို့ အနေအထားက တကယ်ကြီး ချစ်သူရည်းစား မဟုတ်ပြန်တော့ မိဘနှစ်ပါးကို လောရန် မတတ်နိုင်။ အထူးသဖြင့် ဖွေး အနေနှင့် မိမိကို လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါလျှင် သူမ မိသားစု ခက်ခဲ အားနည်းနေချိန် ငွေကြေးအင်အား သုံးသလိုဖြစ်သွားမှာ သူ အရမ်းကြောက်သည်။ ဖွေးဘက်က လက်ခံစဉ်းစားမည်ဟု အကြောင်းပြန် စကား ကြားရတော့ သူ ပျော်မိသည်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ စူးရှ နှင့် စိုးဝဏ္ဏ တစ်ဦးတည်း ဖြစ်ကြောင်း သူမကို ပြောပြချင်သည်။ စူးရှ အနေနှင့်ပဲ ပြောပြချင်သည်။ ခုလို ဖြစ်သွားသည့် အခြေအနေက သူ အကြောက်ဆုံး၊ မလိုလားဆုံး အနေထားဖြစ်၏။ ဖွေး စိတ်ထဲတွင် သူမကို အရူးလုပ်သည်ဟု ထင်သွားမှာ သူ အလွန် စိုးထိတ်သည်။ မာန ကြီးသော မိန်းကလေးမို့ အရှက်သည်းပြီး ငြင်းချလိုက်လျှင် သွားပြီ။ရန်ကုန်မြေသို့ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း သခင်မထံ ၀င်ရောက် ခစားခဲ့သည်။ ဒေါသတကြီး မျှော်နေသော သခင်မလေး၏ တုန့်ပြန်မှုများအောက်တွင် ဆေးမိသူလို မိန်းမောရင်း စိတ်ကူးအားလုံး လွဲချော်ခဲ့ရ၏။ စူးရှ ဆိုသော ကလေကချေကောင်လေး ဘ၀နှင့် သခင်မ၏ ပန်းဦးလေးကို ခူးဆွတ်ခွင့်ရလိုက်တော့ ပီတိဖြစ်ရသည်ထက် ရင်နင့် ကြည်နူးရသည်။ တကယ်လို့ မိမိသာ စိုးဝဏ္ဏ မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်..။ အခြားတစ်ယောက်ကို လက်ခံတော့မည့် မိန်းကလေး အနေနှင့် သူ့အပေါ် ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းက အဘိုးထိုက်လှသည်။ ဒါက သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အတွေးသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ညက ဆရာ့အိမ်တွင်ပင် သူ အိပ်သည်။ အန်တီ့ပြောစကားအရ
သူ့ကို ဖွေး လာရှာ သေးကြောင်း သိလိုက်ရ၏။ ဓါးသွားလို စကားများနှင့် ထီမထင်
မျက်နှာပိုင်ရှင် သခင်မလေး၏ နုနယ်သော နှလုံးသားကို သူ ကောင်းကောင်းကြီး ခံစား သိလိုက်ရသည်။ မေမေ့ကို အရေးပေါ် အပူကပ်ရတော့၏။ မီးတောက်တစ်ခုအယောင် ဆောင်ထားသော နှင်းပွင့်ကလေး အနားသို့ သူအမြန်ဆုံး ရောက်လိုလှပြီ။ မိမိကြောင့် အရည်ပျော်ကျနေရှာသည့် နှင်းပွင့်ကလေးကို စိတ်ပူလှသဖြင့် တစ်ညလုံး တစ်မှေးမှ အိပ်မပျော်။ စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် စိုးထိတ်ခြင်း ရောယှက် လျှက်ကပင် သူအကြောက်ဆုံး အနေထားကို ရင်ဆိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရတော့သည်။ချိန်းဆိုထားသည့်
အချိန်ထက် အများကြီးစောပြီး သူ စောင့်နေခဲ့သည်။ သူ့ ဒိုင်ရာရီလေး အကြောင်း
ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည့် နေ့လေးကိုပင် အမှတ်ရမိ၏။ အကြောင်းပြချက်ချင်း မတူသော်လည်း တစ်စုံတစ်ခုကို ထိတ်လန့် နေရသည့် အဖြစ်ချင်းက တူနေသည်။ သူ့ကိုတွေ့တော့ သူမ မျက်နှာလေး အံ့သြ တုန်လှုပ်သွားသည်။ သို့သော် ရုတ်ချဉ်းပင် ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွား၏။ သူ့အတွက်တော့ သူမသည် တကယ်ပဲ စွမ်းအားကြီးလွန်းသော မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် လိုသလိုဦးဆောင် ထိန်းကျောင်းနိုင်သော မိန်းကလေး၊ လိုချင်တာကို ရအောင် ယူနိုင်သော မိန်းကလေး၊ ရဲရင့် ပွင့်လင်းသော မိန်းကလေး။ နေတစ်စင်းလို တောက်ပနေသည့် သူမ မျက်ဝန်းများ အောက်တွင် သူ့ သတ္တိတွေ အရည်ပျော်ရမြဲ။ ခုလည်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သူမကပဲ ဦးဆောင် သွားပြန်သည်။ သူမ ပြောခိုင်းသည့်
အတိုင်း နှင်းဖွေးဖွေးကို တွေ့ခွင့်တောင်းတဲ့ စိုးဝဏ္ဏ ဆိုတာ ကျွန်တော်ပါ ဟု ပြာပြာသလဲ ပြောလိုက်မိ၏။ သူ့စကား ဆုံးတော့ သခင်မလေးက မဲ့ပြုံးတစ်ချက် ပြုံးရင်း အခန်းထဲ ၀င်သည်။ ထိုင်ခုံနားတွင် ခြေစုံရပ်ပြီး သူ့ကို ခပ်စောင်းစောင့် လှည့်ကြည့်၏။ သူမ ထိုင်မည့်ခုံကို အလိုက်တသိပဲ ဆွဲထုတ် ပေးလိုက်သည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စကားပြောခွင့် ရပြီဆိုတဲ့နောက် အခြေအနေက မဆိုးလှသေး။ ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှန်း မသိသည့် လေပူ တစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ်ပြီး စားပွဲ တစ်ဘက်ရှိ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံတွင် ၀င်ထိုင်ရန် ပြင်လိုက်စဉ်..။“ရေ တစ်ခွက် ငှဲ့ပေး..”“အင်.. အော် အေးအေး..”ခုံတွင်
သွားထိုင်ရန် ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သော သူ့ကို ဖွေး အမိန့်ပေးပစ်လိုက်သည်။ စောစောက ဗြောင်းဆန်နေသော ရင်လည်း အထိုက် အလျှောက် ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီ။ သည်နေ့အဘို့ စိုးဝဏ္ဏ ဆိုသည့်လူကို မိမိ လာတွေ့ခြင်းက ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ရောင်းကုန်တစ်ခုလို သဘောထားပြီး ဈေးလာညှိခြင်း မဟုတ်။ မိမိ နှလုံးသားက အလိုရှိသူနှင့် ဦးဏှောက်က ဆုံးဖြတ်သူ၊ သည် နှစ်ခု ထပ်တူကျနေခြင်းက မိမိ၏ ကံကြမ္မာသာ ဖြစ်သည်။ သည့်အတွက် ပျော်မိသည်မှန်သော်လည်း လက်ရှိ အခြေအနေအရ ရွှင်မြူး ၀မ်းမြောက်မှုကို ဖော်ထုတ် ပြသခြင်းထက် အဆုံးအစွန်ထိ ဒေါသ ထွက်ပြလိုက်ခြင်းက ပို သင့်တော်သည် မဟုတ်ပါလား။ ရေသန့်ဗူးထဲမှ ရေကို ဖန်ခွက်ထဲ ငှဲ့ချပေးနေသည့် သူ့လက်ချောင်းများက ရှည်သွယ် သန့်ပြန့်နေသည်။ ငါ
ပျော်တယ် စူးရှ.. ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ.. ဒါပေမယ့် နင့်ကို ငါ ဖိုင်နယ် စာမေးပွဲ စစ်ချင်သေးတယ်.. လက်ရှိ နင့်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးမှ ဖြစ်လာတဲ့ ငါ့ စိတ်ပါ.. မတော်တဆ ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေ အကုန်လုံး နင် တမင်လုပ်တာ မဟုတ်မှန်း ငါ သိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် နင် ငါ့ကို ရဘို့ ဒီထက်ပိုပြီး အားထုတ်သင့်သေးတယ် ထင်တာပဲ.. သိပ် လွယ်နေရင် ကြိုးစားတယ် ဆိုတဲ့စကား အလကား ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟာ.. စိတ်တော့ မရှိနဲ့ ကောင်လေးရေ.. ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစား ယူရတယ် ဆိုတာ ကြိုးစားသူအတွက်ရော ရယူခံသူအတွက်ပါ တန်ဘိုး တက်စေတယ် ကွဲ့.. လူတစ်ယောက်၊ ပစ္စည်းတစ်ခု၊ နောက်ဆုံး အခြေအနေတစ်ခု ဆိုပါတော့ဟာ.. ဘယ်အရာကို ကြည့်ပြီး တန်ဘိုး သတ်မှတ်ကြမယ်လို့ နင် ထင်လဲ.. သူ့နေရာနဲ့သူ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေမယ့် အရာအားလုံးမှာ သေချာတဲ့ တန်ဘိုး သတ်မှတ်ချက်က တစ်ခုတည်း ရှိတယ်.. အဲ့ဒါ ဘာလဲ သိလား.. နင် မသိသေးရင်
မှတ်ထား စူးရှ.. လွယ်လွယ် ရတာ မှန်သမျှ အပေါစား ပဲ…
မိမိလက်ထဲ ကမ်းပေးလာသော ရေဖန်ခွက်ကို သူ့မျက်နှာအား လှည့်မကြည့်ဘဲ ယူသောက်လိုက်သည်။ လည်ချောင်းတလျှောက် စီးဆင်းသွားသည့် အေးမြမှုက စောစောက တုန်လှုပ်သွားသည့် စိတ်တို့ကို အတန်ငယ် ငြိမ်သက်သွားစေ၏။ ကိုယ်တော်ချောက သွားမထိုင်သေးဘဲ ရပ်နေသည်။ ဖန်ခွက်ထဲရှိ ရေကုန်သွားတော့ “ယူဦးမလား..” ခပ်တိုးတိုးမေးရင်း ဗူးထဲမှ ရေကို ထပ်ထည့်ပေးရန် ပြင်သည်။ ဖွေး ခေါင်းထဲ စိတ်ကူးတစ်ခု ပေါ်လာမိ၏။ သူ့မျက်နှာကို ခပ်တည်တည် စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ ကလေကချေ စူးရှ.. သူဌေးပေါက်စ စိုးဝဏ္ဏ.. အ၀တ်အစား ပုံစံ ကွာနေတာကလွဲလို့ နင်က နင်ပါပဲ.. ငါ့ အတွက်တော့ နင်က နင်ပဲ..။ စိတ်ထဲက တွေးရင်း မဲ့ပြုံးတစ်ချက် ပြုံးမိလိုက်သည်။ အသက်ရှု ကျပ်နေသည့်ပုံစံ ပေါက်နေသည့် ကောင်ကလေး၊ မိမိနှုတ်မှ တစ်စုံတစ်ရာ မပြောမချင်း လက်က ရေဗူးကို ကိုင်ထားဆဲ။ သည်ကတည်းက သူ့စိတ်အခြေအနေမှာ မိမိ စေညွန်ရာအောက် အလိုလို ပုံစံ ကျနေပြီမှန်း ဖွေး ရိပ်မိလိုက်သည်။ “တော်ပြီ.. ” ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောလိုက်သည့် အဖြေစကား ရမှ လက်ထဲက ရေဗူးကို ပြန်ချလိုက်မိသည်။ စောစောက ရေဗူးကိုင်ပြီး ခြေစုံရပ်နေသည့် မိမိ အဖြစ်က ဟိုတယ် စားပွဲထိုးရုပ် ပေါက်နေဦးတော့မှာ သေချာနေ၏။ စားပွဲတစ်ဘက်ရှိ ထိုင်ခုံဆီ ခြေလှမ်း ပြင်လိုက်တော့..“အဲ့ဒါ ဘယ်ကိုတုန်း..”“ထိုင် မလို့လေ..”“ငါ နင့်ကို ပေးထိုင်လို့လား..”“အွန်..”“လာပြန်ပြီ သည် အွန်..”“……”“မထိုင်နဲ့.. အဲ့တိုင်း ရပ်နေ..”“…….”“နင့်မှာ ငါ့ကို ရှင်းပြစရာ ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိနေတယ် မဟုတ်လား..”“ဟုတ်တယ် ဖွေး.. ငါ့မှာ ပြောစရာတွေ အများကြီးပဲ..”“ငါ နားမထောင်ချင်ဘူး..”“အာ..”“စကား ဖြတ်မပြောနဲ့.. ငါ့စကား ဆုံးအောင် နားထောင်..”“ဟင်းးးး…”“အဲ့ သက်ပြင်းချသံ ငါ အရမ်း မုန်းတယ် သိလား..”“အင်း.. အင်းပါ ဖွေးရယ်.. နင့်သဘောအတိုင်း ငါ နေပါ့မယ်.. ငါ့ကို နည်းနည်းတော့ ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ..”“ရှင်းပြရမှာပါ.. ငါလည်း သိချင်နေတာတွေ အများကြီးပဲ.. ဒါ ပေ မယ့်..”“…………”“ခုလောလောဆယ် ငါ အကုန် မသိချင်ဘူး..”“…………”“ဒီတော့ ငါ သိချင်တာပဲ ရွေးမေးမယ်.. နင် ဖြေ..”“…………”“ကျေနပ်လား..”“အင်းပါ.. နင့် သဘော.. မေးပါ ဖွေး.. နင်မေးသမျှ ငါ အကုန် အမှန်တိုင်း ဖြေပါ့မယ်..”သူမနှင့်
ပတ်သက်လာလျှင် မကျေနပ်ဘူး ဆိုသည့်စကားက မိမိ ဘ၀တွင် ရှိတောင် ရှိပါရဲ့လား။
ကိုယ်ကို မတ်မတ်ရပ်လိုက်ပြီး လက်နှစ်ဘက် နောက်ပစ်ထားလိုက်သည်။ ခေါင်းများကတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ငိုက်စိုက်။ နင် ကျေနပ်တယ်မဟုတ်လား ဖွေး.. နင်လိုချင်တာ သည်လိုပုံစံ မဟုတ်လား.. အရှင်သခင်တစ်ယောက် စစ်ဆေးသမျှ ရိုသေစွာ ဖြေကြားတော့မယ့် အစေခံတစ်ယောက်လို ပုံစံလေ..။ ထိုင်ခုံတွင် သွားထိုင်ရန်လည်း စိတ်မကူးတော့။ စကားပြောခွင့် ရသည်ကပင် မိမိအနေနှင့် တော်သေးသည် မဟုတ်ပါလား။ ဘယ်လောက်ပဲ ငွေးကြေးအသိုင်းဝိုင်းက မက်လောက်စရာ ဖြစ်စေဦးတော့ သူမ စိတ်နှင့် မတွေ့ပါလျှင် ထို အသိုင်းဝိုင်း အရှိန်ဝါက မိမိကို တားဆီးလိုက်သည့် တံတိုင်းပင် ဖြစ်သွားနိုင်သေးသည်။ သူမနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တစ်စက်ကလေးမှ ရှာမရတော့လောက်အောင် လူက ပြာယာခတ်သွားရသည်ချည်းပင်။ သည်လိုနှင့်ပဲ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ရှင်းပြရမည့် အခြေအနေမှ သခင်မ မေးသမျှသာ ဖြေရမည့်ဘ၀ ရောက်သွားရပြန်သည်။ ဘုရားသိကြားမလို့ ကိုယ်ပြောချင်သမျှ အကုန်မေးပါစေ ဟုသာ ဆုတောင်းရတော့၏။“နင့် နံမည် ဘယ်သူလဲ..”“……..”“နံမည် ပြောဘို့တောင် ပြန်စဉ်းစားနေရသေးတယ်လား.. နင် တကယ့် လူလိမ် လူညာ..”“အာ.. မဟုတ်ဘူး ဖွေး.. နင် ဘယ်လို ဖြေစေချင်မှန်း မသိလို့ပါ..”“ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ..”“ဟုတ်တယ်
ဖွေး.. နင် စိတ်ဆိုးမှာ ငါ အရမ်းကြောက်တယ်.. တကယ်က ဒါတွေအားလုံး မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်ကုန်တာပါဟာ.. ငါ ဘာတစ်ခုမှ တမင်လုပ်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး..”“လောလောဆယ်တော့ ငါ့ အမေးနဲ့ နင့်အဖြေ တခြားစီ ဖြစ်နေတယ်နော်..”“……..”“……..”“စိုးဝဏ္ဏ
ဆိုတာက ငါ့ မှတ်ပုံတင်ထဲက နံမည်.. ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူ အားလုံးက စူးရှ လို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်.. အိမ်နံမည်ပေါ့.. ဆရာနဲ့ စ သိတော့လည်း ဒီနံမည်ပဲ ငါ
အရင်ပြောမိလို့ပါ.. သင်တန်းမှာ ဖောင်ဖြည့်တာတော့ မှတ်ပုံတင် နံမည်နဲ့ပေါ့.. ဒါမယ့် ဆရာ ကိုယ်တိုင်က နှုတ်ကျိုးနေတော့..”“………….”“ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါဖွေး.. စူးရှပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. စိုးဝဏ္ဏပဲဖြစ်ဖြစ်.. နင့် စိတ်ထဲမှာ ငါ့ကို..”“………….”“ငါက နင် သိထားတဲ့ ငါပါ.. နင် လိုချင်တဲ့ ပုံစံ တွေးယူပါဖွေး..”သိပ်
သေချာတာပေါ့။ သည်လိုပဲ ဖြစ်နေရမယ်လေ။ သူ့ အဖြေစကားအတွက် ဖွေး စိတ်ထဲ အတိုင်းထက်အလွန် ကျေနပ်မိသည်။ သို့သော် မိမိထံပါးမှ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး သည်ပုံစံဖြင့် ပြန်ရောက်လာခြင်းကိုတော့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲ
မရှင်းနိုင်။ သူသာ မိမိကို အမှန်တကယ် အလေးနက် ထားပါလျှင် အနည်းဆုံးတော့ သူ့ဘ၀ အနေအထား အမှန်ကို ရှင်းပြသင့်သည် မဟုတ်ပါလား။ သည်လိုတွေးပြန်တော့ မိမိကရော သည်အခွင့်အရေး ပေးခဲ့လို့လား ဆိုတာ ပြန်တွေးမိသွားသည်။ မည်သို့ပင်
ဆိုစေ လက်ရှိဖြစ်သွားသည့်ပုံစံက သူ့အား တဘက်သတ် အနိုင်ကျင့်ခဲ့သည့် မိမိကို မထင်မှတ်ထားသော ပုံစံဖြင့် အနိုင်ပိုင်းလိုက်သလို ဖြစ်နေသည်ကတော့ အမှန်ပင်။ ရေမြွေလေးဟု မိမိ ထင်ခဲ့သည့် လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်နည်းနှင့်မျှ နဂါးတစ်ကောင်အဖြစ် မသတ်မှတ်ချင်ပါ။ မျက်နှာထားကို တတ်နိုင်သလောက် တင်းပြီး မေးခွန်းကို ပြန် စ သည်။ သူ ပြန်ဖြေမည့် အဖြေများကို အာရုံစိုက်နေသည့် မိမိ
နှလုံးသားကတော့ တထိတ်ထိတ် ခုန် လျက်။
“ပြော.. နင် ငါ့ကို မပြောမဆိုနဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စ..”“အွန်း.. အဲ့နေ့က
နင့်ဆီကအပြန် ငါ့အိမ်က ဖုန်း ၀င်လာတယ်.. မေမေ ဆက်တာ.. အဖေ အသည်းအသန် ဖြစ်နေလို့လေ.. အသက်မှီချင်ရင် ချက်ချင်း ပြန်လာ ဆိုတော့..”“……….”“တကယ်လည်း
ဖေဖေ တော်တော် ဖြစ်နေတာ ဖွေး.. ငါ မညာပါဘူး.. ငါ ပြန်ရောက်သွားတော့ အဖေ့ ကျန်းမာရေးရယ်.. အလုပ်ကိစ္စတွေရယ် တော်တော်လေး ရှုပ်ယှက်ခတ်ကုန်တယ်..”“………..”“အပြန်လမ်းမှာ ဖုန်းလည်း ပျောက်သွားသေးတယ်.. နံပါတ်တွေ တစ်ခုမှ အလွတ်မမှတ်မိလို့..”“………..”“တခြား
တစ်နည်းနည်းနဲ့ အကြောင်းကြားနိုင်ဘို့လည်း ဘယ်လိုမှ မစီစဉ်နိုင်လောက်အောင်
ငါ အလုပ်များခဲ့တာပါ ဖွေးရယ်.. ငါ နင့်ကို အရေးမစိုက်တာ လုံးဝ မဟုတ်ရပါဘူး..”“………..”“………..”“အွမ်းးး.. ဒါက ပျောက်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း.. ထားပါတော့.. မိဘ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ဆိုတာ ငါလည်း မကြုံဘူးတာမှ
မဟုတ်ဘဲ.. ဒါမယ့် နင့် ငါ့ဆီပြန်လာတဲ့ပုံစံမှာ ရိုးသားတဲ့ စိတ်ရင်း ပါမလာဘူးလို့ ငါ ခံစားလိုက်ရတယ်..”“အာ.. မဟုတ်ဘူး ဖွေး.. နင် အဲ့လို ထင်သွားမှာ ငါ အကြောက်ဆုံးပဲ..”ဒါပေါ့..
ငါကလည်း နင်အကြောက်ဆုံးဖြစ်မယ့်ကိစ္စ တမင်ရွေးပြောတာပဲလေ.. ။ နာကျည်းမှု အပြည့်ပါသည့် မဲ့ပြုံးတစ်ခုကို ပီပီပြင်ပြင် ပြုံးရင်း သူ့မျက်လုံးများကို စူးစိုက် ကြည့်ပစ်လိုက်သည်။ စိတ်အိုက်နေသည့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက် မျက်နှာက သည်လောက် ကြည့်လို့ကောင်းနေတာ သူ မို့လို့ ထင်ပါရဲ့လေ။ မျက်နှာကို လက်နှင့်
ပွတ်ပြီး သက်ပြင်း ခိုးချလိုက်သေး၏။ နင် တော်တော် အသည်းနုတာပဲ စူးရှ.. သည်လောက်လေးကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် ခံစားပြနေတော့ ငါ့အတွက် ပိုပြီး နိုင်ကွက် ရနေတာပေါ့ ငတုံးရယ်..။ ပီတိ အတွေးတို့ကြောင့် မိမိ မျက်ဝန်းမှ ဒေါသအရောင်များ လျော့ကျ မသွားမီ မာန်မြှင့်၍ စကား ပြန်ဆက်ရသေးသည်။“အာ့ဆို ရှင်းလေ.. တကယ်ဆို နင် ငါ့ဆီ ရိုးရိုးတန်းတန်း ပြန်လာသင့်တာမဟုတ်ဘူးလား..”“ဟုတ်ပါတယ်
ဖွေး.. နင် ပြောတာမှန်ပါတယ်.. ငါလည်း ဒီပုံစံမျိုး ဖြစ်စေချင်လို့ မဟုတ်ဘူး.. ငါ ရှင်းပြပါ့မယ်.. မေမေက ငါ့ကို အိမ်ထောင် ချပေးဘို့ စီစဉ်တယ်..”“………….”“ငါ.. ငါ လည်း အဲ့မှာ နင်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မေမေ့ကို ပြောမိသွားတယ်..”“………….”“………….”“ဘာလဲ.. နင် ငါ့ဆီမှာ အပြစ်သား လာ လုပ်တဲ့အကြောင်းလား..”“အာ..
ဖွေးရယ်.. ဒီလိုဟာ.. အစက နင့်အမ ဆိုတာကို အမြွှာမှန်း ငါ တကယ် မသိဘူး.. နင့် အမ စေ့စပ်တော့မယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် အဲ့လူက ငါနဲ့ ပတ်သက်နေမှန်းလည်း ငါ တကယ် မသိပါဘူး..”“ညီကို ၀မ်းကွဲ ဆို..”“အွန်း ဟုတ်တယ်.. ဒါမယ့် သတို့သမီးက နင့်အမ ဆိုတာ ငါ တကယ် မသိတာပါဖွေး.. မင်္ဂလာပွဲအတွက် စီစဉ်ကြတော့ ငကောင်းက ဒါ ငါ့လေဒီ ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံ ပြတယ်.. အဲ့မှာ နင့်ပုံ ဖြစ်နေတော့ ငါ
လုံးဝ ရှော့ခ် ပေါ့ဟာ..”“…………”“…………”ဘာလို့ ရှော့ခ် ရတာလဲလို့များ မေးလိုက်ပါတော့လား သခင်မရယ်.. ငါ နင့်ကို သိပ်ချစ်မိနေလို့ပါ
လို့ ဖြေချင်လွန်းလို့ပါ..။ ယောင်္ကျားကြီး တန်မဲ့ ဘာလို့ သည်လောက် သတ္တိ နည်းနေရမှန်း မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည်တော့။ တကယ်ဆို မေမေ့ကို ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကောင်းမြတ် ခယ်မလောင်း နှင်းဖွေးဖွေး ဆိုတာ သား မြတ်နိုးနေတဲ့ မိန်းကလေးပါ.. သူ့ကိုပဲ လက်ထပ်ချင်လို့ပါ ဆိုသည့် စကားလေးလောက်တော့ ပြောနိုင်သင့်သည် မဟုတ်ပါလား။ မိခင်ကိုပင် အထစ်ငေါ့မရှိ ပြောဖြစ်ခဲ့သည့် စကားတို့က ကာယကံရှင် သူမရှေ့ရောက်တော့ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်ကုန်သည်။ သည်စကားကို ဖွင့်ပြောမယ်ကြံတိုင်း ရင်ဆိုင်ရသည့် သူမ မျက်ဝန်းတို့ကလည်း မီးဝင်းဝင်း တောက်နေသည်ချည်းသာ။ ခုလည်း မိမိ မျှော်လင့်သည့် မေးခွန်းလေးများ မေးလိုက်လေမလား ဟူသည့် အတွေးနှင့် တင်းတင်းစေ့ထားသည့် သူမ နှုတ်ခမ်းလေးများကို စိုက်ငေး ကြည့်နေမိသည်။အခန်းလေးက
တဒင်္ဂ ငြိမ်သက် သွား၏။ မိမိဘက်က ဖြေရန် စကားများ စနစ်တကျ စီထားနှင့်သော်လည်း မေးခွန်းက ထွက်မလာသေး။ မြတ် ကိစ္စကိုလည်း မေးစေချင်သည်။ မိမိအပေါ် တစ်သက်လုံး အနိုင်ယူလိုက ယူစေချင်ပါသော်လည်း မိသားစုလေးတစ်ခု ထူထောင်ခွင့် ရမည် ဆိုလျှင်ဖြင့် သူမ မဟုတ်သည့် အခြားမိန်းမ တစ်ဦးနှင့် လူမသိသူမသိ ကလေးတစ်ယောက် ရဖူးသူ ဟူသည့် အတွေးကိုတော့ ပျောက်စေချင်မိသည်။ သူနှင့် ပေါင်းဖက်ပြီး သူမ မွေးထုတ်ပေးမည့် ရင်သွေးသည် သူ့အတွက် ပထမဆုံးသွေးသား၊ ပထမဆုံး မျိုးဆက်၊ ပထမဆုံး ဆုလာဘ်ရတနာသာ ဖြစ်ကြောင်း သခင်မလေး သိစေချင်ပါသည်။ ခါးလေး ဆန့်ထိုင်ပြီး တစ်ခုခုပြောရန် ပြင်လိုက်သည်မို့ သူ အားတက် သွား၏။ နှုတ်ခမ်း လှလှလေးမှ စကားသံ ထွက်လာသည်။“ငါ ဗိုက်ဆာနေပြီ..”“အွန်..”“………”“အင်း.. အေးပေါ့.. ဆာရောပေါ့.. ဘာမှာမလဲ ဖွေး.. ငါ ၀ိတ်တာ ခေါ်လိုက်မယ်လေ နော်..”“အင်း..”မျှော်လင့်ထားသလို
ဖြစ်မလာသော်လည်း သူ စိတ် မပျက်မိပါ။ သည်လောက် ရှင်းပြခွင့် ရလျှင်ပဲ မဆိုးလှပြီ။ တစ်ခုခုစားသည့် အဆင့်ထိ ရောက်လာပြီ ဆိုတဲ့နောက်တော့ သူမ အတန်ငယ် စိတ်ပြေလာကြောင်း ယူဆ၍ ရနိုင်ပြီမဟုတ်ပါလား။ စားရင်းသောက်ရင်း ဆက်မေးသမျှ အကောင်းဆုံး ဖြေနိုင်ရန်သာ ကြိုးစားရမည်။ နံရံရှိ လူခေါ်ဘဲလ် လေးကို နှိပ်လိုက်ပြီးမှ ကိုယ့် အဖြစ်ကိုယ် သတိထားမိသွား၏။ ခု ချိန်ထိ မတ်တပ်ရပ်နေရဆဲ။ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် သွားထိုင်လိုက်ဘို့တော့ စိတ်မကူးရဲ။ ခွင့်တောင်း ကြည့်ရမလား တွေးနေတုန်း တံခါးခေါက်သံနှင့်အတူ ၀ိတ်တာ ကောင်လေး ၀င်လာသည်။ ခုမှတော့ မထူးတော့ပြီမို့ သည်အတိုင်းပဲ ရပ်နေလိုက်တော့၏။ လှပ ကျော့ရှင်းသော မိန်းကလေးတစ်ဦးက စားပွဲတွင် သက်တောင့်သက်သာ ထိုင်နေသည်။ မိမိက လက်ကလေး နောက်ပစ်လျှက် အနားတွင် မတ်တပ်။ ၀ိတ်တာလေးက အူကြောင်ကြောင် မျက်နှာဖြင့် မိမိကို တလှည့် သူမကို တလှည့် ကြည့်သည်။ ခုနေ သွားထိုင်လိုက်ကာမှ ထ ဟောက်လိုက်ပါလျှင် လူရှေ့သူရှေ့ အရှက် ကွဲရဦးမည်။ လက်ရှိပုံစံတွင် မိမိက သူမ၏ ကိုယ်ရံတော်လိုလို သက်တော်စောင့်လိုလို အနေအထား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တော်သေးသည် မဟုတ်ပါလား။၀ိတ်တာကောင်လေးက မိမိထက် ငယ်မည့်ပုံပေါ်သည်။ ဧည့်သည်ပေါင်းစုံကို ဆက်ဆံနေရသည့် ကျင့်သားပြည့်
၀န်ထမ်းပီပီ မိမိကို ကြာကြာ စိုက်ကြည့်မနေပါ။ မီနူးကဒ် ကလေးကို ဖွေး ထံ လှမ်းပေးပြီး နုတ်စာအုပ်လေးတွင် မှာသမျှ ရေးမှတ်ရန် အသင့် ပြင်သည်။ ကောင်လေးက သူ့အလုပ်သူ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်နေသော်လည်း မိမိမှာတော့ နေမတတ်ထိုင်မတတ် ဆိုသလို ဖြစ်နေသည်။ ဟိုတစ်ခါ ဖိနပ်ဆိုင်မှာ လူရှေ့သူရှေ့ ဖိနပ် စီးပေးခဲ့ရတုန်းကမှ သမီးရည်းစားနှင့် ပုံမှားရိုက်လို့ ရသေးသည်။ ဒါတောင် ဟိုတုန်းက သူ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံစံက ယခုထက် များစွာ နွမ်းဖတ် သိမ်ငယ် နေခဲ့သေး၏။ နောက်တစ်ခု ဆိုးတာက သည်ဟိုတယ် သည်အခန်းကို ဘွတ်ကင် လုပ်တုန်းက သူ့ အတွင်းရေးမှုး ၀န်ထမ်းထံ ညတွင်းချင်း ဖုန်းဆက်ပြီး ခိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အတွင်းရေးမှုး ကိုမြတ်မင်းက အရွှန်း ကောင်းကောင်းနှင့် မိတ်ဆွေပေါသည်။ ဟိုတယ် မန်နေဂျာကလည်း သူ့ အသိဟု ဆိုသေး၏။ သည်အခန်းကိုမှာသူ မည်သူ ဆိုတာများ ပြောလိုက်သေးလား..။ သည်လိုတွေ့မိတော့ မတ်တပ်ရပ်နေရင်း လူက ကျုံ့ဝင်သွားသလို ခံစားလိုက်ရ၏။ မျက်နှာကိုလည်း ရင်ဘတ်ထဲ ၀င်မတတ်ပင် ငုံ့နိုင်သလောက် ငုံ့ထားမိတော့သည်။“တကူးတက ရေးမှတ်နေစရာ မလိုပါဘူး.. ခေါက်ဆွဲကြော်တစ်ပွဲ ကြက်သားနဲ့.. မြန်မြန်လေး ယူလာပေး.. ကုတ် တစ်ဗူးပါ ယူခဲ့..”“ခင်ဗျာ..”အမှာစကား
ဆုံးတော့ ၀ိတ်တာလေးက သူမကို ကြည့်သည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ်တစ်ခု၏ သီးသန့် စားသောက်ခန်းထဲတွင် မှာလိုက်သည့် စားစရာက ၀ိတ်တာအဘို့ ပြန်ကြည့်လောက်စရာ ဖြစ်သွားတာတော့ အမှန်ပင်။ သူမ မှာလိုက်သည့် တစ်ယောက်စာ လွယ်လင့်တကူ အစားအသောက်၏ လိုရင်းကို မိမိတို့နှစ်ဦးပဲ နားလည်သည် မဟုတ်ပါလား။ သူမက ဆတ်ကနဲ ခေါင်းလှည့်ပြီး ကောင်လေးကို ခပ်စူးစူး ပြန်ကြည့်၏။ စိတ်ရှိလာလျှင် ဘယ်သူ ဘာထင်ထင် ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်တတ်သော အကျင့်လေးကို သူ ပိုချစ်သွားမိ၏။ သည်လိုတွေးလိုက်တော့ သူ့စိတ်ထဲ နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သခင်မလေး၏ သိပ်လှသည့် ဒေါသ မျက်စောင်းကို မိမိ တစ်ဦးတည်းအတွက်ပဲ သုံးစေချင်သည်။ ကြောင်ကြည့်နေသည့် ၀ိတ်တာလေးထံသို့ သခင်မ၏ ညှို့ဓာတ်များ ရောက်သွားမှာ စိုးသည်။ “အဟမ်း ဟမ်း..” ပါးစပ်ကို လက်နှင့် အသာကွယ်ကာ ချောင်းတစ်ချက် ခပ်တိုးတိုး ဟန့်လိုက်၏။ ၀ိတ်တာကောင်လေး၏ အူကြောင်ကြောင် အကြည့်က သူ့ဘက်ရွေ့လာသည်။ သူ့စိတ်ထဲက စကားကို မျက်လုံးနှင့်ပဲ လှမ်းပြောလိုက်ရ၏။ ခင်ဗျာ မနေနဲ့ ငါ့ကောင်ရေ.. ဟုတ်ကဲ့လို့ မြန်မြန်ပြောပြီး ခိုင်းတဲ့တိုင်း သွားလုပ်ချေဟ.. တော်ကြာနေ မင်းပါ စက်ကွင်းမလွတ် ဖြစ်သွားဦးမယ်..။ “ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ..”ကောင်လေး
ပြန်ထွက်သွားတော့ လေပူတစ်ချက် အင့်ကနဲ မြိုချမိ၏။ သခင်မလေးကတော့ နောက်မှီ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ခြေထောက်လေးချိတ်၍ သက်တောင့်သက်သာ ထိုင်နေသည်။ မျက်နှာ ပြောင်တင်းတင်းလေး ကြည့်ရတာတော့ စောစောကလောက် ဒေါရောင် တောက်မနေ။ စကားပြောခွင့် အပြင် သူတည်ခင်းသော အစားအသောက်ကိုလည်း လက်ခံပြီဆိုတော့ အခြေနေ ကောင်းလာပြီ ဆိုသည့် သဘော။ သည်လို ယူဆလိုက်မိတော့ လူက စိတ် အတန်ငယ် ပေါ့သွားသည်။ အချိန်အတော်ကြာ တောင့်တင်းနေသည် အကြောများလည်း အနည်းငယ် သက်သာ
လျော့ပါးသွား၏။ သည်တော့မှ ရပ်နေရတာ ကြာသည့် ဒူးက ညောင်းချိချိ ဖြစ်လာသည်။ အစားအသောက် အသံ ကြားရပြီမို့ မိမိ ၀မ်းမှလည်း တကျုတ်ကျုတ် မြည်သယောင် ရှိလာ၏။ သို့သော် သူမ မှာသည့် စားစရာက တစ်ယောက်စာတည်း။လုပ်လိုက်
ဖွေးရေ.. ငါက အသုံးမကျတဲ့ အစေခံကောင်ဆိုတော့ သခင်နဲ့ တစ်ဝိုင်းတည်း တပြိုင်တည်း စားခွင့် မရှိဘူးပေါ့.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါ ကျေနပ်ပါတယ်.. ထွက်သွားလို့သာ မပြောရင် နင် ပေးသလောက်ထက် ပိုပြီး ငါ ဘာမှမတောင်းပါဘူး.. ငါ အခု နင့်ကို ပေးဆပ်ချင်နေတာတွေက အစွမ်းကုန် မိုင်ကုန် ဆိုပေမယ့်.. အချိန်ကာလအားဖြင့်က တစ်သက်တာ ထာဝရအတွက်ပါ ဖွေး.. ဘယ်တော့မှ လျော့သွားမှာမဟုတ်တဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းတွေနဲ့ နင့်နားမှာ ငါ နေချင်တာပါ.. ငါ့ကို
ဒီတစ်ခုတည်းပဲ ပေးပါ ဖွေးရယ်.. ငါ နေပါရစေ.. နင့်ရဲ့ ရာသက်ပန် ကျွန်တစ်ကောင် အဖြစ် နင့်နားမှာ ငါ တစ်သက်လုံး နေပါရစေ..
“ညက ဘယ်မှာ အိပ်လဲ..”“ဆရာ့ အိမ်မှာပဲ..”“ငါ အန်တီ့ဆီ သွားတာ သိပြီးပြီပေါ့ အာ့ဆို..”“အွန်း အန်တီ ပြောပြတယ်..”“………”“………”“………”“ငါ တောင်းပန်ပါတယ် ဖွေးရယ်..” “ငါ
မကျေနပ်ဘူး.. ကျေနပ်ရမယ့် ကိစ္စလို့လည်း မထင်ဘူး.. တမင်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..
သူ့အလိုလို ဖြစ်ကုန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ငါ မကျေနပ်ဘူး.. ဒါတွေအားလုံး နင် ငါ့ကို အရူးလုပ်တာ..”“အာ.. မဟုတ်ဘူးဖွေး.. လုံးဝ မဟုတ်ရပါဘူးဟာ.. နင် ကျေနပ်တဲ့ထိ ငါ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ.. ငါ့ကို နှင်မထုတ်ရင် ပြီးရောပါဟာ နော်..” အစားအသောက်များ
ရောက်လာ၍ ခဏ စကားစ ပြတ်သွားသည်။ တံခါး ခေါက်ပြီးမှ ၀င်လာခြင်း ဖြစ်သည့်တိုင် ပြာပြာသလဲ ရှင်းပြနေသည့် သူ့ပုံစံကို ၀ိတ်တာလေး သတိထားမိသွားပုံရသည်။ “လိုအပ်ရင် ဘဲလ် တီးလိုက်ပါအမ..” ခပ်ကုပ်ကုပ် ပြောပြီး ချက်ချင်း လှည့်ထွက်သွား၏။ မိမိနှင့် မတိမ်းမယိမ်း သူစိမ်းတစ်ယောက်ရှေ့တွင် သည်လို ပုံစံမျိုး သူ တစ်ခါမျှ မကြုံစဖူး။ နောက်ပြန်တွေ့မှာမှ မဟုတ်ဘဲလေ ဟု တွေးမိသော်လည်း စိတ်အိုက်မိသည်တော့ အမှန်ပင်။ ချပေးသွားသည့် ခေါက်ဆွဲကြော်ပန်းကန်က အငွေ့တထောင်းထောင်းနှင့်၊ စားချင်စရာ အနံ့က အစာအိမ်ထဲအထိ ရောက်လာသည်။ သခင်မလေးက ဇွန်းကို ဘေးတွင် ချပြီး ခက်ရင်းတစ်ခုတည်းနှင့် လှပစွာ စားသည်။ လက်သန်းလုံးလောက်နီးပါးရှိမည့် ခေါက်ဆွဲလုံးကြီးများကို ကြည့်ပြီး တံတွေး ခဏခဏ မြိုချမိသည်။ တောက်လောင်နေသော ၀မ်းမီးကို မည်သို့ ငြှိမ်းရမည် မသိသလို
မိမိကို စိတ်ဆိုး မပြေသေးသည့် သခင်မလေးအနား ခစားနေရသည်မှာလည်း စနက်တံ ဖြုတ်ထားသော ဗုံးတစ်လုံးကို ခါးပိုက်ထောင်ထဲ ထည့်ထားရသလို ဖြစ်နေသည်။“………”“………”“………”“အအေး ထည့်ပေး..” လတ်စသတ်လိုက်သည့်
အချိန်တွင် စားလက်စ ခေါက်ဆွဲက ပန်းကန်ထဲတွင် တစ်ဝက်လောက် ကျန်သေးသည်။ အမိန့်အတိုင်း အအေးဗူးကို ဖောက်ကာ ဖန်ခွက်ထဲ ငှဲ့ပေးလိုက်၏။ တစ်ငုံပဲ သောက်ပြီး ရေတစ်ခွက် ထပ်ငှဲ့ခိုင်းသည်။ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးကို တစ်ရှုးနှင့် သုတ်လိုက်ပြီ ဆိုတော့ သူမ စားသောက်မှု ပြီးဆုံးသွားသည့် သဘော။ ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန် အတွင်းမှ ခက်ရင်းကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ပန်းကန်ကို မိမိဘက် တွန်းရွှေ့ပေးသည်။ မေးတစ်ချက် ဆတ်ပြလိုက်ရင်း..“အင့်.. စား..”“ဟမ်..”“မြန်မာလို နားမလည်တာလား.. Eat it right now ! ..”“အွန်.. အင်း အင်းပါ.. ဟို.. ဇွန်းလေးတော့ပေးလေ ဖွေး..”“မပေးဘူး.. စား ဒီတိုင်း..”“အာ..”“……”မကျေနပ်ရင်
ထွက်သွား ဆိုသောစကားက သူမ နှုတ်ဖျားမှ မဆိုလိုက်ပါဘဲ မျက်လုံးမှတဆင့် မိမိ နားထဲ အလိုလိုရောက်လာ၏။ ဒီတိုင်း စား ဆိုတော့လည်း စားရုံပေါ့.. ခေါက်ဆွဲကြော်ပန်းကန်ကို တလှည့်၊ မိမိလက်ကို တလှည့်ကြည့်ရင်း လက်နဲ့ပဲ နှိုက်စားဘို့ ပြင်လိုက်သည်။ လက်မနှင့် လက်ညှိုးလေးကို တစ်ရှုးနှင့် အရင် သုတ်လိုက်ပြီးမှ ခေါက်ဆွဲတစ်မျှင်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်၏။ “အ..” ဖျဉ်းကနဲ နာကျင်မှု။ သခင်မလေးက မိမိ လက်ခုံကို ခက်ရင်း နှင့် ထိုးခြစ်ဆွဲချလိုက်ခြင်း
ဖြစ်သည်။ လက်ကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ လက်ခုံပေါ်တွင် အစင်းရာကြီးများက အကြောင်းလိုက် ထင် တက်လာ၏။ “ပြီးမလား သည်နေ့ အဘို့.. အဲ့လို တစ်မျှင်ချင်း စားနေရင်..”“…….”“လက်နောက်ပစ်ထား.. ပါးစပ်နဲ့ ကုန်းစား..”“အာာာ..”“ဘာ အာ လဲ.. နင့်ပုံစံ အဲ့လို လက်နောက်ပစ်ထားတာ ငါ့မျက်စိထဲ တော်တော် ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်..”“ငါ မြန်မြန် စားပါ့မယ်.. လက်နဲ့ပဲ..”“မလိုချင်ဘူးဟာ.. ငါ ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ရင်လုပ်.. မလုပ်ရင်.. နေခဲ့တော့..”“အာ.. အာ့ဆို ငါလည်း လိုက်မယ်လေ ဖွေး.. မစားတော့ဘူး.. ငါ မဆာပါဘူး..”“ဘယ်ကို လိုက်မှာတုန်း..”“နင် သွားတဲ့နောက်လေ..”“ငါက အိမ်ပြန်မှာ..”“အာ့ဆိုလည်း အိမ်ပေါ့..”“ဟဟ.. ဘာ လိုက်လုပ်မှာတုန်း..”“……….”“……….”“နင် နင် လုပ်ခိုင်းတာ အကုန် လုပ်မယ်လေ..”“အင်းလေ.. ငါ အခု ခိုင်းနေတာ နင် မလုပ်ဘူးလေ.. ကဲ..”“ဟူးးးးး…”“ဖယ်.. ငါ့ရှေ့က..”“နေဦး ဖွေး.. လုပ်မယ်.. နင် စားခိုင်းတဲ့တိုင်း စားမယ်ဟာ.. နော်..”လက်ကို
နောက်ပစ်လျက်နှင့် စားပွဲပေါ်ရှိ ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန်ကို ငုံ့စားလိုက်သည်။ စိတ်ပျက်ဘို့ ကောင်းလှသည့် မိမိပုံစံကို အော်သာ ငိုလိုက်ချင်မိတော့၏။ သည်မိန်းကလေးအနား နေခွင့်ရဘို့ သည်လောက် အရှက်နည်းဘို့ လိုနေသလား။ မိမိကိုယ်ကိုလည်း အံ့သြမိတော့သည်။ ခုနေများ အဖေနှင့် အမေသာ မိမိ လုပ်နေပုံကို မြင်ပါလျှင်။ သည်ကြားထဲ သူမက ထိုင်ခုံမှ အသာ ထ ကာ နံရံရှိ ဘဲလ် ခလုတ်လေးဆီ လျှောက်သွားရင်း.. “မြန်မြန်စား.. ငါ စိတ်မရှည်ရင် နှိပ်လိုက်မှာ..”။ ခလုတ်ကို လက်နှင့် ရွယ်ရင်း ပြောလိုက်တော့ သူ အလွန် လန့်သွားမိသည်။ သည်လို မဟုတ်တရုတ် အနေအထားကြီး အထိတော့ လူသိမခံချင်။ သူမ စားပြီးသား အကျန် ခေါက်ဆွဲ ပွဲတစ်ဝက်စာကလည်း များလွန်းနေသလိုပင်။ မြန်မြန် ကုန်သွားပြီးရော သဘောဖြင့် ကုန်းရုန်း စားပစ်လိုက်သည်။ မိမိအဖြစ်က စားခွက်ထဲမှ အစာကို အလုအယက် စားနေသည့် ငတ်ပြတ်နေသော လမ်းဘေး ခွေးတစ်ကောင်နှင့် တူနေ၏။ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသော်လည်း လူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက် ရုတ်တရက် ၀င်လာမှာ စိုးထိတ်သည့် အတွေးက မိမိစိတ်ကို စမာန်ဝင်နေသည့် ခွေးတစ်ကောင်နှင့် တူသထက်တူအောင် ပံ့ပိုးနေသည်။ သည်လို ခံစားလိုက်ရတော့ မိမိကို လည်ပတ်ကြိုးတပ်၍ ခွေးလေးတစ်ကောင်လို ဆက်ဆံခံရသည့် အချိန်ကလေးကို အမှတ်ရမိသည်။ အောင့်သက်သက်လိုလို သာယာသလိုလို ထူးဆန်းသည့်ခံစားချက်က ရင်ထဲ ရောက်လာတော့၏။ခေါက်ဆွဲတစ်ပန်းကန်လုံး ကုန်သွားမှပင် ကိုယ်ကို မတ်မတ် ပြန်ရပ်မိသည်။ တစ်ရှုးတစ်ရွက် ဖြတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်ယူပြီး ပါးစပ်ကို ခပ်သွက်သွက် သုတ်လိုက်၏။ သူမ မအော်မီ အမြန် လုပ်လိုက်ခြင်းမို့ ဆီပေနေသည့် ပါးစပ်များနှင့် မျက်နှာက စေးကပ်ကပ် ဖြစ်နေဆဲ။ ပြီးတော့ လူက ရေငတ်လာသည်။ ကိုယ့်ဘာသာ ယူသောက်လိုက်ရမလား၊ ခွင့်တောင်းရမှာလား တွေးနေတုန်း သခင်မလေးက ရေသန့်ဗူးကို ယူကာ ဖန်ခွက်ထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း လောင်းထည့်၏။ လက်ထဲတွင် ရေဖန်ခွက်လေး ကိုင်ထားပြီး သူ့ကို တစ်ချက် ကြည့်သည်။ ညှို့အားပြင်းသော မျက်ဝန်းစူးစူးများ။ သူ တံတွေးတစ်ချက် မြိုချမိ၏။ သည် မျက်ဝန်းများက သူ့ကို
အသည်းခိုက်စေသည်။ ကြက်သီး ထစေသည်။ စေညွန်သမျှ နာခံသွားအောင် စွမ်းနိုင်သည်။ သည်မျက်ဝန်း အကြည့်များကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရတိုင်း သူ့စိတ်တို့က ဆေးမိနေသူ တစ်ဦးလို ရီဝေငေးငိုင် သွားရသည်သာ။ဖြူဖွေး
သွယ်လျသော လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ရေခဲတုံးလေးများ ထည့်ထားသည့် ဖန်ပန်းကန်လေးကို လှမ်းယူသည်။ အသင့်ချထားသည့် ညှပ်ကလေးနှင့် ခပ်သေးသေး ရေခဲတုံးတစ်ခုကို ညှပ်ယူလိုက်၏။ ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး ခွပ်ကနဲ ကိုက်ချလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ရေဖန်ခွက်လေးကို သူမ နှုတ်ခမ်းများဆီ တေ့လိုက်သည့်ခဏ။ သူ့ ခေါင်းထဲ မိုက်ကနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ နားထင်ကြောများ တင်း တက်လာသလို အသွေးအသား ထဲမှလည်း စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်လာ၏။ သခင်မလေးက သူ့မျက်လုံးများကို စိုက်ကြည့်နေရင်းမှပင် ဖန်ပန်းကန်အတွင်းမှ ရေခဲတုံးလေးများကို ယူပြီး ၀ါးလိုက်၊ ရေထည့်ထားသည့် ဖန်ခွက်ထဲ ထွေးချလိုက် လုပ်နေ၏။ သူမ နှုတ်ခမ်းများမှ ထပ် ထွက်လာမည့် အမိန့်က ဘာ ဖြစ်တော့မည် ဆိုတာ သူ သိလိုက်ရပြီ။ နှလုံးသားတို့ ဆူဝေ လှိုက်မောလာရသလို ထူးဆန်းသော ရမ္မက်စိတ်များ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရုန်းထလာတော့၏။ ဖန်ခွက် အတွင်းရှိ သောက်ရည်ထဲတွင် စိမ်ပြေနပြေ ၀ါးပြီး ထွေးထည့်ထားသည့် ရေခဲတုံးလေးများက ပူစီပေါင်း သေးသေးလေးများလို အသည်းယားစရာ။ “နင် ရေသောက်ချင်နေတယ် မဟုတ်လား..”
မိမိကမ်းပေးလိုက်သည့် ဖန်ခွက်ထဲမှ ရေကို တကျိုက်ခြင်း သောက်နေသည့် ကောင်ကလေး။ ဖန်ခွက် ကိုင်ထားသည့် လက်များကတော့ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။ ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့် လှုပ်ရှားနေသည့် သူ့လည်တိုင်ကို ငေးကြည့်နေမိ၏။ မိမိ ထွေးထုတ်ထားသည့် ရေခဲတုံးများ ပါသည့်ရေကို အားပါးတရ သောက်နေသည့် သူ့ပုံစံက သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်သယောင် ထင်ရသော်လည်း နထင်စပ်ရှိ အကြောစိမ်းများက ဖောင်းထ နေသည်။ သူ့မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေရင်း မိမိ လက်မောင်းထက်မှ မွေးညင်းနုလေးများ လှုပ်ခတ်သွားသယောင် ရှိန်းမြမြ ခံစားလိုက်ရ၏။ ခြေချိတ်ထိုင်လျက်မို့ ပေါင်နှစ်ဘက်ကြားတွင် ပိပြားလိမ်ကျစ်နေသည့် နေရာလေးမှလည်း အနည်းငယ် နွေးသယောင် ရှိလာ၏။ ချစ်ဝတ်ရည်တို့ သိုမှီးရာ နေရာလေး တဖြည်းဖြည်း ငွေ့ရည် ဖွဲ့စ ပြုလာသည်။ ပူနွေး ရှိန်းမြနေသည့် မိမိနှုတ်ခမ်းတို့ကို လက်ကလေးနှင့် အသာ ကွယ်ထားမိ၏။ မဟုတ်လျှင် မိမိ နှုတ်ခမ်းများ တုန်ရီ လှိုက်လှဲနေပြီမှန်း သူ သတိထားမိသွားနိုင်သည်။ဖန်ခွက်ထဲမှ
ရေထဲတွင် သူမ နှုတ်ခမ်းများ မျောပါနေသယောင် ခံစားမိသည်။ မိမိခံတွင်းထဲ ၀င်လာသည့် ရေခဲတုံးလေးများက သူမ ထွေးထုတ်လိုက်သော စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ။ ဒါကို မိမိက စိုးစဉ်းမျှ မသတီစိတ် မ၀င်မိသည့်အပြင် အငမ်းမရ သိမ်းဆည်း သောက်မြို နေမိသည်။ သို့သော် သည် ရေတစ်ငုံ ဗိုက်ထဲ ရောက်သွားဘို့ အတော်လေး ကြိုးစားယူရသလို ဖြစ်နေ၏။ မိမိ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ထူအန်းအန်း ဖြစ်လာသည်။ ကိုယ်ထဲတွင် စီးဆင်းနေသော သွေးကြောများ ပူနွေး လောင်မြိုက်လာ၏။ လည်ချောင်းတလျှောက် စီးကျသွားသည့်ရေက ငယ်ပါအထိ စိမ့်ဆင်းသွားသလို မဆီမဆိုင်
ခံစားမိလိုက်သည်။ ကျင်တက်လာသော အကြောများက ညီတော်မောင်ကို မထိတထိ လှုပ်နှိုးလို့နေတော့၏။ သည်လိုတော့ဖြင့် မဖြစ်ချေသေး။ တစ်မှု မဆုံးခင် နောက်တစ်မှု တိုးသွားပါလျှင် သည်တစ်သက် ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်မည် မထင်။ ရာဂစိတ်ကို ထိပ်တက်မလာအောင် ထိန်းရင်းနှင့်ပင် ရေတစ်ခွက်လုံး ကုန်အောင် သောက်မှန်းမသိ သောက်မိသွားသည်။ ဖန်ခွက်ကို စားပွဲပေါ် ပြန်ချလိုက်ပြီး သူမ မျက်နှာကို ခပ်ငေးငေး ကြည့်မိပြန်၏။ လက်ညှိုးကလေး ကွေးညွှတ်ပြီး ကွယ်ဝှက်ထားသော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံတွင် ကျေနပ်အားရသည့် ခပ်မဲ့မဲ့ အပြုံးကို သူ မြင်လိုက်ရ၏။ မျက်ဝန်းများကတော့ နေတစ်စင်းလို စွမ်းအား ပြင်းလွန်းနေဆဲ။“ငါ ပြန်တော့မယ်..”“ဖွေး.. ငါ့မှာ ပြောစရာတွေ ကျန်နေသေး..”“ဟေ့အေး.. ငါ နားထောင်ရတာ ပျင်း လာပြီ..”“…………”“………...”“ငါ လိုက်ခဲ့ရမလား..”“ဘာ လုပ်ဘို့တုန်း..”“နင့်မှာ မေးစရာ ရှိဦးမလားလို့ပါဖွေး.. နင်မေးချင်တဲ့အချိန် ကောက်မေးလို့ ရအောင်လေ နော်..”“ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. ငါ့စိတ်ငါ အာမ မခံဘူးနော်.. နင့်ကို ငါ ရိုက်မသတ်မိဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး..”“ဖွေးရယ်.. နင် ကြိုက်တာ လုပ်ပါဟာ.. ပြီးရင်တော့ ငါ တောင်းဆိုတာလေးတွေ စဉ်းစားပေးပါ.. နော်..”“ဘာကို စဉ်းစားရမှာလဲ..”“လူကြီးတွေနဲ့ ပြောထားတဲ့ ကိစ္စလေ.. ငါ .. ငါ နင့်ကို လက်ထပ်ခွင့်..”“ဒီမှာ..
ငါ ပြောတာ သေချာနားထောင်.. အစက ဟုတ်တယ်.. ငါ့ မိသားစု အခြေအနေတွက် အားကိုးအားထား ပြုလို့ရမယ့် အိမ်ထောင်ဘက်ကို လက်ခံဘို့ ငါ တကယ် စဉ်းစားခဲ့တယ်.. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘယ်ကမှန်း မသိ.. ဘာမှန်း မသိတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို အဆုံးအစွန်ထိ ငါ ပတ်သက်ခဲ့တယ်.. ငါ မှားခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီအမှားမှာ ပရိယာယ် မပါဘူး နင် သိလား.. နင် နားလည်လား..”“နားလည်ပါတယ်ဖွေးရယ်.. ငါလည်း တမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့..”“တော်စမ်းပါဟာ..
ခုချိန်မှာ ငါနင့်ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ရမှန်း မသိဘူး.. ယုံကြည်မှုလည်း ထားကြည့်လို့ မရဘူး.. ရှင်းရှင်း ပြောရရင်လေ.. နင့်ကို ဟိုတုန်းက ငါ သိခဲ့တဲ့ စူးရှ ဆိုတဲ့ အခြေအနေ လောက်တောင် ယုံကြည်စိတ် မရှိတော့တာအမှန်ပဲ..”“အာာာ…”“ငါ့ရှေ့က ဖယ်..”“ဖွေး..”“ဘာလဲ..”“နင် ကျေနပ်အောင် ငါ ဘာ လုပ်ပေးရင် ရမလဲ..”“…………….”“ဟိုတုန်းက အခြေအနေကိုပဲ နင် ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် အဲ့အခြေနေနဲ့ပဲ တစ်သက်လုံး နေဆို ငါနေပါ့မယ် ဖွေးရယ်..”“…………….”“နင့်စိတ်ထဲမှာ
ငါ့ကို စိုးဝဏ္ဏ အဖြစ်နဲ့ လက်ခံလို့ မရရင် ဟိုတုန်းက နင်သိထားတဲ့ စူးရှ အနေနဲ့ပဲ ငါ နေပါ့မယ်.. ငါ့ကို နေခွင့်ပေးပါဟာ နော်.. ငါ နင့်နားမှာ တစ်သက်လုံး နေခွင့် ရချင်လို့ပါ..”“အဲ့လို ပြန်သတ်မှတ်လိုက်ရင် နင့်မှာ ပို အပြစ်ကြီးသွားပြီမှန်း နင် မသိဘူးလား..”“အွန်..”“ငါ့
အမိန့်မရဘဲ နင် ထွက်သွားတယ်လေ.. ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါပေးထားတဲ့ စည်းကမ်းကို နင် ဖောက်တာက ဖောက်တာပဲ.. ပြီးတော့ ပြန်လာတဲ့ ပုံစံက ငါ့ကို ဖြတ်ရိုက်လိုက်သလိုပဲ.. ရင်နာတယ်..”“ဟူးးး… အဲ့လိုတော့ မပြောပါနဲ့ဖွေးရယ်.. ဒီလို လုပ်ရင်ရော.. ငါ ပြန်လာတဲ့ ပုံစံကို နင်မကြိုက်ရင် နင်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံဖြစ်အောင် ငါ လုပ်ပေးမယ်လေ.. တကယ်လို့များ
ငါသာ စိုးဝဏ္ဏ မဟုတ်ခဲ့ရင် အပြစ်သား တစ်ယောက်အနေနဲ့ မပြောမဆို ထွက်သွားမိတဲ့ငါ့မှာ အယူခံဝင်ခွင့် မရှိရဘူး.. အကြောင်းပြလို့ မရဘူးမဟုတ်လားဖွေး.. နင်ပေးတဲ့ အပြစ်ကိုပဲ ငါ ခံယူရမှာ မဟုတ်လား..”“………..”“နောက်ပြီး.. ငါ.. ငါ မနေ့က နင့်အပေါ် အခွင့်ရေးယူသလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ငါ့ အပြစ်က ပိုကြီးသွားတယ် မဟုတ်လားဖွေး..”“………….”“အဲ့တွက် နင် ငါ့ကို ကျေနပ်တဲ့အထိ အပြစ်ပေးလေ နော်..”“ဒါ နင့် ရွေးချယ်မှုလား.. နင့်အတွက် ငါ့မှာ ပေးစရာ second choice မရှိဘူးနော် စူးရှ..”“ရတယ် ဖွေး.. နင် ပြန်လက်ခံပေးမယ်ဆိုရင် ငါ့ကို လူတစ်ယောက်လို့ သဘောမထားရင်တောင် ငါ ကျေနပ်တယ်..”“ကောင်းပြီလေ.. ဒါဆို နင့်ကိုငါ ငါ သိထားတဲ့ စူးရှ အနေနဲ့ပဲ တွေးမယ်..”“ဟားးး… ကျေးဇူးပါ ဖွေးရယ်..”“စွတ် အူမြူးမနေနဲ့.. ငါ သိထားတဲ့ စူးရှက ဒီလို ပုံစံ မဟုတ်ဘူး..”“အွန်..”“အေး.. အဲ့ဒီ အွန်ကတော့ တူတယ်.. ဒါပေမယ့် ခုလောက်ကြီး သန့်ပြန့် သားနားနေတဲ့ရုပ်က စူးရှ အစစ် မဟုတ်ဘူး..”“အာ.. ဒါက..”“မကွန်ပလိန်းနဲ့ စူးရှ.. ငါ့ အမိန့် နာခံဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ကွန်ပလိန်း လာမလုပ်နဲ့.. ငါ ခိုင်းတာပဲလုပ်..”“အေးပါဟာ.. နင် မကြိုက်ရင် ငါ နောက် ဒီပုံစံ မ၀တ်တော့ပါဘူး..”“နောက်မဟုတ်ဘူး.. ခုကိုပဲ ဒီပုံစံ မမြင်ချင်တာ..”“ဒါကျတော့..”“ဘဲလ် နှိပ်လိုက်..”“အွန်..”“လာပြန်ပြီ
ဒီ အွန်.. နင်ဟာလေ.. နဲနဲလေးမှာေ_ာက်မှတ် မရှိတဲ့ကောင်.. နောက်တစ်ခါ အွန်
ဆိုတဲ့အသံ နင့်ပါးစပ်က ထွက်လာကြည့်.. ငါစီးထားတဲ့ဖိနပ်နဲ့ ပါးပိတ်ရိုက်ပစ်မယ်..”ဘဲလ် နှိပ်ပြီး စက္ကန့် အနည်းငယ်အတွင် ၀ိတ်တာလေး ရောက်လာသည်။ ထင်မှတ်မထားသော သူမ စိတ်ကူးကြောင့် ၀ိတ်တာ ကောင်လေးရော သူပါ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားသည်။ “ကျမ အကူညီတစ်ခု တောင်းချင်လို့..”“ခင်ဗျာ.. ကျနော့်ကိုလား..”“ဟုတ်တယ်..”“ပြောပါ အမ.. ကျနော် ဘာများ ကူညီရမလဲ..”“သူ့အတွက် အ၀တ်အစား တစ်စုံ လိုချင်လို့ပါ..”“ဗျာ.. ကျနော် သွားဝယ်ပေးရမှာလား အမ.. ဟို.. ကျနော့်မှာက တာဝန်ချိန် ဖြစ်နေတော့..”“သွားဝယ်ပေးဘို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး.. အခု ရှင် ၀တ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံက ဒီဟိုတယ်ရဲ့ ယူနီဖောင်း မဟုတ်လား..”“ဗျာ..”“ရှင် ဂျူတီပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရင် ဒီဝတ်စုံအတိုင်း ပြန်တာလား..”“မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ..”“ဒါဆို ရှင့်မှာ လဲဝတ်စရာ ပါလာတဲ့သဘောပေါ့..”“ဟုတ်ကဲ့..”“အဲ့ ၀တ်စုံ ကျမကို ရောင်းနိုင်မလား..”“ခင်ဗျာ..”“ရှင် အိမ်အပြန် ၀တ်သွားမယ့် ၀တ်စုံလေ.. ကျမကိုရောင်းပေးဘို့ ပြောနေတာ.. သဘောပေါက်လား မသိဘူး..”“ဟုတ်..
ဟုတ်ကဲ့.. ပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျ.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဝတ်စုံက ကျနော် မနက်က အလာမှာ ၀တ်လာတာ.. ပြီးတော့ ဒီ နောင်ကြီးနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ၀တ်စုံမျိုးလည်း မဟုတ်လို့ပါ..”“ကိစ္စ မရှိပါဘူး.. ရတယ်.. ရှင့်အတွက် ပြဿနာ မရှိဘူးမဟုတ်လား..”“ပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး.. ကျနော်က ဒီယူနီဖောင်းနဲ့ ပြန်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး..”“ဒီယူနီဖောင်းနဲ့ ပြန်ဘို့ မလိုပါဘူး.. အခု သူဝတ်ထားတာတွေ ရှင့်ကို ပေးခဲ့ဦးမှာပါ.. ရှင့် ၀တ်စုံဘိုး အပြင်ပေါ့..”“ဗျာ..”“ဟင်းဟင်း.. မအံ့သြပါနဲ့.. ကျမတို့ ဂိမ်းကစားနေကြတာ.. ရှင့် အကူညီ တကယ်လိုလို့ပါ.. ကူညီမယ် မဟုတ်လား..”“ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့.. ခဏစောင့်ပါအမ.. ကျနော် သွားယူလာပေးပါ့မယ်..”“အိုကေ.. ကျေးဇူး..”၀ိတ်တာလေး
ထွက်သွားတော့ သူ့မျက်နှာကို လှည့်ကြည့်သည်။ ကျေနပ်ရဲ့လား ဟူသည့် မေးခွန်းကို မျက်ဝန်းမှ တဆင့်ကြားလိုက်ရ၏။ ပင့်သက် ပြင်းပြင်း တစ်ချက်ကို မရမက မြိုချပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက် ချထားလိုက်တော့သည်။ ဟိုဝိတ်တာကောင်လေးအတွက်တော့ ထူးဆန်းသည့် ဂိမ်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ခုလောလောဆယ်တွင် သူ့ဝတ်စုံဟောင်းကို သွားယူလာရင်း မိမိ အဖြစ်ကို ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ များမကြာမီအချိန်တွင် သည်ဖြစ်ရပ်ကို အထူးအဆန်း ဟာသ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုအနေနှင့် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြိန်ရည်ရှက်ရည် ပြောပေတော့မည်။ နှင်းဖွေးဖွေး ဆိုသော သူမအနားတွင် ထာဝရ ခစားခွင့် ရရေးအတွက် သူ့ဘက်က ပေးရသည့် အရင်းအနှီးများက ငွေကြေးမဟုတ်ဘဲ သည်လိုပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အရာများ ဆိုတာကို သူ့မိဘ အသိုင်းဝိုင်းက သိခဲ့ပါလျှင်။ မျက်စိ စုံမှိတ်ပြီး ခေါင်းကို မသိမသာ ရမ်းလိုက်သည်။ သူ ဘာမှ
ဆက် မတွေးလိုတော့။ နောက်ဆုတ်ရန်လည်း စိတ်မကူးမိ။ သူမ ပြောသော စကားတွင် ပါသွားသည်ပဲ။ ကျမတို့ ဂိမ်းကစားနေကြတာ.. ဟူ၍။ ကစားပါ ဖွေး.. နင် ပျော်မယ်ဆို ငါ့ သိက္ခာတွေ မီးခိုးငွေ့ ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ကစားပါ.. ငါ မျှော်လင့်မိတယ်.. သည် ဂိမ်း ဘယ်တော့မှ ပြီးမသွားဘို့.. ငါ ဘ၀ အသက်ထက်ဆုံး နင့်ကို အနိုင်ပေးပြီး ကစားခွင့် ရဘို့.. ငါ့ တစ်သက်လုံး နင့် ကစားစရာ အရုပ် ဖြစ်ရဘို့.
“ဒီမှာပါ အမ.. ကျနော့်ကို ခွင့်ပြုပါဦး..”“နေဦးလေ.. ရှင့် ၀တ်စုံအတွက် ကျမ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ..”“အာ.. နေပါစေ.. ကျနော့် ၀တ်စုံက အဘိုးမတန်ပါဘူး.. မပေးပါနဲ့..”“ဒီလိုတော့ မဟုတ်ဘူးလေ.. ခဏ..”ပြောရင်း
သူမ လက်ကိုင်အိတ်လေးကို ဖွင့်သည်။ တစ်သောင်းတန် နှစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်၏။ ၀ိတ်တာ ကောင်လေး မျက်စိ မျက်နှာ ပျက်နေသည်။ တကယ်လည်း သူယူလာသည့် ၀တ်စုံက တီရှပ် ခပ်နွမ်းနွမ်း တစ်ထည်နှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီ တစ်ပတ်နွမ်း။ ဖွေး ပေးသော ငွေနှစ်သောင်းကို မယူပါရစေရန် အကြောက်အကန် ငြင်းနေ၏။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ထူးဆန်းသော ကစားနည်းကိုတော့ စိတ်ဝင်စားပုံ ရသည်။ သူ့ကို တစ်ချက်တစ်ချက် ကြည့်လိုက်သော အကြည့်များတွင် အားနာဟန် အပြင် စူးစမ်းသော အတွေး များစွာ ပျော်ဝင်နေသည်။ မေးခွင့်များ ရှိပါလျှင် စပ်စပ်စုစု မေးမည့်ပုံ။ နောက်ဆုံးတော့ ငွေတစ်သောင်း လက်ခံယူပြီး ဇွတ်အတင်း ၀ယ်သူနှင့် အားတုံ့အားနာ
ရောင်းသူတို့ ဈေးတည့် သွားကြသည်။ တစ်သောင်းတန် ပိုက်ဆံလေးကို အကျီ အိတ်ကပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး လှည့်ထွက် သွားသော ကောင်လေးကို လှမ်းခေါ်ကာ သူ ၀တ်ထားသော ၀တ်စုံကို စောင့်ယူရန် ပြောတော့၏။ သူမ ဖန်တီးလိုက်သည့် အခြေအနေက မိမိ ၀တ်ထားသော အ၀တ်အစားများကို ကောင်လေးအား ချက်ချင်း ချွတ်ပေး ဆိုသည့် သဘော..။“ကျနော် အပြင်က စောင့်ပေးပါ့မယ် အကို.. လဲ ၀တ်လိုက်ပါ..”“အာ..
မဟုတ်တာ ဒီထဲမှာပဲ စောင့်.. ကျမပေးသလောက် ပိုက်ဆံလည်း ရှင်က ယူတာ မဟုတ်ဘူး.. သူ့အ၀တ်စားတွေ ရှင့်လက်ထဲ ပေးခဲ့ရမှ ကျမ စိတ်အေးမယ်.. စောင့်ယူသွား..”“ပိုက်ဆံက အခု တစ်သောင်းတောင် များလွန်းနေပြီဗျ.. ကျနော့်ဟာတွေက ၀ယ်တုန်းကတောင် အကျီရော ဘောင်းဘီပါ ပေါင်းလို့မှ ဘယ်လိုမှ တစ်သောင်းမရှိဘူး.. ပြီတော့ ကျနော် ၀တ်ထားတဲ့ အဟောင်းတွေ.. ခုလည်း ကျနော့်ရှေ့ လဲ ၀တ် ဆိုတော့ အကို နေရခက်ပါ့မယ် အမရယ်..”“ခက်စရာ ဘာရှိလဲ.. ယောင်္ကျားချင်းပဲ.. သူ အဲ့လောက် မရှက်တတ်ပါဘူး..”“အမကလည်း ဗျာ..”“ကဲကဲ.. စူးရှ..”ဘာစကားမှ
ပြောမနေတော့ဘဲ အကျီကျယ်သီးများကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ခပ် သွက်သွက် ဖြုတ်ချ လိုက်တော့၏။ အမှန်ပြောရလျှင် လူက ငိုချင်နေပြီ။ လူမှန်း သိတတ်စ အရွယ်ကတည်းက ခုလောက် ရှက်ရတာမျိုး မကြုံခဲ့ဖူးချေ။ ၀ိတ်တာကောင်လေးလည်း ဖင်ကုတ် ခေါင်းကုတ်နှင့် ဒုက္ခ များနေ၏။ သခင်မ ဖွေး ကတော့ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ခြေထောက်လေး ချိတ်လျှက် လှပ ကျော့မော့စွာ ထိုင်နေသည်။ သည်လိုနဲ့ပဲ သူ ၀တ်ထားသည့် Guy Laroche ရှပ်အကျီ နေရာတွင် အမျိုးအမည် မသိသည့် တီရှပ် နွမ်းနွမ်းလေးက နေရာ ယူသွားတော့၏။ ဘောင်းဘီ လဲဝတ်ခါနီးတော့ ပို၍ စိတ်အိုက်မိသည်။ မျက်မှန်းအရ ကြည့်လျှင်ပင် သည်ကောင်လေးနှင့် သူ၊ ခါးဆိုဒ်က
သိသိသာသာ ကွာနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ခပ်တုံးတုံး မဟုတ်သော သူမ လည်း ရိပ်မိလောက်သည်။ သာမန် အရပ်အမောင်းပင် မရှိသည့် ခပ်ညှက်ညှက် ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်၏ ဘောင်းဘီကို အရပ် ၅ပေ ၉လက်မ ကျော်ချင်ချင် ဖြစ်သည့် မိမိက မည်သို့ မည်ပုံ စွပ်ရပါ့မည်နည်း။ ခုကိုပဲ သူ ယူလာသည့် တီရှပ်က မိမိအတွက် ကိုယ်ကျပ် အကျီ ဖြစ်လို့နေပြီ။ သည်ကြားထဲ သူ့ ၀တ်စုံက မနက်က ၀တ်လာသည့် ၀တ်လက်စကြီး။ သူ့ဘ၀တွင် ခုလို တပါးသူ၏ ကိုယ်နံ့ စွဲနေသည့် အ၀တ်အစားမျိုး ၀တ်ရလိမ့်မည်ဟု ယောင်လို့ပင် မတွေးဖူးခဲ့။၀ိတ်တာကောင်လေးနှင့် မိမိရှေ့တွင် ခပ်ကုပ်ကုပ် အ၀တ်လဲနေသည့် သူ့ကို ကြည့်ပြီး ဖွေး အူလှိုက် အသည်းလှိုက် ပျော်မိသည်။ ကောင်လေး ယူလာသည့် အကျီက သူ့ကိုယ်တွင် ကွက်တိ ဖြစ်နေ၏။ ရင်အုပ်နှင့် လက်မောင်းကြွက်သားများကို အထူး လှစ်ဟပြနေသည့် မော်ဒယ်ဘွိုင်း တစ်ယောက်ပမာ ကြည့်၍ပင် ကောင်းသေးတော့သည်။ ငါ့ ကျွန်ကလေးက ခန့်လိုက်တာဟယ်။ ငါ့ စကားလည်း နားထောင်၊ ငါ့ အလိုက်လည်း သိ၊ လိမ္မာလိုက်တဲ့ ချစ်စရာ ကျွန်ကလေး.. အဲ ငါ့ ယောင်္ကျား လောင်းလေး.. ခိခိ။ ဟိုတယ် ၀န်ထမ်း သူစိမ်းယောင်္ကျားတစ်ယောက် ရှေ့မှာ ခုလို ချောချောဖြောင့်ဖြောင့် ဗလတောင့်တောင့် သူဌေးပေါက်စလေးကို အနိုင်ကျင့်ပြရတာ ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ ပျော်စရာပါလား။ မိမိရှေ့တွင် အနေခက်နေကြရှာသည့် ယောင်္ကျားနှစ်ယောက်ကို တလှည့်စီ မသိမသာ ကြည့်ရင်း နှလုံးပီတိ ဂွမ်းဆီထိ ရသလို ဟို နေရာမှလည်း ချောဆီလေးများက မသိမသာ တစိမ့်စိမ့်..။တီရှပ် ကျပ်ကျပ်က ပြဿနာ သိပ် မရှိလှသော်လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီ ခါးကျပ်ကျပ်နှင့် ဂွကလည်း ဖင်ကြားထဲ ညပ်ဝင်လောက်အောင် တိုနေသေးသည်။ သည်ကြားထဲ ပေမမှီ ဒေါက်မမှီ ဘောင်းဘီ အရှည်က
ခြေမျက်စိကြီး အလုံးလိုက် ပေါ်နေ၏။ မိမိ စီးထားသည့် Half shoes နှင့် ခြေစွပ် ကလည်း အတိုမို့ ကြည့်ရဆိုးလှသည်။ လက်လေးလုံးလောက် ပေါ်နေသည့် ခြေကျင်းဝတ်ကို ငုံ့ကြည့်ရင်း မိမိ၏ မထော်မနန်း ပုံစံနှင့် ဟိုတယ် အတွင်းမှ
မည်သို့ ထွက်လျှင် အဆင်ပြေမလဲ။ ချစ်လှစွာသော သခင်မလေးက မိမိကို လူကြားသူကြားထဲ လေးဘက်တော့ သွားမခိုင်းလောက်ပါဘူး ဟု တွေးကာ ကြက်သီး အလိပ်လိုက် ထ လာရသည်။၀ိတ်တာ ချာတိတ်ကတော့ ထွက်သွားခါနီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို၊ သွားမယ်နော် အမ ဟူ၍ ကသုတ်ကယက် ပြောကာ သူ ချွတ်ပေးလိုက်သော အ၀တ်များယူပြီး လစ်လေတော့သည်။ သေချာတာတော့ သည်ကောင် ဘယ်လိုမှ သည်ဘောင်းဘီနှင့် တော်မည်မဟုတ်။ ဒိုင်နိုဆော အရည်ခွံကို အိမ်မြှောင် ကောက်စွပ်သလို ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်မိသေးသည်။ ကိုယ့် အတွေးကိုယ်
ပြန်သုံးသပ်မှပင် မိမိ အဖြစ်က သူတပါးကို လှောင်ပြောင်ရန် အခွင့် ရှိပါရဲ့လားဟု တွေးကာ ပြုံးမိရသေး၏။ ဟို ချာတိတ်က ခုလောက်ဖြင့် သူ့ အကြောင်း တွေးကာ ကျိတ်ရယ် နေလောက်ပြီ။ သူ့ရှေ့တွင် မတော်တရော် ဘောင်းဘီကို ဇွတ်အတင်း ထိုးသွင်းခဲ့ရသည်က မိမိ မဟုတ်ပါလား။ သခင်မလေး၏ နှုတ်ခမ်းများ ပျော်ဝင်နေသည့် ရေချိုချိုများ သောက်သုံးပြီး ထွားကျိုင်းသန်မာနေသည့် ညီတော်မောင်ကြောင့် ဘောင်းဘီအဟောင်း ဇစ်ပြဲ မထွက်အောင် မနည်း ဆွဲစိ ခဲ့ရသည်။ သည်ကြားထဲ ကျေးဇူးရှင် မနက်က သည်ဘောင်းဘီကို ၀တ်လာတာ အတွင်းခံမှ ပါလေစ။ အချို့ ယောင်္ကျားလေးများ အတွင်းခံ ၀တ်လေ့ မရှိတာ သူ သိထား၏။ သည်သို့ ဆိုလျှင်တော့ အတွင်းခံ ခြားထားသည့်တိုင် မိမိဖင်ကြားထဲ ညပ်ဝင်နေသည့် ဘောင်းဘီဂွကြားတွင်..။ ဆက်တွေးရမှာ ယားကျိကျိ ဖြစ်လာ၍ အာရုံ ပြောင်းလိုက်ရသည်။သည်လို ကို့ယို့ကားယား အနေအထားနှင့်ပင် ဟိုတယ်၏ သီးသန့် စားသောက်ခန်းမှ ထွက်၊ ပင်မ ခန်းမကျယ်ကြီးကို ဖြတ်လျှောက်ကာ ပြင်ပလေထုနှင့် ထိတွေ့ရာ အရပ်သို့ရောက်တော့ လူက အတော်လေး ချွေးစို့ တုန်ရီ နေရပြီ။ ချစ်လှစွာသော သခင်မလေးကတော့ အောင်နိုင်သူ အပြုံးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြုံးရင်း ရှေ့မှ ၀င့်ကြွားစွာ ချီတက်နေတော့၏။ သူ ယူလာသည့် ကားကို မစီးလိုဟု ဆိုသဖြင့် တက်ဆီ တစ်စီး ငှားက သူမ နေထိုင်ရာ အိမ်သို့ အတူ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ကားသမားရှေ့တွင် ဘာများ အနိုင်ကျင့်ပြလေဦးမည်လဲ ဟူသည့် စိုးတထိတ်ထိတ် အတွေးနှင့် ဂွကျပ်ကျပ် ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ တီရှပ်ချိုင်းမှ အီစို့စို့ ကိုယ်နံ့ တို့ကို အံတုရင်း ချစ်စံအိမ်ကလေးဆီသို့ ရောက်မှန်း မသိ ရောက်လာရပြန်တော့သည်။
ခြံစည်းရိုးနှင့် အိမ်ပေါက်ဝအကြား ကွန်ကရစ်ခင်း လမ်းကလေးက ခါတိုင်းထက် လှနေသည်။ ဥဒေါင်း ငှက်ပျိုမလေး တစ်ကောင်လို့ ကျော့ကျော့မော့မော့လေး လျှောက်ဝင်သွားသည့် သခင်မ နောက်သို့ လက်ကလေး နောက်ပစ်လျှက် ခပ်ကုပ်ကုပ် လိုက်လာခဲ့၏။ တကယ်တော့ သည်အိမ် သည်နေရာသည် သူ့အတွက် အပြစ်ပေးစခန်း၊ တနည်းအားဖြင့် အကျဉ်းစခန်း သက်သက်။ သို့သော် သည်နေရာမှ မခွာတမ်း ပြစ်ဒဏ် ခံချင်နေသည့် မိမိ အတွက်တော့ သာယာကြည်နူးဖွယ် ဘုံဗိမာန်လေး ဖြစ်နေသည်။“ခုချိန်က
စ ပြီး ငါ ပြောသမျှ သေချာ အာရုံစိုက် နားထောင်.. ခိုင်းသမျှ တိတိကျကျ လုပ်ပေး.. နားမရှင်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. မကြားလိုက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. တခုခု လွဲချော်ရင် ငါပေးမယ့် အပြစ်က ရှေ့လျှောက် နင် ငါ့ မျက်စိရှေ့ ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာဘို့ပဲ.. ကျေနပ်လား..”“ကျေ နပ် ပါတယ်..”“အွန့် စင်ပေါ် သွားတင်.. လက်နှစ်ဘက်နဲ့ သေသေချာချာကိုင်.. အဲ့ဖိနပ်က နင့်ထက် အဘိုးတန်တယ်..”“………..”“လက်ဆေးပြီး သောက်ရေတစ်ခွက် သွားယူ.. အိပ်ခန်းထဲ လိုက်ခဲ့..”“………..”အိပ်ရာနဘေးတွင်
ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လျှောက်ရင်း သည်နေ့အဘို့ သူ့ကို ဘယ်လို ပုံစံပေးရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားမိသည်။ လျှော်မည့် အ၀တ်ခြင်းထဲတွင် မနက်က လုံးထွေး ထိုးထည့်ခဲ့သည့် အိပ်ရာခင်း ဖြူဖြူလေး ရှိနေသည်။ ထိုအိပ်ရာခင်းလေးပေါ်တွင် မိမိ၏ ကညာစင် အမှတ်အသား သွေးစက်လေးများ။ တကယ်တမ်း တွေးကြည့်လျှင် မိမိ ရလိုက်သည့် ခံစားမှုများက ပေးလိုက်ရသည်နှင့် ယှဉ်လျှင် အဆမတန် နည်းနေသေးသည်ဟု ခံစားမိသည်။ ကိုယ်က ရသလိုလိုနှင့် ပေးပြီးရင်း ပေးနေရသော အနေအထား။ စဉ်းစားရင်း နှလုံး ခုန်သံများက မြန်လာ၏။ လျှော်ခြင်းထဲမှ အိပ်ရာခင်းကို ထုတ်ယူပြီး ကြမ်းပေါ် ချထားလိုက်သည်။ တွန့်ကျေနေသည့် အိပ်ရာခင်းလေးက မိမိကို လှောင်ပြုံး ပြီး ကြည့်နေ၏။ အခန်းတံခါး ခေါက်သံနှင့် မရှေးမနှောင်း ၀င်လာသည့် စူးရှ..။ လက်ထဲတွင် ရေဖန်ခွက်ကလေး ကိုင်ပြီး မိမိကို ရီဝေေ၀ ကြည့်၏။ မိမိလက်ထဲ ဖန်ခွက်ကလေး ထည့်ပေးပြီး ခေါင်း ပြန်ငုံ့သွားသည်။ အကြည့်များက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှ အိပ်ရာခင်းလေးတွင် စူးစိုက်လျှက်။ ရေသောက်ပြီး ဖန်ခွက်ကို စားပွဲပေါ် တင်လိုက်သည်။ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး တည်ငြိမ်လှပနေအောင် ဖန်တီးထားလိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ်တွင် ခြေထောက်ချိတ်ပြီး ခါးလေးကော့ကာ ထိုင်လိုက်၏။ အသံကို အတည်ငြိမ်ဆုံး ဖြစ်အောင် ထိန်းရင်း အမိန့်စကားတို့ကို စ လိုက်သည်။“ငါ့ရှေ့မှာ လာထိုင်.. ဒူးထောက်ထား.. ”“………..”လက်နောက်ပစ်လျက်
အတိုင်း ဒူးထောက် ထိုင်ပေးလိုက်သည်။ ငုံ့ထားသည့် ခေါင်း၏ မျက်လုံးထောင့် တစ်နေရာတွင် ဖြူဝင်းနုဖတ်နေသည့် ခြေထောက်ကလေး။ ကော့ညွှတ်နေသည့် ခြေမလေးနှင့်
ခြေဖမိုးလှလှလေးက မိမိ မျက်နှာနှင့် ထိလုနီးပါး ဖြစ်နေသည်။ မြတ်နိုးစွာ ရူးသွတ်စွဲလမ်းရပါသော သခင်မလေး၏ ခြေချောင်း လှလှလေးများကို ခိုးကြည့်ရင်း အနမ်းတို့ဖြင့် ပြုစုခဲ့ရသည့် နေ့လေးကို သတိရမိသည်။ ခုနေ သည်အမိန့်ရောက်လာလျှင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်မလဲ ဟု တွေးနေခိုက် သူမ ခြေဖမိုးလေးက မိမိ မေးဖျားကို ဖြည်းညှင်းစွာ လာရောက် ပွတ်သပ် တို့ထိလာသည်။ လေညှင်းသဲ့သဲ့ တိုက်ခတ်သံနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည့် စကားသံ ခပ်တိုးတိုးလေးက ညှို့ငင်အား အပြည့်နှင့် နှလုံးသားကို တစ်ဆစ်ခြင်း ဆုပ်နယ် ချေမွတော့၏။ မိမိမေးစေ့ကို သူမ ခြေဖမိုးနှင့် ဆွဲမ ပင့်တင်ထားပြီး တစ်ခွန်းချင်း ပြောသည်။“မော့ စမ်း.. စူးရှ.. ငါ့ ကို သေသေချာချာ ကြည့် စမ်း..”“………..”“နင် မနေ့က ငါ့အပေါ် ဘာတွေ မှားခဲ့လဲ.. မှတ်မိလား..”“………..”“ငါ မူးနေတာကို အခွင့်အရေး ယူပြီးလေ..”“ငါ တောင်းပန်ပါတယ် ဖွေးရယ်..”“ဟက်..
ဘာ တောင်းပန်တာလဲ.. နင့်စိတ်ထဲမှာ အပိုင် တွက်ထားတာမှတ်လား ဟမ်.. အချိန်မရွေး ရနိုင်တဲ့ မိန်းမ ဆိုပြီး နင် လုပ်ခဲ့တာ.. ဒါကြောင့် နင် ခုလို
ပုံစံနဲ့ ငါ့နား ပြန်ရောက်လာတာလေ.. ”“ဖွေးရယ်.. ငါ တောင်းပန်.. အွပ်..”တောင်းပန်ပါတယ်ကလွဲပြီး
ဘာမှ ပြောစရာမရှိသည့် သူ့နှုတ်ခမ်းများ ခြေဖ၀ါး လှလှလေးနှင့် နှုတ်ပိတ်ခြင်း
ခံလိုက်ရသည်။ ရုတ်တရက်မို့ လူက နောက်သို့ တစ်ချက် ယိုင်သွားသော်လည်း သခင်မလေး မညိုညင်ရစေရန် မျက်နှာကို မော့လျက်ပင် တောင့်ခံထားပေးလိုက်၏။ ခြေဖ၀ါး လှလှလေးဆီမှ ချိုအီ သင်းပျံ့သည့် ရနံ့ကို သူ ရလိုက်သည်။ သူမ သုံးနေကျ ခြေသည်းဆိုးဆေးနှင့် ဘော်ဒီလိုးရှင်း ရောယှက်နေသည့် ရနံ့လေး။ မိမိ
ပါးစပ်ကို ဖိကန်ပြီး ပိတ်ထားသည့် ခြေဖ၀ါးလေးကို ပါးပြင်သဖွယ် သဘောထားပြီး ခိုးနမ်းမိသည်။ စက္ကန့် အနည်းငယ် ကြာလာတော့ အသက်ရှုရ ခက်လာ၏။ ခြေချောင်းလေးများကြားမှ လေ ရလိုရငြား ရုန်းကြည့်မိသည်။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကြား အောက်ဘက်မှ အနက်ရောင် ပင်တီလေး တစ်စွန်းတစ်စကို သူ မြင်လိုက်ရ၏။ “ဘာ.. ခိုးကြည့်တာလဲ.. ဟမ်.. ငါ မသိဘူး မှတ်နေလား.. ဟုတ်လား..”“……….”“တော်တော်
ကြည့်ချင်နေရင် တချိန်လုံး ကြည့်လို့ ရအောင် လုပ်ပေးထားမှနဲ့တူတယ်.. အကောင်းစား သတို့သားလေးဆိုတော့.. ငါက အမိဖမ်းထားရမှာပေါ့လေ.. ဟုတ်လား စူးရှ..”“………..”“ငါ မေးနေတယ်လေ.. ခုလိုကျ နင့် ပါးစပ်က.. အင့်ဟယ်.. အင့်.. အင့်..”အံကျိတ်သံနှင့်
ပြောရင်း ပါးစပ်တစ်ဝိုက်နှင့် ပါးနှစ်ဘက်ကိုပါ ခြေဖ၀ါးနှင့် စိတ်ရှိလက်ရှိ
ဖိပွတ်တော့သည်။ နောက်ကို လန်ကျလုလု ဖြစ်သွားသော်လည်း မရှောင်ရဲ။ သူမ စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တာ လုပ်နိုင်အောင် တောင့်ခံထားပေးမိသည်။ အသက်ရှုမ၀ ဖြစ်လာတိုင်း နုဖတ်နေသည့် ခြေဖ၀ါးလေးကို ခပ်ပြင်းပြင်း နမ်းရှိုက် ပစ်လိုက်၏။ မိမိမျက်နှာကို ခြေထောက်နှင့် စိမ်ပြေနပြေ ပွတ်နေသည်ကို သိသိကြီးနှင့် စိတ်က ညိုညင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ သူမ ခြေဖ၀ါးလေး လွတ်ထွက် သွားမှာကိုပင် စိုးစိတ်ဝင်ပြီး ကိုယ်ကိုယ် နောက်သို့ ယိုင်ကျမသွားအောင် တောင့်ထားပေးနေမိသည်။ သူမနှင့် နှစ်ဦးတည်း ထိတွေ့ရတိုင်း ဤနှယ် ကတ်သီးကတ်သတ် အနိုင်ကျင့်မှုများကို သာယာနေမိသည့် မိမိစိတ်ကို နားလည်လာအောင်
မကြိုးစားချင်တော့ပါ။“လာ.. ငါ့နားကို ဒူးထောက်လျက်တိုင်း.. နင် သိပ်ကြည့်ချင်နေတဲ့ ငါ့ ပင်တီ.. လာ ချွတ်ချေ.. လာ..” ခြေထောက်ကို မျက်နှာမှ
ခွာပြီး ကုတင်ပေါ် လက်နောက်ပြန်ထောက် ထိုင်လိုက်သည်။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို ခပ်ဟဟ
ကားပေးထားပြီး ခါးလေးကို ကော့ပေးထားရင်း ပြော၏။ သူ့နှလုံးသားထဲသို့ ရထား အစင်းပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းသွားတော့သည်။ နထင်စပ်မှ သွေးတိုးနှုန်းက မူးမိုက်ပြာဝေ သွားရလောက်အောင် ဆူညံလာသည်။ ဒူးထောက်ရွှေ့ပြီး သူမအနား တိုးကပ် သွားလိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ်တွင် လက်နောက်ပြန်ထောက် ထိုင်နေရင်း ဒူးတစ်ဘက်ကို ထောင်ပေးထား၏။ ခြေသလုံးတစ်ဝက်လောက် ရှည်သည့် ဂါဝန်စ ပျော့ပျော့လေးက ကန်လန့်ကာစလေး တစ်ခုလို ဖြစ်နေသည်။ ပေါင်တွင်းသား ဖွေးဖွေးလေးနှင့် အောက်ခြေမှ ပင်တီ အနက်ကလေးက ပြည့်တင်းသော ပေါင်တံရင်းနှင့် တင်စိုင်အိအိတို့ ကြားတွင် ပစောက် ပုံစံ မျဉ်းကွေးတစ်ခု ဆွဲပြထားသလို လှနေသည်။ “အဲ့ လက်က နောက်ပစ်ထားခိုင်းတယ်လေ.. ကြိုးတုပ်ရဦးမှာလား ဟုတ်လား..” ပင်တီလာချွတ် ဟူသော အမိန့်ဆိုတော့ လက်ကို အသာ ပြင်လိုက်မိသည်ပေါ့။ ဂါဝန်စလေးကို ကိုင်မိယုံရှိသေး ခြေထောက်တစ်ဘက်က မိမိ ပခုံးကို ဆတ်ကနဲ ဆောင့်တွန်းလာသည်။ မျက်နှာလေး မော့ကြည့်မိတော့ ပါးကို
တစ်ခါ ဖွဖွ ကန်လိုက်ပြန်သည်။ နှုတ်ခမ်းများကို ခြေဖျားနှင့် တွန်းပွတ်ရင်း..“လာချွတ်.. ဒီပါးစပ်နဲ့ ရအောင်.. လက်ပါလာရင် သေပြီသာမှတ်..” ပြောရင်းတစ်ခါ ဒူးနှစ်ဘက်ကို ထောင်ပြီး ခါးလေး ကော့ပေး၏။ ကြွတက်လာသော တင်စိုင်ကြောင့် ပိပိလေးက ရှေ့ကို ကော့ပေးထားသလို ဖြစ်သွားသည်။
ရင်ထဲ လှိုက်တက်လာသည့် ဆန္ဒတို့က တားမရ ဆီးမရ ဖြစ်လာသည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကျပ်ထုပ်ထုပ်ကြောင့် ရုန်းချင်တိုင်း ရုန်းမရနိုင်သည့် ညီတော်မောင် ခမျာတော့ စူးအောင့်အောင့်ပင် ဖြစ်လို့လာသည်။ ထောင်ထားသည့် ဒူးနှစ်ဘက်ကြား ခေါင်းတိုး ၀င်ချလိုက်တော့၏။ ဂါဝန်စလေးအောက် ရောက်သွားသည့် မိမိအဖြစ်က မီးရထားစီးရင်း လှိုဏ်ခေါင်းထဲ ဖြတ်သွားရသလို ဖြစ်သွားသည်။ အီမွှေးနေသည့် ကိုယ်သင်းရနံ့ တို့ကို အငမ်းမရ မြိုချမိ၏။ ဂါဝန်အောက်ထဲ ခေါင်းကြီး ထိုးထည့်ပြီးကာမှ မမြင်မစမ်းနှင့် ဘာက စ လုပ်ရမှန်း မသိတော့။
“အာ့ ဘာလုပ်နေတာလဲ.. အင့်ဟယ်..” အံကျိတ် ပြောရင်း ပေါင်နှစ်ဘက်ကို ပူးပစ်လိုက်သည်။ ကြံရာမရ ဖြစ်နေသည့် မိမိ ဦးခေါင်းက သူမ ပေါင်နှစ်ဘက်ကြားတွင် ညပ်နေ၏။ အသက်ရှုလိုက်တိုင်း တောင်ပူစာ ဖောင်းဖောင်းလေးဆီမှ မွေးရနံ့က ၀မ်းထဲထိ လှိုက်တက်လာသည်။ ဒီတိုင်း ဆက်ကြာနေလျှင် လူက အသက်ရှု ရပ်ပြီး မသေလျှင်တောင် အောက်မှ ညီတော်မောင် ပေါက်ထွက်ပြီး သေရတော့မည်။ မျက်စိ စုံမှိတ်လျက်မှပင် ပင်တီလေး၏ ခါးသားရေကြိုးနေရာကို ရောက်အောင် ခေါင်းတိုး ၀င်လိုက်၏။ စိတ်ထဲတွင် ဖော်ပြရန် ခက်သည့် ခံစားချက်များက စုံနေသည်။ မှိတ်ထားသော မျက်စိထဲတွင် ရောင်စုံအလင်းတန်းများ မြင်နေရ၏။ သူ့ဘ၀တွင် စိတ်ပင် မကူးခဲ့သည့် ကိစ္စများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်နေရသည်။ ခံစားချက် အသစ်အဆန်းများကို သူ ပျော်လည်း ပျော်၏။ စိတ်လည်း အိုက်မိ၏။ သို့သော် သည်အကျဉ်းအကျပ်ထဲမှ ရုန်းမထွက်ချင်။ မိမိပေါင်နှစ်ဘက်ကြား
ပိပိလေးနှင့် တည့်တည့်တွင် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်း ရောက်နေသည်။ ဂါဝန်စ အပေါ်မှ အလုံးလိုက် မြင်နေရသည့် သူ့ခေါင်းကို ကြည့်ရင်း ဖွေး နှုတ်ခမ်းများ ပြတ်လုမတတ် ကိုက်ထားမိ၏။ ခွေးလေးတစ်ကောင် ကြောင်လေးတစ်ကောင် မဟုတ်သည့် လူသား ယောင်္ကျားတစ်ဦး၊ မကြာမီ မိမိဘ၀၏ အိမ်ဦးနတ် ဖြစ်လာမည့်သူ။ မိမိ လုပ်ရပ်များက သိပ်များ လွန်ကျူးနေပြီလား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနှင့် မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်တာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်နေမိသည်။ သို့သော် သည်လိုတွေးမိလေ ပျော်လေ ဖြစ်နေသည်။ သူများနဲ့ မတူအောင် နေနိုင်မှ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်တော့မှာပေါ့.. သမရိုးကျ ဆန်လွန်းသော လူ့သဘာဝတွင် ကျင်လည်ရင်း နှစ်ရှည်လများ အသက်ရှင်ရသည်ထက် ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလုပ်ပြီး ခဏလေးပဲ နေရတာ တန်သည်ဟု ဖွေး ယူဆသည်။ယောင်္ကျားတစ်ယောက် စိတ်ပင်ပန်းစွာ ရှုထုတ်နေသည့် ထွက်သက် ပူပူများက မိမိ ပေါင်ရင်းနှင့် ပန်းမို့မို့လေးပေါ် အဆက်မပြတ် ကျနေသည်။ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ရှုသွင်းရှုထုတ် လုပ်နေသည့် သူ့ ပင့်သက် နွေးနွေးများက မိမိ ပေါင်းတွင်းတစ်ဝိုက်ကို ငှက်မွေးနုနုလေးနှင့် မထိတစ်ချက် ထိတစ်ချက် တို့ပေး နေသယောင်။ ကျွန်ကလေး ခင်မျာ သခင်မ၏ ဂါဝန်အောက် ပေါင်ကြားတွင် မွန်းကျပ်နေရှာသည်ထင့်။ တစ်ချက်တစ်ချက် နှုတ်ခမ်းလေး ဟ ၍ အသက်ရှုရန် ကြိုးစားပုံရသည်။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့စ တိမ်တိုက်လေးပေါ် ကျရောက်လာသည့် အာငွေ့နွေးနွေးများက ဟိုး အတွင်းပိုင်း နံရံဆီမှ ချစ်ဝတ်ရည် တို့ကို ပွက်ပွက် ဆူလာအောင် မီးထိုးပေးသလို ဖြစ်နေ၏။ အတွင်းဘက် နံရံမှ ကြွက်သား နုနုများတွင် ပိုးကောင်လေးများ အလုအယက် ပြေးလွှားတိုးဝင်နေသလို ခံစားနေရသည်။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို မသိမသာလေး ပြန် ဟ ပေးလိုက်သည်။ ပိပိလေးပေါ် အသက်ရှုနေသည့် သူ့နှုတ်ခမ်းများ ပင်တီ ခါးသားရေကြိုးဆီ ရောက်လာ၏။ ခါးလေး အသာ ကော့ကာ ဗိုက်ရှပ် ပေးလိုက်သည်။ သားရေကြိုးကို သူ့ပါးစပ်နှင့် ငုံမိသွား၏။ ခေါင်းကို ဘယ်ညာ လူးလှိမ့်ကာ ပင်တီကို ဆွဲချရန် ကြိုးစားနေသည့် ကောင်ကလေး။ သူ့လှုပ်ရှားမှုများကို
ဂါဝန်ပေါ်မှ ကြည့်ရင်း အားရကျေနပ်မိသည်။ သူ့ ခေါင်း တစ်ချက်တစ်ချက် လှည့်လိုက်တိုင်း နှာသီးဖျားလေးက မိမိ ချက်ကို လာလာ ကလိနေသည်။ ချက်ကလေးဆီမှ
ယားကျိကျိ ခံစားချက်က ညီမလေးနှင့် ပြိုင်နေ၏။ ကြက်သီး တဖျဉ်းဖျဉ်းနှင့် ချွေး စို့ချင်ချင် ဖြစ်နေသည့် တင်စိုင်များပေါ်မှ ပင်တီက အလွယ်တကူ ချွတ်၍ မရ။ အသည်းအသန် ကြိုးစား နေရှာသော သူ့ကို သနားလာမိသည်။ သူ့ခေါင်းကို ဂါဝန်ပေါ်မှပင် လက်နှင့်အသာ အုပ်ကိုင်လိုက်၏။ အောက်သို့ ခပ်ဖွဖွ ဖိတွန်းချသည်။ ခြေဖနောင့်တို့ကို အားပြု ထောက်လိုက်ပြီး တင်ပါးကို ကြွပေးလိုက်၏။ ပင်တီခါးစကို ကိုက်ထားသည့် သူ့မျက်နှာကို ဆီးခုံလေးနှင့် ပွတ်မိသွားသည်။ ခပ်ဆိုးဆိုး ညီမလေး ထူးဆန်းသော အထိအတွေ့ကို သဘောကျသွား၏။ သူ့ခေါင်းကို မသိမသာ ဖိပြီး တင်ပါးလေးကို ပင့်ကာ ပင့်ကာနှင့် ပူစီလေးကို မျက်နှာပေါ် တည့်တည့် ရောက်အောင် ပြေးဆော့ စေတော့သည်။ လူတစ်ကိုယ်လုံးလည်း
ရုပ်ရှင်တွေထဲတွင် မြင်ဖူးသည့် ဆေးသမားများ ယင်းထသလို တဆတ်ဆတ် တုန်ရီ နေတော့၏။ ပင်တီကို ဆွဲချွတ်ဘို့ အားထုတ်နေသည့် သူ့မျက်နှာနှင့် ထိုမျက်နှာကို မရမက လိုက်ပွတ်နေသည့် ခပ်ဆိုးဆိုး ပူစီမလေး။ မိမိက အငြိမ် နေမပေးတော့ ကျွန်ကောင်လေး၏ ပင်တီကျွတ်ရေး အားထုတ်မှုခမျာ တော်တော်နှင့် မအောင်မြင်။ ဖွေး စိတ်ကူး ပြောင်းလိုက်၏။ သည်တိုင်းဆို နေ၀င်သွားနိုင်သည်။ သူ့မျက်နှာနှင့် မိမိ ပန်းကလေးကြားတွင် ကန့်လန့်ခံနေသည့် ပင်တီကို အမြန်ဆုံး ကျွတ်သွားဘို့ အသည်းအသန် အလိုရှိနေမိ၏။ စိတ်ရိုင်းဝင်စ ပြုနေသည့်
ညီမလေးက သည့်ထက် ပိုသည့် ခံစားမှုတို့ကို တောင့်တလာပြီ။ ခေါင်းပေါ် အုပ်ထားသည့် လက်ကို ဖယ်လိုက်သည်။ ပိပိလေးကို ဆတ်ကနဲ ကော့ ပြီး မျက်နှာကို ဆောင့်တွန်း ပစ်လိုက်၏။ ရှုံ့ပွပွ ငိုရှိုက်နေသည့် ပူစီမလေး၏ တွင်းဝ တည့်တည့်က သူ့မျက်နှာနှင့် နင့်ကနဲ တစ်ချက်အထိ။ မိမိဝင်သက် ထွက်သက်များ လုံးဝ ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်သည်။ နတ်ပူးသလို တုန်ရီနေရင်းမှပင် တင်စိုင်များကို
နောက်သို့ ဆုတ်လိုက်ပြီး သူ့ပုခုံးတစ်ဘက်ကို ခြေထောက်နှင့် တွန်းထုတ်လိုက်၏။အမှောင်ထဲတွင် ကြိုးစားရုန်းကန်နေရင်း ရုတ်တရက် တွန်းထုတ် ခံလိုက်ရ၍ သူ လန့်သွားမိသည်။ သွားပြီ.. စိတ်ဆိုးပြီး နှင်ထုတ်ရင်
ပြဿနာ။ ပေါင်ကားပြီး ထိုင်နေသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ ပင်တီဘို့ ပါးစပ်နှင့် ကျွတ်အောင် ချွတ်ဘို့က ငှက်ပျောသီး အခွံခွာသလောက် မလွယ်။ သူမ အမြဲ ပြောလေ့ ရှိသလို သူကိုယ်တိုင်ကပဲ အသုံး မကျလွန်းတာလား မသိတော့။ အနည်းဆုံးတော့ သူမ မတ်တပ်ရပ်ပေးလျှင် ကောင်းမည်ဟု သူတွေးမိသည်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အံသြ သွားမိ၏။ မိမိ ကိုယ်တိုင်က သူမ ပင်တီကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ချွတ်ပြနိုင်ဘို့ ကြံကြံဖန်ဖန် အာသီသ ရှိနေတာပါလား..။ အတွေးက လူတစ်ကိုယ်လုံးကို စိမ့်တက်သွားအောင် ကြက်သီးများ ထ
လာစေတော့၏။ မတ်တပ် ရပ်ပေးပါလား ဖွေး.. ဟု ပြောကြည့်ရန် စိတ်ကူးမိစဉ်..။“ေ_ာက်
သုံးကို မကျဘူး.. ဖယ်..” ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းရင်း ဒေါသတကြီး ပြောလိုက်သည့် သူမ
စကားသံ။ ဟိုတယ်မှာ ပြောခဲ့သည့် နင့်အတွက် second choice မရှိဘူးနော် ဟူသည့် စကားက နားထဲ ပြန်ရောက်လာသည်။ ခုနေများ ထွက်သွားတော့လို့ ပြောရင် ဘာလုပ်ရပါ့။ ခြေသလုံး ဖက်ပြီးပဲ တောင်းပန်ရတော့မည် ထင်သည်။ စိတ်ညစ်ရသည့်အထဲ
ညီတော်မောင်ကလည်း တစ်မှောင့်။ အစောက အားပါးတရ ရှိုက်သွင်းခဲ့သည့် ညီမလေး၏ ၀တ်ရည် ရနံ့တို့ကို စုပ်ယူ သောက်သုံးရန် မာန်ဖီနေ၏။ စူးရှတစ်ယောက် အတော်ပင်
နေရခက်လှသည့် အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စိတ်ဆိုးနေသည့် သခင်မနှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီ အစုတ်ကျပ်ကျပ် အောက်တွင် လက်သီးလက်မောင်း တန်းချင်နေသည့် ညီတော်မောင်။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် မိမိဦးဏှောက်က ကြောက်နေရတာ နှစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပေါ့လား။ ပျက်သွားသည့် ဟန်ချက်ကို ပြန်ထိန်းရင်း ဒူးထောက်လျက်ပင် ခေါင်းငိုက်စိုက် ချထားလိုက်သည်။ မကြားရဲသည့် စကားကို နားစွင့် နေခိုက်..။
မိမိခေါင်းပေါ် စွပ်ကနဲ ရောက်လာသည့် တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် နထင်ကြောများ ထူပူသွားသည်။ ခါတိုင်းထက် ပို၍ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်အောင် ဖြီးသင်ထားမိသည့် ဆံပင်များထက်တွင် သူမ၏ ပင်တီ အနက်ရောင်လေး။ စွပ်ချလိုက်ပုံက ပေါင်နှစ်ဘက်နေရာတွင် မျက်လုံး တည့်တည့်။ ဂွကြားလေးက နှာခေါင်းရိုးတလျှောက်
ကွက်တိနီးပါး နေရာ ယူထားသည်။ ခါးသားရေကြိုးကို မေ့စေ့အောက် ရောက်အောင် သေသေချာချာ နေရာချလိုက်သေးသည်။ စိုရွှဲနေသည့် ၀တ်ရည်တို့၏ ရနံ့က တကူးတက ရှိုက်သွင်းရန် မလိုဘဲ ရင်ထဲသို့ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်လာ၏။ ခုနေ မိမိ ပုံစံကို မှန်တစ်ချပ်တွင် မြင်ရလျှင် ရှက်လွန်း၍များ အသက်ထွက်သွားမလား မသိပါချေ။“နင် ခုဏက ငါ့ဟာကို ခိုးနမ်းတယ် မဟုတ်လား စူးရှ..” သူမ အသံများရော အသားပါ ဆတ်ဆတ် တုန်နေခြင်းက ဒေါသကြောင့်လား၊ သို့မဟုတ် သူမကိုယ်တိုင်က သွေးသား၏ သာယာမှုကို လိုလားတက်မက် နေတာလား။ မျက်နှာ လှလှလေးက
ပန်းရောင်သန်းသည် ဆိုတာထက် နီမြန်းနေသည်ဟု ပြောမှ လုံလောက်ပေမည်။ မိမိကို ကြည့်သော အကြည့်များတွင် မိမိထံမှ တစ်စုံတစ်ရာကို ပြင်းပြစွာ ရယူချင်နေမှန်း ထင်ရှား၏။ မိမိအဖြစ်ကလည်း တကယ်ပဲ ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲ ရောက်နေရသည်။ မျက်နှာဖုံးစွပ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေသည့် ပင်တီလေးက ချည်သား ပါးပါးလေးမို့သာ တော်တော့၏။ ပါးစပ်ကြီး အုပ်ခံထားရလျှက်နှင့် ပြန်လည် ရှင်းပြရသည့် အသံများက အလုံးလုံး အထွေးထွေး ဖြစ်နေသည်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်း သခင်မလေး၏ ပိပိရနံ့တို့ဖြင့် ထုံမွှမ်းနေတော့၏။“ငါ.. ငါ အသက်ရှု မ၀ ဖြစ်သွားလို့ပါ ဖွေး.. စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာ..”“အသက်ရှုမ၀လို့ ဟုတ်လား..ေ_ာက်ရေး မပါလိုက်တာ.. အသက်ရှုမ၀ရင် အဲ့လိုပဲ ဖြစ်တတ်တယ်လား.. လာစမ်း ဟုတ်မဟုတ် စမ်းကြည့်ရအောင်..”ပြောရင်း
နားရွက်ကို ဆောင့်ဆွဲကာ ကုတင်ပေါ် ဆောင့်တွန်းလိုက်၏။ ကိုယ်တစ်ပိုင်း ကုတင်ပေါ် မှောက်ကျသွားသည်။ ဘောင်းဘီကြပ်ကြပ် ပေးသော ဒုက္ခက ငယ်ပါတင်မဟုတ်၊ အချိန်အတန်ကြာ ဒူးထောက် ထိုင်ထားရသည်မို့ ခြေထောက်များလည်း ကျဉ်သလိုလို ဖြစ်နေသည်။ သည်လို ကြပ်ထုပ် နေသည့် ဘောင်းဘီမျိုး ၀တ်လေ့ရှိသော မိန်းကလေးများကို မဆီမဆိုင် မြင်ယောင်ကာ အံ့သြမိသည်။ ငါ့ပုံစံကလည်း ဘောင်းဘီဖင်ကြပ် ၀တ်ထားသည့် မိန်းမကြီးနှင့်များ တူနေပြီလား။“…………..”“တက်.. ကုတင်ပေါ်..”“ဖွေး.. ဟိုလေ..”“ဘာတုန်း..”“ငါ ဒီဘောင်းဘီကြီး ချွတ်ပါရစေ နော်..”“ဘာကိစ္စ
ချွတ်ရမှာတုန်း.. ဘာလဲ ကုတင်ပေါ်တက် ဆိုတာနဲ့ နင်က အခွင့်ရေး ရတော့မယ် ထင်နေတာလား.. ဟုတ်လား.. ဟမ် စူးရှ.. နင်ဟာလေ.. ငါ ထင်တာထက် အများကြီး ပိုဆိုးနေပါလား..”ပြောရင်း နားရွက်ကို လိမ်ဆွဲလိုက်၏။ ထူပူသွားလိုက်သည်များ ပလာယာနှင့် ဆောင့်ဆွဲ ညှပ်လိုက် သလားပင် ထင်ရသည်။ ဟူးးး… စိတ်ကလည်း မြန်၊ လက်သံကလည်း ပြောင်ပါပေ့ သခင်မရယ်..။ နားရွက်ကို အရင်းမှကပ်၍ ၁၈၀ ဒီဂရီနီးပါး လည်ထွက်သွားအောင် လိမ်ဆွဲနေသည်။ မိမိ နားရွက်ကြီး ပြုတ်မထွက်ခင် အလျင်အမြန် ပြောရတော့၏။“အား.. အ .. မဟုတ်.. မဟုတ်ရပါဘူး ဖွေးရယ်.. ငါ ဟို.. ဘောင်းဘီက တအား ကြပ်နေတော့ နေရတာ တကယ် အဆင်မပြေလို့ပါ..”“ဘယ်လို အဆင်မပြေတာလဲ ပြောစမ်းပါဦး..”“ဟို.. ငါ အောင့် လာလို့..”“ဘယ်က အောင့်တာတုန်း..”ခေါက်ဆွဲ
ပွဲတစ်ဝက်စာကို ခွေးတစ်ကောင်လို စား ဟု ခိုင်းခဲ့သည်။ မတော်တရော် ဘောင်းဘီကို ၀တ်ခိုင်းခဲ့သည်။ ခု အောင့် သည်ဆိုတော့ ဖွေး နည်းနည်းတော့ ထိတ်သွားသည်။ အစာအိမ်တွေ ဘာတွေများ ဖြစ်နေရင် ဒုက္ခ။ သို့သော် သူ ပြန်ဖြေသည့် စကားကြောင့် လူက ရယ်ချင်ချင် ဖြစ်သွား၏။ မသနားသည့်အပြင် ထပ်တိုး၍ပင် အနိုင်ကျင့်ချင်သွားတော့သည်။ “ငါ.. ငါ့ ဟိုဒင်းက အောင့်တာဖွေး.. ဟိုလေ ဘောင်းဘီက တအား ကျပ်နေတော့..”သူ့စကား ဆုံးတော့ မျက်လုံးများ မှေးကျဉ်းပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို ဟန်ပါပါ ပြုံးလိုက်၏။ ကော့ညွှတ်သွားသည့် မိမိနှုတ်ခမ်းလေးကို မထိတထိ ကိုက်ရင်း သူ့မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်သည်။ ပင်တီခေါင်းစွပ် မျက်နှာဖုံးနှင့် ချစ်စရာ ကျွန်ကောင်လေး၊ မျက်လုံးများကတော့ ရမ္မက်ခိုး ဝေနေ၏။ “ဘောင်းဘီ ကျပ်ရုံနဲ့တော့ မအောင့်ပါဘူးဟာ.. မှန်မှန်ပြောစမ်း စူးရှ.. နင့်ဟာကြီး မာတောင် နေတယ် မဟုတ်လား..”“…………”“ခုနေ ချွတ်လိုက်ရင် ဖြောင်းကနဲ ထောင် တက်လာမယ် မဟုတ်လား..”“………..”“ဖြစ်ခွင့် မရှိဘူးလေ စူးရှ.. နင်က ငါ့ ကျွန်လေ.. ငါ့ လင် မဟုတ်သေးဘူး.. ပြောစမ်း နင် က ငါ့ရဲ့ ဘာကောင်လဲ..”“ကျွန်.. ကျွန် တစ်ကောင်ပါ..”“နင့်လို ကျွန်တစ်ယောက်က သခင်မကို ကြည့်ပြီး _ီး တောင်ပိုင်ခွင့် ရှိလို့လား..”“………..”“သခင်မ အနံ့ ရှုပြီး စိတ် ထ လာတာကို မထိန်းတဲ့ အပြင် ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီပါ ချွတ်ဘို့ ခွင့်တောင်းတယ် ဆိုတော့..”“မဟုတ်ဘူး ဖွေး.. ငါ ပြောတာ.. အဲ.. ငါ ခွင့်တောင်းတာက ဒီဂျင်းပန်ပဲ ချွတ်ဘို့ပါ.. ငါ့ မှာ အတွင်းခံ ပါပါတယ်ဟာ..”“မလိုချင်ဘူး..”“………..”“အောင့်နေလဲ
ကျိတ်ခံ စူးရှ.. ဟို အိပ်ရာခင်းမှာ သွေး စက်တွေ တွေ့လား.. မနေ့က ငါ မူးမူးနဲ့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားတုန်း နင် အခွင့်ရေး ယူခဲ့တာလေ.. နင့်ကို ငါ
သည်းခံ ပေးရတုန်းက သွေးပါ ထွက်ခဲ့ရတာ..”“………..”“နင့်ဥစ္စာကြီး ဘယ်လောက် တောင် နေနေ.. အောင့်ရုံအပြင် ပေါက်မထွက်ပါဘူး.. ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား..”“ဖွေး ရယ်..”“ဖွေး မရယ် နဲ့.. အခု ကုတင်ပေါ် တက်.. ငါ ခိုင်းတဲ့တိုင်း နေပေးမလား.. ဒါမှမဟုတ် ပြန်ချင်ပြီလား..”“နေ ပါ့မယ်.. နေပါ့မယ် ဖွေး.. ငါ မပြန်ပါရစေနဲ့ဟာ နော်..”
ကျွန်ကောင်လေးကို ကုတင် ပေါ်တွင် ပက်လက် လှဲအိပ်စေသည်။ “မှိတ်ထား နင့်မျက်စိ..” ခပ်မာမာ အမိန့်ပေးလိုက်၏။ မိမိ ပြောသည့်အတိုင်း သူ နေပေး၏။ သူ့ဦးခေါင်းနှင့် ကုတင် ခေါင်းရင်း အကြား ကျန်နေသည့် အကွာအဝေးက မိမိ လက်တစ်ကမ်းစာ ကွက်တိ။ ဂါဝန်စလေးကို အသာ မ ကာ ဒူးထောက်လျှက် မျက်နှာတည့်တည့်ပေါ် ကားယား ခွ လိုက်သည်။ နှင်းဖွေးဖွေး၏ ရင်ခုန်သံများ တားဆီး မရတော့သလို အသိစိတ်များလည်း ပျောက်လုလု ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ ပိပိလေး အတွင်းပိုင်းမှ ချစ်ပန်း ၀တ်ရည်ကြည်များ ပေါင်တလျှောက် စီးကျလာသလိုပင် ခံစားရ၏။ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေး နေသော ပန်းပွင့်လေးက ချော့မြူခြင်း၏ အထိအတွေ့ကို အငမ်းမရ အလိုရှိနေပြီ။ ကုတင် ခေါင်းရင်းဘောင်ကို လက်နှစ်ဘက်လုံးဖြင့် ထောက်ကိုင် အားပြုလိုက်သည်။ ဒူးတုပ်လျှက်အတိုင်း ပေါင်နှစ်ဘက်ကို ကားပြီး သူ့မျက်နှာ တည့်တည့်ပေါ် ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချလိုက်၏။ လူတစ်ကိုယ်လုံးက ထိန်းမရအောင် ဆတ်ဆတ် တုန်ရီနေသည်။ ဂါဝန်နှင့် အုပ်ထားသဖြင့် သူပုံစံ ဘယ်သို့ရှိမည်မှန်း မိမိ မသိရသလို မိမိ မျက်နှာ မည်မျှ တုန်ရီ ပျက်ယွင်းနေမှန်းလည်း သူ မမြင်နိုင်။ ဒူးနှစ်ဘက်တွင်
ရောက်နေသည့် အားများကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချ လိုက်သည်။ မျက်နှာပေါ် တည့်တည့် ဖိထိုင်လိုက်တော့ ပိပိလေး အ၀ တည့်တည့် နစ်ဝင်သွားသည့် တစ်စုံတစ်ရာက သူ့ နှာခေါင်း ဖြစ်နေဟန် တူသည်။ ပွတ်သပ် ချော့မြူခြင်းကို အလိုရှိနေသော လှိုဏ်ခေါင်းကလေး အတန်ငယ် ကျေနပ်သွား၏။ အ၀တည့်တည့်မှ ယားကျိကျိ
အရသာ ပြေသွားသည်အထိ သူ့ နှာခေါင်းကို ဖိ ပွတ်လိုက်သည်။ သို့သော် ကျေနပ်အားရမှုက ထိပ်ဆုံး ရောက်မသွားသည့်အပြင် ထပ်တိုး၍ပင် အလိုရှိလာသည်။လှိုဏ်ခေါင်းလေး
အတွင်းပိုင်းမှ ပိုးကောင်များ ထွက်ကျလာသလို ရွစိစိနှင့် အလွန်အမင်း ယား တက်လာ၏။ ဘရာစီယာ ပျော့ပျော့လေး အောက်မှ ရင်စိုင်များလည်း တဒင်္ဂအတွင်း ဖောင်းကြွ ကြီးထွား လာသယောင် ခံစားလာမိသည်။ ချိုသီးလုံးလေး၏ ထိပ်ဖျားမှ ယားကျိကျိ ခံစားချက်က ထိန်းမရ။ ကုတင်ခေါင်းရင်း ဘောင်အား လက်တစ်ဘက်ဖြင့် ထောက်ကိုင် ထားသည်။ ကျန် လက်တစ်ဘက်က ရင်သားများကို မိမိဖာသာ ဆုပ်နယ် နေမိသည်။ အစွမ်းကုန် ပွင့်အာနေသည့် ပန်းကလေး၏ အောက်တည့်တည့်တွင် သူ့မျက်နှာ။ ခါးလေးကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ဝေ့ကာဝိုက်ကာ လုပ်နေမိ၏။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးကြောများကတော့ တစ်နေရာတည်းတွင် အသက်ဝင်နေသည်။ ချစ်ဝတ်ရည် တို့ဖြင့် ရွှဲအိုင်နေသည့် ပိပိလေး အောက်တွင် နူးညံ့သော အရာတစ်ခု။ ထိုအရာဆီမှ ပင့်သက် နွေးနွေးတို့က ပန်းကလေး၏ ၀တ်ရည်တို့ကို ပိုမို အရည်ပျော်ကျလာအောင် အပူ ပေးနေသည်။ ခါးလေးတစ်ချက် ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်
လုပ်လိုက်တိုင်း မာထပ်ထပ် ဖြစ်နေသည့် မိမိ အစေ့လေးက သူ့နှာခေါင်းဖျားနှင့်
ခလုတ် တိုက်သွား၏။ လုံးဝကြီး ဖိချ မထားသေးပဲ ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သပ်ရင်း ဇိမ်ခံနေမိသည်။ ငါ တက်ထိုင်ပြီး ဟိုဟာနဲ့ ပွတ်နေတာ ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာပါလား.. အိုးးး…။ လက်များ ဆတ်ဆတ် တုန်လာ၏။ လက်မောင်း တလျှောက်ရှိ မွေးညင်းများ မတ်မတ် ထောင်လာသည်။ ကိုယ့် လက်မောင်းကိုယ် ပြန်ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ကြွတက်လာသော ကြက်သီး အဖုဖုလေးများက ထင်ထင်ရှားရှား။
ထိတွေ့မှုကို အလိုရှိလာသော ရင်စိုင်များက လက်တစ်ဘက်တည်းနှင့် မလုံလောက်နိုင်တော့။ ကုတင် ခေါင်းရင်းကို ထောက်ထားသည့် လက်ကိုပါ ရင်စိုင်ဆီ
နေရာ ရွှေ့မိသည်။ ခပ်ဖွဖွ ပွတ်နေသည့် ပိပိလေးက သူ့ မျက်နှာပေါ် လုံးလုံး ပိကျ သွားတော့၏။ လွန့်ကနဲ ရုန်းကန်လိုက်သော သူ့ လှုပ်ရှားမှုက မိမိအတွက် အထူးထူးသော အရသာကို ပေး၏။ တင်စိုင်များကို လုံးဝ ပြန်ကြွ မပေးဘဲ သူ့မျက်နှာပေါ် ဖိလျှက်အတိုင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ ပိပိလေးကို အ၀တ်နှင့်ပွတ်သုတ် လိုက်သလို ဖြစ်သွား၏။ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် မိမိ
ပင်တီကို မျက်နှာဖုံးလို စွပ်ပေး ထားမိသည်ပဲ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း သတိလက်လွတ် အပြုအမူမို့ သူ့မျက်နှာတွင် စွပ်ထားသည့် ပင်တီကို မဖယ်ခိုင်းခဲ့မိ။ ယခုတော့ တစ်လွှာခြားနေသည့် ပင်တီပါးပါးကို သူမ အလိုမရှိတော့ပြီ။တင်ပါးလေးကို အသာ ကြွလိုက်သည်။ ပျော့တွဲတွဲ ဂါဝန်စလေးကို မ ပြီး သူ့မျက်နှာကို ငုံ့မကြည့်ဘဲ လက်နှင့် စမ်းလိုက်၏။ မေးစေ့အောက်မှ သားရေးကြိုးကို ဆွဲချွတ်သည်။ မျက်နှာပေါ်မှ ပင်တီလေး ကျွတ်ထွက်သွား၏။ တင်ပါးပေါ်မှ ဂါဝန်စကို ခါးအထိ လိပ်တင်လိုက်သည်။ ရှေ့ဘက်ကိုတော့ သည်အတိုင်း ထားထား၏။ ကုတင်ခြေရင်းရှိ နံရံကပ် ကျွန်းဘီဒိုကြီးဆီမှ မှန်ပေါ်တွင် မိမိ ပုံရိပ် ထင်နေမလားဟု တွေးမိသည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ထင်သည့်အတိုင်းပင်။ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန် အိပ်နေသည့် ယောင်္ကျားတစ်ယာက် မျက်နှာပေါ်တွင် မိမိ ဖိထိုင် ထားသည်။ ပြောင်တင်း ၀င်းမွတ် နေသည့် တင်ပါးလေးနှစ်လုံး အလယ် အောက်တည့်တည့်တွင် သူ့မေးစေ့ကို မြင်နေရသည်။
ခါးကလေး အသာ ကော့လိုက်တော့ ဖင်လုံးပြောင်ပြောင်လေးနှစ်ခု၏ အထက်၊ အလယ် တည့်တည့်တွင် ဒိုင်းမွန်းခွက်လေးက ထင်းလာ၏။ တင်ဆုံ ခပ်ထွားထွားကို ဆန်ကော ၀ိုင်းသလို ဝှေ့လိုက်သည်။ တင်သားစိုင်နှစ်ခုက ဟန်ချက်ညီညီနှင့် နွဲ့နှောင်းစွာ လှုပ်ရှား သွားကြ၏။ ၀ိုင်းစက် စွင့်ကားနေသည့် မိမိ တင်အလှကို
ယခုလောက် တစ်ခါမျှ မနှစ်ခြိုက်ဖူးခဲ့။ မှန်ကို တစ်ချက်တစ်ချက် နောက်ပြန် ကြည့်ရင်း သူ့မျက်နှာကို ဝေ့ကာ ၀ိုက်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ပွတ်နေမိသည်။
စူးရှ လက်များ ဘေးဘက်သို့ ဆန့်တန်းကာ အိပ်ရာခင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထား၏။ သခင်မလေးက မိမိ မျက်နှာပေါ် တက်ဖိ ထိုင်ထားသည့်အပြင် ဂါဝန်စနှင့်လည်း အုပ်ထားသေးသည်။ မှောင်မဲ မွန်းကြပ်၍ အသက်ရှုရ ခက်လာသည်မှာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ကြီး ရေပူစမ်းကန်ထဲ ငုပ်နေရသလိုပင်။ သည်ကြားထဲ အပေါ်မှ သခင်မလေးက ငြိမ်ငြိမ်မနေ။ ခါးကို ဆန်ကောဝိုင်းသလို ဝှေ့လိုက်၊ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်လိုက်နှင့် မိမိ မျက်နှာကို သူမ ပိပိနှင့် စပယ်ရှယ် ပွတ်ချင်တိုင်း ပွတ်နေသည်။ မိမိ ပါးစပ်အတွင်း ယိုစိမ့်ကျလာသည်က ချွေးများလား ချစ်ဝတ်ရည်များလား မသဲကွဲတော့သော်လည်း ၀င်လာသမျှ မြိုချနေမိသည်။ ပိပိလေးကို ဆွဲစုပ်ချင်စိတ်၊ ခပ်ဖွဖွ ကိုက်ချင်စိတ်များ လှိုက်တက်လာ၏။ ဖင်ကြပ် ဘောင်းဘီအောက်မှ အငယ်ကောင်ကတော့ ရုန်းမရ ကန်မရ၊ သူ့ ဒေါသနှင့်သူ ထူပူ ယောင်ကိုင်းနေရရှာပြီ။ ပူလောင် အောင့်မြက်သော ဝေဒနာဆိုးကြောင့် လူဖြစ်များ ရှုံးသွားလျှင် ဒုက္ခဟု ဘုရားပင် တ နေမိ၏။ သခင်မ
အနိုင်ကျင့်သမျှ ကျိတ်ခံရင်း ခဏ ကြာတော့ မျက်လုံးများ ပြာဝေလာသည်။ အသက်ရှု၍
ရလိုရငြား မသိမသာလေးမှ သိသိသာသာ ရုန်းကြည့်၏။ မိမိက ရုန်းလေ၊ သခင်မလေးက ဖိလေ။ နောက်ဆုံး ကြံရာမရတော့ သခင်မလေး၏ နုဖတ်ဖတ် ပန်းပွင့်လေးကို နို့စို့သလို ခပ်ဖွဖွ ဆွဲစုပ်လိုက် မိတော့သည်။ မိမိဘက်က သည်လို လုပ်ပေးလိုက်တော့ မျက်နှာပေါ် တလင်းနယ်နေသော သူမ၊ ခေတ္တ ငြိမ်သက် သွား၏။ တွင်းကလေးကို လျှာဖျားနှင့် ထိုးမွှေ ပေးလိုက်ပြန်သည်။ သခင်မလေး အကြိုက်တွေ့သွားပုံ ရသည်။ ဖိထိုင်ထားရာမှ သူ့လျှာ အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားနိုင်ရန် ခပ်ကြွကြွလေး နေပေး၏။ သူလည်း အသက်ရှုခွင့် ခဏ ရသွားသည်။ သူမအလို ပြည့်သည်ထက် ပြည့်ရန် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အားအင်များကို လျှာကြွက်သား တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းကာ အကောင်းဆုံး ပြုစုပေးလိုက်သည်။ ပွင့်ချပ်လေး နှစ်ခုအကြား တွင်းဝလေးကို လျှာနှင့် ထိုးသွင်း၏။ မာတင်းတင်း အစေ့လေးကို ခပ်ဖွဖွ စုပ်ဆွဲ ပေးသည်။ ပွင့်ချပ် ကားကားလေး နှစ်ခုကို ပူးလျက်တစ်ခါ၊ တစ်ဘက်စီတစ်လှည့် ခပ်ဖွဖွ စုပ်ပေးသည်။ တအောင့် ကြာလာတော့ မျက်လုံးထဲတွင် အနက်ရောင် ကောင်းကင်နောက်ခံမှာ သက်တန့် ရောင်စင်များလိုလို ကြယ်တွေလတွေ လင်းနေသလိုလို ဖြစ်လာ၏။ လျှာရင်းများလည်း ပြုတ်ထွက်မတတ် ညောင်းညာ နေပြီ။ ထိုစဉ် သူမလည်း နတ်ပူးသလို တုန်ရီလာ၏။ မိမိ လျှက်ပေး စုပ်ပေးနေသည့် ကြားမှပင် ပိပိလေးကို ကော့ကာ ကော့ကာနှင့် အတင်း ဖိ ပွတ်တော့သည်။ သခင်မလေးက သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် တဖန်ပြန်၍ တလင်းနယ်တော့သည်။ သူမ ခံစားချက် အမြင့်ဆုံး ရောက်တော့မည်မှန်း သိလိုက်၏။ အရေးအကြီးဆုံး အချိန်ရောက်ပြီ။ သူမကို အကောင်းဆုံး စိတ်ကျေနပ်မှု ရသွားစေချင်သည်။ သည့်အတွက် ဘယ်လို ဆုလာဘ် မျိုးကိုမျှ မိမိ မမျှော်လင့်ပါ။ အသက်ရှုကြပ်နေသည့်
ကြားမှပင် ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန် ဟ လိုက်၏။ အစေ့မာမာလေးရော၊ နုဖတ်အိထွေးနေသည့် ပွင့်ချပ်လေး နှစ်ခုရော၊ အကုန်လုံးကို စုပ်ထားပေးလိုက်၏။
အပေါ်ကနေ စိတ်ကြိုက် လှုပ်ရှားပါ သခင်မဖုရားရေ…။ ကျွန်ကောင်လေး၏ လျှာအစွမ်းက နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းလွန်းသည်။ မျက်နှာပေါ် ဖိလိုက်၊ ခပ်ဖွဖွ ပြန်ကြွပေးလိုက်နှင့် အရသာ အပြည့်အ၀ ခံစားပစ်လိုက်၏။ ခဏနေတော့ ပိပိလေး အတွင်းပိုင်းမှ ကျင်တက်လာသည်။ ဆီးသွားချင်သလိုလို ဖြစ်လာ၏။ ဟင့်အင်း.. အဲ့လောက်ကြီးတော့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်..။ မိမိစိတ်ကို ထိန်းရန် ကြိုးစားပါသေးသော်လည်း မအောင်မြင်။ မိမိ ခံစားချက် ထိပ်ဆုံး ရောက်ဘို့အရေး သတိလက်လွတ် ပြုမိကုန်သည်။ မျက်နှာကို အတင်းဖိပြီး စိတ်ကြိုက် ပွတ်မိတော့၏။ အလိုက်သိသော ကျွန်လိမ္မာလေးကလည်း မိမိပစ္စည်း တစ်ခုလုံး အားကုန် စုပ် ဆွဲ ပေးထားသည်။ သည်လိုနှင့် စိတ်ကြိုက် ခံစားရင်း ခါးလေး ကော့ကာကော့ကာနှင့် ….။
အဆုံးထိ မြင့်တက်သွားသော ခံစားချက်၏ နောက်တွင် လှိုက်မော တုန်ရီရင်း အံ့သြမိသည်။ ကာမအာသီသ၏ ပြီးပြည့်စုံမှုက နက်နဲ ဆန်းကျယ် လှပါလား။ မိမိကိုယ်ထဲသို့ ဘာကိုမှ ထိထိရောက်ရောက် ထိုးမထည့်ပါဘဲ၊ မိမိ တစ်ကိုယ်တည်း အာသာ ဖြေဖျောက်ရသလို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မပါပါဘဲ သည်လို ကျေနပ်စရာ ခံစားချက်မျိုး ရှိသတဲ့လား။ လိုရာ ခရီးဆုံး ရောက်သွားတော့ လူက အကြောဆွဲသလို တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ တုန်နေသေးသည်။ ကျွန်လိမ္မာလေးကတော့ ပိပိလေး၏
အတွင်းပိုင်းမှ ဒလဟော ယိုစီး ကျလာသည့် ချစ်ဝတ်ရည်တို့ကို အငမ်းမရ သောက်သုံး မြိုချ နေဆဲ။၀ုန်းဒိုင်းကျဲ နေသည့် သခင်မလေး ကုတင်ခေါင်းရင်းကို လက် ထောက်ကာ ငြိမ်ကျသွားပြီ။ ဂါဝန်နှင့် အုပ်ခံထားရသည့်
မိမိကတော့ သူမ ပိပိလေးအောက်တွင် ငြိမ်ဝပ် ပိပြားနေဆဲ။ မည်မျှပင် ပင်ပန်း ခက်ခဲသော်ငြား သူ ပျော်မိပါသည်။ အလုံးအရင်းလိုက် ပြိုဆင်းလာသော ၀တ်ရည်တို့ကို တစ်ကျိုက်ပြီး တစ်ကျိုက် သောက်သုံးနေမိ၏။ အောက်ဆီဂျင် အစားထိုး မွှေးအီအီ ရနံ့ကလည်း မြိုချ၍ မ၀ နိုင်လောက်အောင်ပင် ယစ်မူးဖွယ် ကောင်းလွန်းသည်။ သည်နေ့ သည်အချိန်အဘို့ မိမိ ကိုယ်ထဲ စီးဝင်သွားသော သူမ၏ စွန့်ပစ် ပစ္စည်း အားလုံးသည် မိမိဘ၀အတွက် အစွဲလန်းရဆုံး ၀ိုင်ချိုများဟုပင် တင်စားလိုက်မိတော့သည်။ ကိုယ်လုံးလေး ဘေးလှည့်ကာ ကုတင်ခေါင်းရင်းကို
ခပ်လျှေလျှော မှီ၍ ထိုင်လိုက်သည်။ သူ့ပုခုံးကို ခြေဖျားနှင့် ခပ်ဆတ်ဆတ် လှမ်းကန်ပြီး ထ ခိုင်းလိုက်၏။ ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းပြီး ဒူးထောက် နေပေးရှာသည်။ သူ့မျက်နှာကို မကြည့်ဖြစ်အောင် သတိထားပါသော်လည်း မျက်ဝန်းထောင့်က မိမိ ပန်းကလေးမှ ၀တ်ရည်များနှင့် ပေကျံနေသည့် ကျွန်လူချောလေး၏ ညှိုးငယ်ငယ် မျက်နှာလေးကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်နေရသည်။ မိမိအပေါ် သည်လောက် သည်းခံပြုစုပေးထားသည့် ကျွန်ကလေးကို ဆု ချီးမြှင့်ရန် အချိန် ရောက်ပြီဟု တွေးမိသည်။ ခုချိ်န်မှာ သူ အလိုချင်ဆုံး အရာက ဘာ ဖြစ်နိုင်မလဲ..။ ငါ
အရမ်း ကျေနပ်သွားပြီ စူးရှ.. ဒီနေ့အဘို့ နင် စာမေးပွဲ အောင်တယ်.. ဒီအတွက် ငါ နင့်ကို တစ်ခုခု ပြန်ပေးမယ်.. နင် ငါ့ ဆီကနေ ဘာလိုချင်လဲ.. ခုနေ ငါ့ဆီက ဘာဆု လိုချင်လဲ လို့ မေးရင် နင် ဘယ်လို ပြန်ဖြေမလဲ ငါ အရမ်း သိချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် နင် တောင်းမယ့် အရာတိုင်းတော့ ငါ ပေးဖြစ်မယ် မထင်ဘူး.. တောင်းတိုင်းပေးရင် နင် ယောင့်တက်လာမယ်လေ နော့.. ဒီတော့ နင့် အတွက် သင့်တော်မယ် ထင်တဲ့ ဆုကို သခင်မ ဖြစ်တဲ့ ငါကပဲ ဆုံးဖြတ် ပေးရမှာပေါ့..
“ဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက် စူးရှ..”“……….”တစ်ချက်လွတ် အမိန့်စကား၏ အသံက တုန်ရီ လှိုက်မောမှု မပြယ်သေး။ သူမ မျက်နှာကို လုံးဝ မော့မကြည့်ဘဲ ခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့်ပင် မတ်တပ် ထ ရပ်ပြီး ဘောင်းဘီ ဇစ်ကို ဆွဲချသည်။ အတွင်းခံအောက်မှ ညီတော်မောင် အဖြစ်က ခုံးကျော် တံတားကြီး တစ်ခုနှင့်ပင် တူနေသေးတော့၏။ ဇောချွေး တို့နှင့် ရွှဲနစ် ကြပ်ညပ်နေသည့် ဘောင်းဘီစုတ်က ချွတ်ရ ခက်လိုက်သည်မှာ ဒူးအထိ ရောက်လောက်အောင်ပင် မနည်း ကြိုးစား ဆွဲချ နေရသည်။ သည်လောက် ထူပူကြပ်ညပ်နေသည့် ဘောင်းဘီနှင့် တနေကုန်များ နေရပါလျှင် အောက်ပိုင်း သေသွားမလားပင် တွေးမိ၏။ ခု လောလောဆယ် အဘို့တော့ ရာဂမီး မသေ သေးသည့် ညီတော်မောင်ခမျာ လုံးဝ မဟုတ်သော်လည်း အတန်ငယ် အသက်ရှုခွင့် ရသွားပြီ။“အဲ့ အတွင်းခံပါ ချွတ်..”“……….”သည်တစ်ကြိမ်တော့
သူမ မျက်နှာကို ကြည့်မိသွားသည်။ စိတ်လည်း အရမ်း လှုပ်ရှားလာ၏။ စောစောက အခြေအနေအရတော့ သူမ မိမိကို ကျေနပ် အားရပုံ ပေါ်ပါသည်။ သို့သော် အသိရခက်သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ စိတ်ကို သူ မမှန်းဆတတ်။ စိတ်ဆိုးဒေါသ ကျန်တော့ပုံ မရသော်လည်း မိမိကို စိုက်ကြည့်နေသည့် သခင်မ၏ မျက်ဝန်းများက နေတစ်စင်းလို ပြင်းထန်နေဆဲ။ နှုတ်ခမ်း နှစ်လွှာကလည်း တင်းတင်းပြတ်ပြတ် စေ့ထားဆဲ မဟုတ်ပါလား။ သူမ မရိပ်မိအောင် သက်ပြင်းတစ်ချက် ခိုး ချပြီး ဘောင်းဘီခါးကို ဆွဲချလိုက်သည်။ နီရဲပြဲကွဲနေသည့် အတံကြီးက ၀ုန်းကနဲ ထောင် ထွက်လာ၏။ ညီတော်မောင်၏
ကာယဗလကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်တောင် အံ့သြမိသည်။ ရှက်လည်း ရှက်သည်။ သည်လောက် နှိပ်စက် ခံနေရတဲ့ကြားက နှာ ထ ရလေခြင်းဟုများ ပြောချလိုက်လေမလား။ သခင်မတစ်ပါး၏ ရတနာ ရွှေကျုတ်ကိုမှ မတန်မရာ သွားရည် ယိုရကောင်းလားဟု အမျက်တော် ရှဦးလေမလား။ သခင်မလေးက ကုတင်စပ်သို့ တိုးရွှေ့လာသည်။ ထူထူပူပူ အတွေးများနှင့် လူက တဖြည်းဖြည်း ကျုံ့ဝင်သွားသလို ဖြစ်လာ၏။ ကုတင်ပေါ် ခြေလေး
ချိတ် ထိုင်ပြီး လက်ပိုက်ထား၏။ “လာ.. ဒီနား တိုးပြီး ဒူး ပြန်ထောက်ထား..” သူ ထိုင်ရမည့် နေရာကို ခြေထောက်နှင့် ညွှန်ပြသည်။ ကော့ညွှတ်နေသည့် ခြေဖျားလေးနှင့် သတ်မှတ်ပေးသည့် နေရာ တည့်တည့်တွင် ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည်။
အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိသည့် ချာတိတ်က သခင်မရှေ့တွင် တယမ်းယမ်း။“ခြေဖနောင့်ပေါ် ဖင်ထိုင်ထားစမ်း.. ”“………..”“ဒူးနှစ်ဘက်ကားထား..”ငိုးတိုးငေါက်တောက်
ဖြစ်နေသည့် ချာတိတ်ကို သူမ ခြေဖမိုးလေးနှင့် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ လာ ဆော့သည်။ လူတကိုယ်လုံး မီးခိုးငွေ့ ဖြစ်လုနီးပါ လောင်မြိုက်လာ၏။ သူမ ခြေချောင်း လှလှလေးများက အလံတိုင်ခြေရင်းရှိ ချုံစပ်ကို ရောက်လာသည်။ ရိတ်သင်ခြင်း မရှိဘဲ ခပ်တိုတို ညှပ်ထားလေ့ရှိသည့် အမွေးမည်းမည်းများကို ခြေချောင်းလေးနှင့် ခပ်ဖွဖွ ညှပ်ပြီး ဆွဲယူ ဆော့ကစားနေပြန်၏။ ပြီးနောက် ခြေဖျားလေး ကော့ကာ အတံကြီးအောက်ခြေ ရှုံ့အိပ် အတွင်း ပုန်းနေသည့် ဘောလုံး အမြွာပူးကို တော့လိုက် ပွတ်လိုက်နှင့် ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ဆော့ပြန်သည်။ သူ့စိတ်တွေ ထူပူ ပေါက်ကွဲလာရပြီ။ သခင်မလေးကို ချစ်ပစ်ချင်စိတ်များ တားမရတော့။ မိမိ ပစ္စည်းကို ခြေထောက်လှလှလေးနှင့် ဆော့ချင်တိုင်း ဆော့နေသည့်
မိန်းကလေး။ စိတ်ကူးထဲတွင် ၀ုန်းကနဲ ကုန်းထပြီး ဖက်နမ်း ကြမ်းရမ်း ပစ်လိုက်ချင်ပါသော်လည်း လက်တွေ့ အားဖြင့်တော့ မျက်နှာလေးကို သော်မှ မော်မကြည့်ရဲ။ မတော် စိတ်ကွက်ပြီး ငယ်ပါကို ဆောင့်ကန်လိုက်မှ မဟာဒုက္ခ မဟုတ်ပါလား။ မိမိ အာသီသများကို သူမ မရိပ်မိအောင် ခေါင်းကို ငုံ့နိုင်သလောက်
ငုံ့ထားမိသည်။ အသက်ပင် ရဲရဲ မရှုဝံ့လောက်တောင် တုန်လှုပ်နေမိခြင်းက ခြေထောက်လေး၏ အထိတွေ့ကြောင့်လား။ သခင်မ၏ ညှို့ဓာတ်ကြောင့်လား သူ မခွဲခြားနိုင်ခဲ့။ သခင်မလေးက တစ်ဆင့် တိုး၍ နှိပ်စက် ပြန်သည်။ အလံတိုင် ခြေရင်းကို ခြေမ ခြေညိုးတို့ အကြား ညှပ်လိုက်၏။ အလုံးနှစ်လုံးကို ခြေဖ၀ါးနှင့် ခပ်ဖွဖွ ကန်ထားသည်။ သေတော့မယ်.. သေတော့မယ်.. ငါ.. ငါ သေတော့မယ် ဖွေးရယ်..။ ကတ်သီးကတ်သတ် ထိတွေ့မှုများကြောင့် သူ့အတံကြီး အရင်ထက်
နှစ်ဆလောက် ထွားလာပုံ ရသည်။ သခင်မလေးက တိုင်ခြေရင်းကို ညှပ်ထားရင်း ဆွဲ ခါ
ပြန်၏။ အလမ္မာယ် ဆရာမ၏ ကျွမ်းကျင် သပ်ရပ်သော ပညာပြချက်များအောက်တွင် ထွားကျိုင်းသန်မာသည့် နဂါးကြီး ပင်ပန်းကြီးစွာ ယိမ်းထိုး လှုပ်ရှားနေရတော့သည်။ဒစ်အဖျားကို ခြေခုံနှင့် တော့ တော့ ပြီး ဆော့ကစားနေ၏။ ညီတော်မောင်၏ ထိပ်ဖျားမှ စို့နေသည့် မျက်ရည်သီးလေး သခင်မ ခြေဖမိုးပေါ် ကြွေကျ သွားသည်။ ချွဲကျိကျိ အမျှင်တန်းလေးကို တအံ့တသြ ကြည့်ပြီး “အာ.. ဒါ ဘာတွေတုန်း.. ဟမ် စူးရှ.. ငါ့ ခြေထောက်ပေါ် ပေကုန်ပြီ.. ဘာတွေတုန်း…”။ အပြာကားအချို့တွင် မကြာခဏ မြင်ဖူးးသည့် မြင်ကွင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူသည့် အရည်ကြည်များ။ ဖွေး နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက်ထားမိသည်။ သူတို့လည်း လိုချင်လာရင် ငိုတတ်ပါလား.. ခိခိ။ သည် မြင်ကွင်းမျိုး လက်တွေ့မြင်ရမည်ဟု တစ်ခါမှ မတွေးဖူးခဲ့။ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ဖိုမိသည်။ ပြီးမှ မိမိကိုယ်ကိုယ် လှောင်ရယ်ချင်စိတ် ၀င်လာပြန်၏။ အင်းလေ တကယ်တော့ ဒါက ထူးမှ မထူးဆန်းပဲ.. ခုလေးတင် သူ့မျက်နှာပေါ် အ၀ှာနဲ့ တက်ထိုင် ပွတ်နေခဲ့ပြီးမှ ဒီလောက်လေးကို ရင်ဖိုစရာလား.. ငါ့ နှယ်.. ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ..။“ပြန်သုတ်ပေးစမ်း.. ရွံစရာ ကောင်းလိုက်တာ..”“………..”“လျှာနဲ့ လျှက်ခိုင်းတာ.. အဲ့လက်က နောက်ပစ်ထားလေ ဘာ လဲ..”တကယ်က
မိမိခြေဖမိုးပေါ် ပေသွားသည့် သူ့ အရည်က နည်းနည်း၊ မိမိ အနိုင်ကျင့်လိုသည်က များများ ဖြစ်နေ၏။ သူ့မျက်နှာပေါ် တက်ပြီး လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခဲ့သည့်မိမိက သူ့အရည်ကြည်များကို ရွံသည်ဟု ပြောဖြစ်အောင် ပြောလိုက်မိသေးသည်။ ခမျာ ခြေဖမိုးလေးကို တယုတယ လျှက်ပေးနေရှာ၏။ တော်တော် ချစ်ဘို့ကောင်းတဲ့ ကျွန်ကလေး၊ ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ နင့်ကိုငါ ဂုဏ်ထူးပါ ပေးသင့်သွားပြီ..။
“နင် ဟိုဟာ လုပ်ချင်နေတာမှတ်လား စူးရှ..”“……….”“ဟဲ့.. ငါ မေးနေတယ်လေ..”“ငါ.. ငါ တွိုင်းလက် ခဏ ၀င်ပါရစေ ဖွေးရယ်.. နော်..”“ငါ မေးတာ မဖြေဘူးပေါ့ ဟုတ်လား..”“မဟုတ် ပါဘူး ဖွေး.. ဟုတ် ဟုတ် ပါတယ်..”“အာ.. ဘာတွေတုန်း.. ဘာတွေတုန်း.. ကဲဟယ်.. အွမ့် အွမ့်..”“အားး…
အ…အ.. ဖွေး.. မဟုတ်ပါဘူးက နင်မေးတာ မဖြေချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောတာပါ.. ဟုတ်ပါတယ်က.. ဟုတ်.. ဟုတ် ပါတယ်.. ငါ တအား.. ဟိုဟာ လုပ်ချင်နေတာ.. ဟုတ် ဟုတ်ပါတယ်လို့..”“လုပ်.. ငါ့ ရှေ့မှာ လုပ်..”“အွန်..”“လာပြန်ပလား ဒီ အွန်.. ငါ နော်.. ဟွမ်းးးး..”“အာ အာ.. မလုပ်ပါနဲ့ ဖွေးရယ်.. ငါ့ နားရွက် ပြတ်ထွက်တော့မယ်..”“လုပ်..
အာ့ဆို ခိုင်းတဲ့အတိုင်း.. မလုပ်ချင်ရင်လည်း ရတယ်.. နောက် ဘယ်တော့မှ လုပ်ချင်စိတ် မ၀င်အောင် ငါ လုပ်ပေးမယ်.. နေဦး.. ကပ်ကြေး ရှာလိုက်ဦးမယ်..”“အာ.. ဖွေး.. အဲ့လောက်ထိတော့ မရက်စက်ပါနဲ့.. လုပ် လုပ်ပါ့မယ်.. နင် ခိုင်းတဲ့တိုင်း ငါ လုပ်ပါ့မယ်..”သူမ
သည်လောက် လုပ်မည် မဟုတ်မှန်းတော့ သိပါသည်။ သို့သော် ဆတ်ကနဲ ထရပ်လိုက်သည့်
သခင်မ၏ ခြေသလုံးလှလှလေးကို လှမ်း ကိုင်ပီး ပြောလိုက်မိ၏။ မိမိထက် ခေါင်းတစ်လုံးစာလောက် ပုသည့် သခင်မ ပုစိကွေးလေးကို ခုလို ကြောက်ပြပေးနေရတာ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဂွတီးဂွကျ နိုင်လှသော်လည်း သူ ပျော်နေမိသည်မှာ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ။ ခုလည်း သခင်မ အမိန့်အတိုင်း သူမရှေ့တွင် ဂွင်းတိုက်ပြရန် ပြင်ဆင်ရတော့၏။ သူ တစ်ခု တွေးပူမိသွားသည်။ ညီတော်မောင် စမန်ထ နေပုံနှင့် ထွေးထုတ်မည့် အရည်များက နည်းမည် မဟုတ်။ စောစောက အရည်ကြည်လေး ပေတာတောင် ရွံတယ် ဆိုသည့် သခင်မ၊ လျှာဖြင့် လျှက်ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်စေသည့် သခင်မ၊ ဂွင်းထုရင်း ထွက်လာမည့် သုတ်ရည် တပြွတ်ပြွတ်ကို မြင်လျှင် ဘာများ ပြောလေမလဲ။ ဒါတွေကို လျှာနှင့် လျှက်ခိုင်းလျှင်တော့ သွားပြီ။ အတွေးက လူကို ကြက်သီး ထ စေသလို ညီလေးကို အားပိုတက်အောင် မြှင့်ပေးနေပြန်၏။“ဖွေး…”“ဘာ တုန်း..”“ငါ.. ဟိုဟာ လုပ်ရင်းနဲ့ ပြီး သွားရင် လေ..”“အရည်တွေ ပန်းထွက်မှာ မှတ်လား..”“အွန်း.. အာ့က စောစောကထက်..”“ငါ သိသားပဲ.. ဘာဖြစ်လဲ အဲ့တော့..”“နင် ရွံ.. ရွံ မလားလို့ပါ..”“ဟဟ.. အင့်.. နင့်ဟာကြီးကို ဒါနဲ့ ပတ်ထားလိုက်.. ဒါ ဒီနေ့အဘို့ နင့်တွက် ငါ ပေးတဲ့ ဆု..”“အင်း..”“အဲ့ကြားကမှ ထွက်ကျရင်တော့ သိတယ်နော်.. စောစောက အတိုင်းပဲ..”“အင်း.. အင်းပါ..”“လုပ်လေ.. လုပ်တော့လေ..”သူမ
ဆု အဖြစ်ပေးသော ပင်တီလေးကို မိမိ ချာတိတ်မှာ ပတ်လိုက်သည်။ ချစ်ဝတ်ရည်တို့ဖြင့် စိုလူးနေသည့် ပင်တီလေးက သူမ၏ ပိပိလေး ကိုယ်စား ညီတော်မောင်ကို ထွေးပွေ့ ပေးထား၏။ ချစ်ရသည့် မိန်းကလေးရှေ့တွင် သူမကို လက်ဖျားနှင့်ပင် မထိရဘဲ မိမိဘာသာ လိင်စိတ် ဖြေရသည့် အဖြစ်ပါလား။ သူမထံမှ မိမိ မျှော်လင့်ထားသည့် လက်ထပ်ခွင့်လေးများ ရခဲ့လျှင်သော်မှ တစ်သက်လုံး သည်လိုသာ ဆိုရင်တော့ သွားပြီ။ “မျက်စိ မှိတ်ထား.. ငါ ပြောပြတာ အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်.. လက်က လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်.. မျက်စိ ဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ သေဘို့ ပြင်နော်.. ဟွန်းး..”သခင်မ အမိန့်အတိုင်း
မိမိ မျက်လုံးများ မှိတ်လိုက်သည်။ ညီတော်မောင်ကို ပွေ့ဖက်ထားသည့် ပင်တီ အနက်ရောင်လေး နေရာတွင် ရှိုက်နမ်းခဲ့ဖူးသည့် ပန်းပွင့် လှလှလေးကို မြင်ယောင်မှန်းဆလိုက်၏။ စိတ်ကူးထဲတွင် မရမ်းသွေးရောင် သစ်ခွတစ်ပွင့်နှင့် တူသည့် သခင်မလေး၏ ပိပိလေးထဲ မိမိ လိင်တံကြီး နစ်ဝင်သွားသည်။ အိစက် စီးပိုင်နေသည့် အတွေ့လေးကို စိတ်ကူးနှင့်ပဲ မှန်းဆလိုက်၏။ နားထဲတွင် သခင်မလေး၏ ပင့်သက်ရှိုက်သံ အချို့ မှန်းဆ ကြားယောင် မိသည်။ ရမ္မက်လှိုင်းတို့ လွန့်လူးနေသည့် ပင့်သက် ရှိုက်သံများ..။ ကိုယ့်စိတ်ကူးနှင့်ကိုယ် စီးမြော နေစဉ် သူမ စကားသံ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး နားထဲ ရောက်လာ၏။ ခါတိုင်း ကြားနေကျ မာဆတ်ဆတ် လေသံမျိုးမဟုတ်။ အချစ်၏ ရမ္မက်ပင်လယ်တွင် ကူးခတ်ရင်း နွမ်းလျ ယစ်မူးနေသည့် သူမ အသံလေးက မိမိ ခံစားချက်ကို တမ်ပို မြှင့်ပေးတော့သည်။“သိလား စူးရှ.. အခု လေ..”“……အင်းး……”“ငါ့ ပိပိ လေးထဲမှာ..”“……အင်း ဟင်းး……”“အရမ်းပဲ ဟယ်.. ရွစိ ရွစိနဲ့..”“……ဟူးးး……”“သိလား.. ငါ လေ..”“……အင်း……”“ပိပိလေးကို ရှုံ့ပွ ရှုံ့ပွ လုပ်နေတာ..”“……ဟားး……”“ငါ့ ဘာငါ ကိုင်ကြည့်တာလေ..”“……ရှီးး……”“နွေး ပြီး.. နု ဖတ်နေတာပဲ စူးရှရယ် သိလား..”“……အင်းးး.. အင်းး……”“ပြီးတော့ စောစောက နင် မြိုချခဲ့တဲ့ အရည်လေးတွေလေ..”“……အင်း……”“ထပ် ထွက်နေတယ်.. ငါ နေရတာ ချောကျိကျိနဲ့ ဟယ်..”“……ဟားး……”“ခုနေ နင့်ဟာကြီး ထိုး ထည့် လိုက် ရင်..”“……အားး ဖွေးး..……”“ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ..”“……ဖွေး ရယ်..……”“ဘယ်လိုများ နေမလဲ..”လေသံထက်
နည်းနည်းပဲ ပိုကျယ်သည့် သူမ အသံလေးက ကြားဖူးသမျှတွင် အချိုသာဆုံးနှင့် မိမိ နှလုံးသားကို အလှုပ်ကိုင်နိုင်ဆုံး ဖြစ်နေသည်။ တစ်လုံးခြင်း ပြောနေသည့်
သူမစကားသံတို့က ညင်သာ သိမ်မွေ့သလောက် ကြားနေရသည့် မိမိ ရင်ခုန်သံများကတော့
၀ုန်းဒိုင်း ကျဲနေပြီ။ ခုနေများ မိမိ သွေးများကို ဖောက်ထုတ်ပြီး လောင်စာဆီအဖြစ် သုံးမည်ဆိုလျှင် ရထား အစင်းပေါင်းများစွာ ခုတ်မောင်းနိုင်လိမ့်မည် ထင်သည်။ သခင်မ၏ ညှို့ငင်သံ နောက်တွင် ညီတော်မောင်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် လက်များကိုလည်း မရပ်မနား အလုပ်ပေး နေမိတော့သည်။ မိမိ စိတ်များ ထန်နေတာ ကြာပြီမို့ သိပ် မဆောင်ရွက်လိုက်ရဘဲ ခရီးဆုံး ရောက်သွား၏။ အန်ထုတ်လိုက်သည့် သုတ်ရည်များက မနည်းလှသော်လည်း ကံကောင်း ထောက်မစွာဖြင့် ပင်တီလေးအတွင်းမှာပဲ ကိစ္စ ပြီးသွားသည်။ လူက မောဟိုက် နွမ်းချိပြီး ဒူးထောက်နေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်ရသည်။ သခင်မလေးကို မသိမသာ ခိုးကြည့်လိုက်၏။ နှုတ်ခမ်းလေး စုချွန်ပြီး ကျေနပ်အားရပုံ အပြည့်နှင့်။ နေမင်းလို စွမ်းအားကြီးသည့် ညှို့မျက်ဝန်းများက
မထိတထိ ပြုံးနေသည်။ “ပြန်တော့…”“အွန်..”“မအွန် နဲ့.. ငါ နားချင်ပြီ.. နင် ပြန်တော့.. မေမေ ပြန်ရောက်မှ လူကြီး စုံရာနဲ့ စကားပြောဘို့ ရက်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်.. ဒီကြားထဲ နင့်ကို ငါ တွေ့လည်း မတွေ့ချင်ဘူး.. အသံလည်း မကြားချင်ဘူး..”“ဖွေး.. ဒါ ဒါ ဆို.. နင် ငါ့ကို..”“အင်း.. နင် ထင်တဲ့တိုင်းပဲ.. ဒါမယ့် အခု ပြန်ဆိုတာ မပြန်ဘဲ ဆက်နေနေရင်တော့ ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက် ပြောင်းချင် ပြောင်းသွားမှာနော်..”“ဟိုလေ.. ဖွေး.. ငါ့မှာ ပြောစရာ..”“စူးးးရှ…”“ဟူးးး.. အေး အေး.. အေးပါ.. ငါ ပြန်ပါ့မယ်.. ဖုန်း မျှော်နေမယ်နော် ဖွေး..
အခန်း (၂၀)(ဇာတ်သိမ်း)(၁) လ ခန့် ကြာသော်…မှန်ပြတင်း၏
ခန်းစီးများ ကြားမှ အလင်းဖျော့ဖျော့နှင့် အတူ နှင်းဖွေးဖွေး အိပ်ရာ နိုးလာခဲ့သည်။ ကြည်လင်သော စိတ်အစဉ်နှင့် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်၏။ မိမိ နောက်ကျောဘက်တွင် နွေးထွေးသော ရင်ခွင် တစ်ခု။ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ဖက်ထားသည့်
သူ့လက်ကို အသာ မ ယူပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် လှည့်လိုက်သည်။ ထူထဲသော မျက်ခုံး၊ ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အနေနှင့် ကြည့်ကောင်းသည် ဆိုရုံ ခပ်တိုတိုစိုက်စိုက် မျက်တောင်များ၊ ပိရိ သေသပ်သော နှုတ်ခမ်းနှင့် စိမ်းမြမြ
ပါးသိုင်းမွေးလေးများ။ ခုလို အနီးကပ် သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့လည်း ငါ့ ယောင်္ကျားလေးက ချောသား ဟု တွေးရင်း ပြုံးမိ၏။ ရင်ခုန်ရသည့် ထိုနေ့ ပြီးနောက်
သုံးရက်မြောက်တွင် နှစ်ဘက် မိခင်နှစ်ဦးနှင့် ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီး အချို့ ခြံရံပြီး သူတို့ နှစ်ဦး စေ့စပ်ခဲ့ကြသည်။ သတို့သား၏ ဖခင် ဖြစ်သူ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့်လည်းကောင်း၊ တစ်နှစ်တည်း ကျင်းပခဲ့ပြီးသော အမဖြစ်သူ၏ မင်္ဂလာပွဲကြောင့်လည်းကောင်း သူတို့နှစ်ဦး၏ ထိမ်းမြားခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက် အကျဉ်းရုံးခဲ့၏။အမှန်တော့ ဖွေး ကိုယ်တိုင်ကလည်း တဆောင်တယောင် မင်္ဂလာပွဲများကို မနှစ်သက်။ လာရောက် ချီးမြှင့်ရသူအတွက် မထောင်းသာဟု တွေးမိသည်။ သည်ပွဲကို လာရန်အရေး ၀တ်စား ပြင်ဆင်ရသည်။ လက်ဆောင် စီစဉ်ရသည်။ အခမ်းအနားထဲ ရောက်ပြန်တော့ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီဟု မပြောမချင်း စားသောက်ဖွယ်ရာများ ရှေ့ချပြီး ဟန်ကလေးနှင့် ထိုင်နေရပြန်သည်။ ထို့ထက် ဆိုးသည်က တည်ခင်းသော စာကောင်းသောက်ဖွယ်များကို အလှမပျက်အောင် သတိထား စားရသေးသည်။ မိမိဘက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း မင်္ဂလာ အချိန်ကလေး နှစ်နာရီခန့်အတွက် သေကောင်းပေါင်းလဲ ပြင်ဆင်ရသည်။ ဧည့်ပရိတ်သတ် တစ်ခုလုံး၏ အာရုံက မိမိဆီမှာမို့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ရသေးသည်။ နောက်ဆုံး ဧည့်ခံချိန် ကုန်၍ ပွဲပြီးချိန်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ လှလို့ လှမှန်းပင် မသိလိုက်။ အပြီးသတ်တော့ အဖတ်တင်တာက သက်မဲ့ ဓာတ်ပုံများသာ။ ဓာတ်ပုံဟု တွေးမိတော့ နံရံဆီသို့ အကြည့်ရောက်သွား၏။ပန်းနုရောင် နံရံကပ်စက္ကူလေးများနှင့် အလှဆင်ထားသော ကြင်စဦး မောင်နှံ၏ အိပ်ခန်းကျယ်ကြီးထဲတွင် လှပသော ၀တ်စုံ အမျိုးမျိုးဖြင့် စိတ်ကြိုက် ရိုက်ကူးထားသည့် မင်္ဂလာစုံတွဲ ပုံများ နေရာတကျ ချိတ်ဆွဲထားသည်။ မင်္ဂလာစားရိတ် အတွက် ကုန်ကျမည့် ငွေများကို ဖွေး စိတ်တိုင်းကျ ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဖွေး စိတ်က တစ်မျိုး၊ လူမှုရေး ကူညီမှုများတွင် အဘိုးအဘွားများကို ထောက်ပံ့ရခြင်းအား အထူး နှစ်သက်၏။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ကလေး လူငယ်များအတွက်က မိမိဘ၀ကို ပြုပြင်ထိန်းကျောင်း စီမံနိုင်ရန် အချိန် အများကြီး ရှိသည်။ ခွန်အား ရှိသည်။ အခွင့်အရေး များသည်။ ဘ၀၏ နေ၀င်ချိန်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဘိုးဘွားများကတော့ သည်သို့မဟုတ်၊ သူတို့၏ လက်ရှိဘ၀ အခြေများသည် ပြုခဲ့ပြီးသော အားထုတ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ၊ မကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ ပင်ပန်းအားလျှော့ကြရှာပြီမို့ အကူအပံ့ ပိုမို လိုအပ်သည်ဟု ဖွေး ယူဆသည်။ သဘောကောင်းသည့် သူဌေး လင်တော်မောင်က ဖွေး အလိုကို တစ်သွေ မတိမ်း ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။နံရံပေါ်ရှိ ဓာတ်ပုံများ အနက် အလှပဆုံးဟု သူမ ယူဆသည့်ပုံ။ ဓာတ်ပုံထဲတွင် ဖြူဖွေးလွ နေသည့် မင်္ဂလာဂါဝန်ကြီးနှင့် သူမက ခုံပေါ်တွင် ခြေလေး ချိတ်၍ ထိုင်နေသည်။ အဖြူရောင် အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံနှင့် သတို့သား ချောချောလေးက သူမ ရှေ့တွင် ဒူးထောက်လျှက်။ ကြိုးသိုင်း ဖိနပ် ဖြူဖြူလေး စီးထားသည့် သူမ ခြေဖမိုးကို အနမ်းပေးနေသည်။ တကယ်တမ်း ထိုမြင်ကွင်းက တမင် လုပ်ယူခြင်း မဟုတ်ခဲ့။ ထိုနေ့က ဓာတ်ပုံ စတူဒီယိုတွင် စိတ်ကြိုက် ပုံများ ရိုက်ကူးနေစဉ် ကင်မရာမန်းက သူ့ကို အထူး တလေးတစား ဆက်ဆံနေတာ သူမ တွေ့ရသည်။ စိတ်ထဲတွင် သူ့ကို နောက်ချင်သွား၏။ နားနားကပ်ပြီး ခပ်တိုးတိုး ပြောခဲ့သည်။ “နင့်ဘာနင် ဘာကောင်ကြီး ဖြစ်နေနေ.. နင်က ငါ့ ကျွန်ပဲ စူးရှ.. အဲ့ဒါကို ဘယ်တော့မှ မေ့မသွားနဲ့..” ဟူ၍။ မိမိ စကားသံ ဆုံးသည်နှင့် သတို့သား ကိုလူချောလေးက မိမိ ရှေ့တွင် ဒူးထောက် လိုက်၏။ မိမိ မျက်နှာကို မော့ငေးရင်း ချိတ်ထိုင်ထားသည့် ခြေထောက်လေးပေါ် အုပ်နေသည့် ဂါဝန်စကို အသာ မ သည်။ ပြီးနောက် ဖြူဖွေးနုဖတ်နေသည့် ခြေဖမိုးလှလှလေးပေါ် အနမ်းပွင့်များ ချွေချသည်။ လက်သွက်သော ကင်မရာမန်းက အမိအရ မှတ်တမ်းတင်လိုက်သဖြင့် ဤနှယ် ကဗျာဆန်သော အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့၏။ ကင်မရာမန်း ကောင်လေးရှေ့တွင် မိမိက တစ်စုံတစ်ရာ မတောင်းဆိုပါပဲ
ခြေထောက်ကို တယုတယ နမ်းပြခဲ့သည့် သူ။ မိမိရင်ထဲမှ အချစ် ရေလျှင်က သူ့အပေါ် ရေတံခွန် တစ်ခုအလား ပြိုဆင်းကျသွားရသည်။ သည်လိုနှင့် ရင်ခုန်စရာ မင်္ဂလာညကိုတော့ မိမိ လုပ်နေကျ ပေါက်ကရ နိုင်လိုမင်းထက် အပြုအမူများ မပါဘဲ ကြင်စဦးတို့၏ သာယာချိုမြိန်ခြင်း အတိဖြင့် ကုန်ဆုံး စေခဲ့သည်။ “မောင်…”
သူ့မျက်နှာကို အနီးကပ်ကြည့်ရင်း တိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်၏။ မိမိထံတွင် တစ်သက်လုံး အနိုင်ကျင့်ခံပါ့မည် ဟူသော ကတိ ပေးခဲ့သည့် ကောင်ကလေး။ သည်လိုလေးတော့ သူ့ကို ခေါ်ဘို့ တိုက်တွန်းရှာသည်။ မောင်.. မောင် တဲ့လား.. ခိခိ..။ ချစ်သူ လင်မယားကြားမှ အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးအနက် မိန်းကလေးဘက်က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှိလှသော အခေါ်အဝေါ်လေးဟု ဖွေး ဘာသာ သုံးသပ်မိသည်။ ချစ်ဘို့ ကောင်းတဲ့ မောင်.. အနိုင်ကျင့်လို့ ကောင်းတဲ့ မောင်.. ခိုင်းချင်တာ ခိုင်းလို့ ရတဲ့ မောင်.. ခိခိ။ သည်လို တွေးကာမှ ဗိုက်က ဆာသလိုလို ဖြစ်လာ၏။ နံရံကပ် နာရီကြီးက နံနက် ရှစ်နာရီ ခွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း
ညွှန်ပြရင်း မိမိ အစာအိမ်ကို ပိုမို လှူံ့ဆော်နေသည်။ ခုနေများ ပေါင်မုန့်မီးကင်လေး နှင့် ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက်လောက် သောက်ရပါလျှင်…။“မောင်..”“………”“မောင့်.. ထ ကွာ.. ဗိုက်ဆာလို့ တစ်ခုခု လုပ်ပေး..”“………”“မောင့်.. မောင် လို့… ထ ပါတော့ဆိုနေ ကြည့်..”သည်လောက်
နှိုးရခက်နေမှတော့ လင်တော်မောင် အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေပြီမှန်း ဖွေး သိလိုက်ပြီ။ ပြုံးယောင်ယောင် နှုတ်ခမ်းများက ဖွေး အထင်ကို ပိုသေချာအောင် သက်သေ ပြနေ၏။ ကောင်စုတ်လေး.. တစ်သက်လုံး ကျွန်ခံပါ့မယ် ကတိပေးထားပြီးတော့ ခိုင်းတာ ထ မလုပ်ပေးဘဲ ဇိမ်ခံနေတယ်.. မဟုတ်မှ လွဲရော.. တမောင်မောင်နဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ ခေါ်ပြနေလို့ သူ့ ပြောမှန်း မသိတာပဲ ဖြစ်ရမယ်..။ သခင်မ နှင်းဖွေးဖွေး ဒေါသ ထွက်လာ၏။ အသံ မထွက်အောင် အသာလေး ထ ထိုင်လိုက်သည်။ မိမိဘက် လှည့်ပြီး တစောင်း လှဲအိပ်နေသည့် သူ့ နားရွက် နား မျက်နှာ တိုးကပ်လိုက်၏။ လည်ချောင်း တစ်ချက် ရှင်းပြီး နားနားကပ် အသားကုန် အော် ပစ်လိုက်သည်။“စူးးးးးးးးရှ….”“အားးးး… အာ.. လန့် ထာ မိန်းမရယ်..”“ဘာ မိန်းမလဲ.. ပါးပိတ်ရိုက်လိုက်ရ.. လန့်ရင် သေလိုက်ပါလား.. ဒီလောက် ခေါ်နေတာ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်.. ကောင်စုတ်..”“ဟဟ.. မောင် လို့ ခေါ်နေတာလေး ကြည်နူးလွန်းလို့ပါ ကွာ..”“ကြည်နူးရင်
ခေါ်နေတုန်း ခိုင်းတာ ထ လုပ်လေ.. စိတ်တိုအောင် လုပ်ရင်တာ့ တန်ရာတန်ရာပဲ ရမယ်နော်.. ငါ့ ဘာမှတ်နေတုန်း.. သွား.. မနက်စာ သွားပြင်..”“ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ.. သခင်မ အမိန့်တော် အတိုင်းပါ.. ရွှတ်..”ပြောရင်းနှင့်
မိမိ ပါးလေးကို ရွှတ်ကနဲ တစ်ချက် နမ်း သွားသေးသည်။ ကုတင်ပေါ်မှ ကုန်းရုန်း ဆင်းသွားသော သူ့ကျောပြင်ကို မှီသလောက် လှမ်းရိုက်ရင်း.. “ဘာ မောင် လဲ.. ဘာ မိန်းမ လဲ.. မသာကောင်.. ကျွန်စုတ်.. နင်နဲ့ အဲ့နံမည်နဲ့ပဲ လိုက်တယ်..” အော်ဖြစ်အောင် အော်လိုက်သေး၏။ အခန်း အပြင် ရောက်သွားပြီးမှ တံခါးကြားကနေ သူမကို မသိမသာ ပြန် ခိုး ကြည့်လိုက်သည်။ လင်ဖြစ်သူကို မနက်စာ ပြင်ရန် အမိန့်ပေးပြီး အိပ်ရာထဲတွင် ခပ်တည်တည် ကျန်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်မ ပေါက်စလေး။ ခေါင်းအုံးလေး ဖက်ပြီး ဇက်ကလေး ပုကာ ပြုံးစိစိ လုပ်နေပုံက ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းလှသည်။ မီးဖိုခန်းထဲ ကမန်းကတန်း ပြေးဝင်ပြီး ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ်ချင်းစီ ကင်လိုက်၏။ ကော်ဖီ ဖျော်ရန် ရေနွေးတစ်အိုး ကောက်တည်လိုက်ရင်း မျက်နှာကို မီးဖိုခန်းရှိ ဘေစင်တွင်ပဲ ခပ်သွက်သွက် သစ်လိုက်သည်။ ပေါင်မုန့်ကင်များတွင် မယိုးနိစ် ပါးပါးလေး သုတ်သည်။ ကြက်ဥ နှစ်လုံး ကြော်ပြီး သူမစိတ်ကြိုက် ကော်ဖီခါးခါး နှစ်ခွက်ဖျော်သည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ထားသော မနက်ကလေးစာကို ဗန်းကလေးထဲ ထည့်ပြီး အိပ်ခန်းဆီ ပြန်ရောက်တော့ သခင်မလေးက လက်ပ်တော့ပ် တစ်လုံးနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေ၏။
“ဘာတွေများ ဒီလောက်တောင် စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေတာလဲ ဖွေး..” အနားသို့ တိုးကပ်လိုက်တော့ သူမထံမှ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာရနံ့လေးနှင့် သွားတိုက်ဆေးနံ့ ရနေသည်။ စားသောက်စရာများကို စားပွဲပေါ်တင်ရင်း အကြည့်က လက်ပ်တော့ပ်လေးဆီ အရောက်၊ ညစာစားပွဲ ဓာတ်ပုံလေးများ ထိုင်ကြည့်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ သူမ တင်ထားလက်စ ပုံလေးက သူတို့ စုံတွဲနှင့် မြတ်တို့ မိသားစု တွဲရိုက်ထားသည့်ပုံ။ စူးရှ ပျော်သွား၏။ ယနေ့ထက်ထိ ရှင်းပြခွင့် မရသေးသည့် ကိစ္စကို သူမ မေးတော့မည် မဟုတ်ပါလား။ ချစ်ဇနီးလေးက ပုံထဲမှ ကလေးမျက်နှာကို တစ်လှည့်၊ သူ့ကို တလှည့် ကြည့်သည်။ သူ ပြန်ပြုံးပြတော့ နှုတ်ခမ်းကို မဲ့ပြပြီး မျက်စောင်း ထိုး၏။ “ယောင်္ကျားတွေများ ကောင်းကို မကောင်းဘူး..”“ဟောဗျာ.. နေရင်း ထိုင်ရင်း..”“ဘာ
နေရင်းထိုင်ရင်းလဲ.. မဟုတ်လို့လား.. အဲ့တုန်းကတော့ ဒီကိစ္စကို ရှင်းချင်လွန်းလို့ အသဲအသန်လေ.. အခု လိုချင်တာ ရသွားတော့ ရှင်းဘို့ စိတ်ကူး
မရှိတော့ဘူးမှတ်လား..”“အာ.. စိတ်ကူး မရှိဘဲ နေမလားကွ.. ဖွေး ပဲ မပြောနဲ့ ဆို ကဲ..”“…….”“တကယ်က အဲ့ကလေးနဲ့ ငါနဲ့ ဘာမှ မပါတ်သက်ဘူး ဖွေးရဲ့..”“………”“အဲ့တုန်းက မြတ် ရောက်လာခဲ့တာ ငါ့ကို သူ့ပြဿနာအကြောင်း ပြောဘို့ ရောက်လာတာ..”“………”“မြတ်က ပထွေး နဲ့ နေရတာ ဖွေး.. ပထွေးအနိုင်ကျင့်လို့ သူ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာ.. အဲ့အကြောင်း သူ လာပြောတာ..”“အော..
အာ့ကျမှ ပထွေးထက် ဆိုးတဲ့ကောင်နဲ့ တိုးသွားတာပေါ့လေ.. ဟုတ်လား.. ကြည့်စမ်း.. အဖြစ်မှန် သိရမှ နင့်ကိုငါ ပိုတောင် ရိုက်သတ်ချင်သွားတယ်.. မသာ.. တွေ့မယ်.. ဒီလောက် နန့်နန့် ထိုးနေတဲ့ကောင်..”“ဟုတ်ပါတယ် ဖွေးရယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ တကယ် မှားသွားခဲ့တာပါ..”“နေစမ်းပါဦး.. ပထွေး အနိုင်ကျင့် ခံရတယ်ပဲ ထားပါတော့.. ကလေးရတဲ့ထိ ဖြစ်ရောလား..”“အဲ့ရက်က
သူ ဖျားနေလို့ ဆေးသောက်ပြီး အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အိပ်ပျော် နေတာတဲ့.. နေမကောင်းတာရယ်.. အလိုမတူတာရယ် ဆိုတော့ ကိစ္စ ဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန် အိပ်ရာထဲ လဲတဲ့ထိ ဖြစ်သွားတယ်.. ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအတွက် ဘာအကာအကွယ်မှ မလုပ်လိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး..”“အမေနဲ့ တိုင်ပေါ့ ဟ.. အာ့လိုသာ ကျိတ်ခံနေ သေရချည်ရဲ့..”“မြတ်
အမေက တစ်မျိုးကြီး ဖွေးရဲ့.. သူ့ယောင်္ကျားကို တအား ယုံကြည်တာ.. မြတ်က သူအမေ
အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မှာ၊ သူလည်း အရှက်ကွဲမှာ အကုန် တွေးတယ် ထင်ပါရဲ့.. ပြီးတော့ သူက လိင်ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဗဟုသုတ နည်းတယ်.. နေမကောင်းကလည်း ဆက်ဖြစ်သွားတော့ အဲ့ရက်တွေမှာ ဟိန်းဇော်နဲ့လည်း မတွေ့ဖြစ်ဘူးတဲ့လေ.. ”“အာ့နဲ့ပဲ နေလည်း ကောင်းရော.. ဗိုက်က ဖြစ်နေ.. ဟိန်းဇော်နဲ့ အရင် မတွေ့ဘဲ နင့်ဆီ အရင် လာတယ်ပေါ့.. ”“အမှန်တော့ ဟိုကောင့်ဆီ သွားတာ ဖွေးရဲ့.. ချိန်းထားပြီးမှ ဟိုကောင်က မလာတာ.. အာ့နဲ့ပဲ..”“အာ့နဲ့ပဲ
နှစ်ထပ်ကွမ်း ၀မ်းနည်း အားငယ်ပြီး ရောက်လာတဲ့သူကို နင်က ကိုယ်ဖိရင်ဖိ နှစ်သိမ့် လိုက်တယ် ဆိုပါတော့.. ဟွန်းးး.. ကြားရတာ ဒေါသ ထွက်တယ်.. တကယ်ပဲ..
ငါကိုယ်က မကောင်းတာပါ.. ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို လိုက် အရေးလုပ်နေမိတယ်..”“အဲ့လိုတော့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ဖွေးရယ်.. ငါ တကယ် မှားခဲ့တာပါ.. အဖြစ်မှန် သိလိုက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပို ရှက်မိတယ်.. ခွေးထက် မိုက်တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးများလား လို့..”“နင် သွားမေးတာလား မြတ်ကို..”“သူ
ကိုယ်တိုင် လာပြောတာဖွေး.. သူ့သဘောနဲ့သူ လာပြောတာ.. ငါ့ကို အိမ်က မိန်းမ ပေးစားတော့မယ် ကြားလို့တဲ့.. ကလေး ကိစ္စ ငါ့ စိတ်ထဲမှာ အစိုင်အခဲ ဖြစ်သွားတာ
မြတ် သိတယ်လေ.. ငါနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဆိုတာ စိတ်ရှင်းစေချင်လို့တဲ့.. လိုအပ်ရင် ဒီအင်အေ စစ်ချင် စစ်ပါတဲ့.. ပြီးတော့ ဒီကိစ္စက ငါ့ အမှား ဆိုတာထက်
သူ ငါ့ဆီ မရောက်လာသင့်တဲ့ အချိန် ရောက်လာမိလို့ ဖြစ်သွားတာ လို့ပဲ သဘောထားတယ်လို့ ပြောသွားတယ်..”“ပျော်သွားတယ် ပေါ့..”“မပျော်ပါဘူး..
ကလေး ကိစ္စ စိတ်ထဲ ပေါ့သွားပေမယ့် ကိုယ့်ဆီ အားကိုးတကြီး ရောက်လာတဲ့သူကို မလုပ်သင့်တာ လုပ်မိတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်က အပြစ် ပိုကြီးသွားသလိုပဲ.. သူ လာရှင်းပြပေးတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်တာပေါ့..”“အာ့နဲ့ပဲ ဆပ်လိုက်သေးလား ကျေးဇူး..”“အာ..”“ပြောလို့
ရမလား.. ငါက နင့် ဒိုင်ယာရီ ကို အရည် ကျိုသောက်ထားတာနော် စူးရှ.. နှင်းဖွေးဖွေး စောက်ချဉ် မဟုတ်ဘူး.. မိန်းမချင်း ဟိုမြင်ဒီမြင် မြင်ရတာ တစ်ဘက်သား သိက္ခာကို အားနာလို့.. ကိုယ်နဲ့ မပါတ်သက်ခင်က ကိစ္စ ဆိုပေမယ့်.. အတိတ်ဆိုတာ အနာဂတ်ကို အနည်းနဲ့ အများတော့ သက်ရောက်မှု ရှိတယ် ဟဲ့.. ငါ နဲ့ မတွေ့ခင်က ကိစ္စ ဆိုပေမယ့် သိပြီးတဲ့နောက်တော့ ခေါင်းထဲကနေ လုံးဝကြီး ထုတ်မပေးနိုင်ဘူး.. သဘောပေါက်..”“အင်းပါ.. ငါကလည်း ထုတ်ပေးဘို့ မတောင်းဆိုပါဘူး.. ငါ့ကို တစ်သက်လုံး မျက်စိ ဒေါက်ထောက် စောင့်ကြည့်.. ငါ မှားခဲ့တဲ့ အမှားအတွက် နား နား ပြီး အပြစ်ပေးလေ.. နော်..”“အွမ်းး.. ကိုယ့်စကားနဲ့ ကိုယ်နော်.. ခိခိ..”သဘောကျသည့်
အပြုံးလေးနှင့် တခိခိ ရယ်သံလေးက သူမ မျက်နှာ နုနုလေးကို ပိုမို ကလေး ဆန်သွားစေသည်။ သခင်မလေး ပျော်နေမည် ဆိုလျှင် မိမိဘ၀ ပြည့်စုံပြီ။ မိမိတို့နှစ်ဦး စေ့စပ်သည့်နေ့က ယောက္ခမကြီးနှင့် သူ နှစ်ဦးတည်း စကားပြောဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ မွှေးနှင့် ယှဉ်ပြီး ခံစားချက် ပြင်းထန်ခဲ့ရသည့် ဖွေး ဘ၀လေးအကြောင်း တစေ့တစောင်း ပြောပြသည်။ ပြီးတော့ ကောင်းမြတ်၏ အပြောအဆို
အချို့မှ တဆင့် ဖွေးကို ခပ်နှိမ်နှိမ် ဆက်ဆံကြသော မိသားစု အနေအထားကိုလည်း သူ မှန်းဆမိခဲ့သည်။ မြတ်နိုးရပါသော သခင်မလေး နာကျည်းချက် ရှိသမျှ ဖြေဖျောက်ပေးမည့်သူမှာ မိမိ တစ်ဦးတည်းသာ ဖြစ်ချင်သည်။ သူမ၏ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးက သူမကို မော်မကြည့်ရဲလောက်အောင် မိမိ လက်နှင့် မြှင့်တင် ပေးလိုသည်။ သူမ အတွက် သူသည်သာ သူရဲကောင်း ဖြစ်လိုသည်။ ဒေါသ ထွက်လာတိုင်း ပေါက်ကွဲသမျှ လည်စင်းခံမည့် ကျွန်တစ်ကောင်လည်း သူပဲ ဖြစ်လိုသည်။
“ဗိုက်ဆာပြီဆို သခင်မလေး..”“အွမ်း.. စားမယ်.. နံရံမှာ ထပ်ချိတ်ချင်လို့ ပုံ ရှာနေတာ..”“အဲ့ပုံလေးလည်း ကောင်းသားပဲ.. အမြွာညီအမ စုံတွဲ..”“ခိခိ.. နင် ခွဲနိုင်လား ငါ နဲ့ မွှေး ကို..”“အာ ဘာလို့ မခွဲနိုင်ရမှာလဲ.. ဟိုကောင် ငကောင်းတော့ မသိဘူး.. ငါတော့ ခွဲနိုင်တယ်..”“ဒါနဲ့များ ကောင်းမြတ်ဆီက ငါ့ပုံတွေ့တော့ ရှော့ခ် ရ သွား ဆို..”“အင်းလေ.. အာ့က ဓာတ်ပုံ ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရတာကိုး.. ပြီးတော့ မွှေးနဲ့ နင့်ကို အမြွာလို့ သိထားတာမှ မဟုတ်တာ..”“ခိခိ.. အာ့နဲ့ပဲ ငါ လင်ယူပြီဆိုပြီး လန့်သွား ပေါ့လေ.. ဟုတ်စ..”“အွန်းပေါ့ ကွ.. ကိုယ် ကြွေနေတဲ့ သခင်မလေး သူများ ဦးသွားပြီ မှတ်တာပေါ့.. ဒီကောင်က သခင်မဆီမှာ ဘဝကြီး ပုံအပ်ချင်နေတာကိုး..”“ဟားဟား.. ငပေါကြီး.. အဲ.. နေဦး.. ခိခိ..”“အွန်း..”“စူးရှ..”“ခင်ဗျ..”“ခုနေလေ.. ဟီဟိ..”“အွန်း.. ပြော.. ခုနေ ဘာဖြစ်လဲ..”“ငါ့ကို တခြား ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ယောက်က အဝှာ လုပ်နေတာ တွေ့ရင် နင့်စိတ်ထဲ ဘယ်လို နေမလဲ.. ဟိ..”“အာ..”“နင်ကျတော့
ငါမဟုတ်တဲ့ တခြားမိန်းမကို လုပ်တယ်လေ.. အာ့က အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီလို့ ဆင်ခြေ မပေးကြေး.. စိတ်ကူးကြည့် စိတ်ကူးကြည့်.. ခိခိခိ..”“ကျန်ကျန် ဖန်ဖန် ကွာ.. ချစ်ကလည်း.. အဲ့လောက်ကြီးတော့ မရက်စက်ပါနဲ့..”“ခိခိ..
ဒီမှာ.. ကြည့် ကြည့်.. ငါ ဟုတ်ဘူးနော်.. ဒါပေသိ ငါ့ မျက်နှာ ဖြစ်နေတော့ နင့်စိတ်ထဲ ဘယ်လို နေမလဲ လို့.. ဟီဟိ.. ထ မလာနဲ့နော်.. အပြီးထိ ကြည့်.. ငါတော့ စားနှင့်ပြီ..”ပြောပြီး ထိုင်ရာမှ ထ ကာ စားစရာ ဗန်းကလေး ကိုင်ပြီး နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာကြီးပေါ် သွားကာ ထိုင်စားနေတော့၏။ မော်နီတာလေးတွင် မွှေးတို့ စုံတွဲ ပေါ်လာသည်။ မီးဖိုခန်းတွင် မီးတောက်မတတ် အချစ်ကြမ်းနေကြသည့် မြင်ကွင်း။ သခင်မလေးကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တော့ ပုခုံးလေး တွန့်ပြီး လျှာထုတ်ပြသည်။ စူးရှ ခေါင်း ယမ်းရင်း ပြုံးမိ၏။ လတ်စသတ်တော့ သည်အိမ်ထဲမှာ စီစီတီဗွီ ကင်မရာတွေ တပ်ထားတာပဲ။ တော်တော် ဆိုးတဲ့ ကလေးမပါလား။ ခေတ်မိန်းကလေး တစ်ဦးအနေနှင့် အပြာကားကြည့်ဖူးတာ သိမ်းထားတတ်တာလောက်က အထူးပြောနေစရာ မလိုသော်လည်း သူမ ကူးထားပြီး ဖွင့်ကြည့်နေသည့် ဇာတ်လမ်းထဲမှ ဇာတ်ကောင်က သူမနှင့် မကြာခဏတွေ့နေသည့် ခဲအို။ ကြည့်နေရင်း လူက အူတိုလာသည်။ တကယ်ပဲ ကိုယ့်မိန်းမ မျက်နှာနှင့် မိန်းကလေးမို့ သာမာန် အပြာကားတစ်ပုဒ်ကို ကြည့်ရသည့် ဖီးလ်နှင့်တော့ လုံးဝ မတူ။“ပြီး သွားပြီလား..”“အွန်း..”“မြန်လိုက်တာ.. နင် ကျော်ပစ်တာမှတ်လား..”“ကောင်းလား စားလို့..”“ဟမ် လို့ စူးရှ.. ဘယ်လိုနေလဲ.. ဟီဟိ.. ငါ့မျက်နှာနဲ့ နင့် ကာစင်နဲ့လေ.. ခိခိခိခိ..”“ဘယ်လိုမှ နေဘူး.. မျက်နှာတူတာ ဘာဖြစ်လဲ.. မတူတဲ့ နေရာ မတူဘူး..”“အောင်မယ်.. ဘယ်နား မတူလဲ ကဲ.. အဲ့နေရာက မိန်းကလေးတိုင်း ဒါက ဒါပဲ..”“တူဘူး.. သားသား ခင်မက မှဲ့လေး ပါတယ်.. သူများထက် ပိုလှတယ်..”“ခိခိခိခိ..”“လာကွာ.. ခင်မလေး.. ထ..”“အမ်.. ဘာလုပ်မို့တုန်း.. ဒီမှာ မစားတော့ဘူးလား..”“စားတော့ဘူး.. မှဲ့လေး အကြောင်း ပြောတော့ ဆာတာ ပြောင်းသွားပြီ..”“အယ်..”“အာမွ ပေးချင်လို့လေ.. မှဲ့လေးကို.. ရဘူးလား..”“ခိခိ.. မှဲ့ဆို မှဲ့ပဲနော်.. ကျန်တာ ပိုထိမိ လို့ကတော့..”“အွန်း.. ပြော.. ပို ထိမိရင် ဘယ်လို အပြစ်ပေးမှာလဲ..”“ဒီ မျက်ခွက်ကိုလေ.. အဲ့ မျက်ခွက် အစုတ်ပလုပ်ကို.. ဒီလို.. ဒီလို မျိုး..”“လာ.. ရတယ်.. အဲ့လို အပြစ်ပေးမယ် ဆိုလို့ကတော့.. စူဠလိပ် ရေထဲ လွှတ်သလိုသာမှတ်.. လာခဲ့..”“ဟဲ့ ဟဲ့.. ပလုတ်တုတ်.. ငါ စားနေတာ မပြီးသေးဘူးဟဲ့ ကောင်စုတ်ရဲ့.. နင် တကယ် သေချင်လို့လား ဟုတ်လား.. ချပေး.. ခုချက်ချင်း.. အိုးးး…”“……..”“……..”“ရှီးးး.. အ.. စူးရှ..”“……..”“အ.. အ.. နင်ပြောတော့ မှဲ့ဆို.. အိုးး.. ရှီးး..”“……..”“အင်းးး… တအား.. စုပ်.. အ.. ရှီးး..”“……..”“စူးရှ.. ငါ.. ငါ မရတော့ဘူး.. မြန်မြန်..”“……..”“အင့် ဟင်းဟင်းးး.. ဟူးးးး”“……..”“……..”“……..”“မောင်ရယ်.. ငါ တစ်သက်လုံး နင့် သခင်မ လုပ်မယ် နော်…”<<<<<ပြီးပါပြီ>>>>> Posted by